တိုင်းရင်းသားများသတင်း, တိုင်းရင်းသားအကြောင်း, မော်ကွန်း
(No. 62 , October 2, 2020)
၁။ ကော့ကရိတ်လမ်းဟောင်း တပ်မတော်သားပစ်သတ်ခံရမှုကိစ္စ စွပ်စွဲပြောဆိုမှု အခြေအမြစ်မရှိကြောင်း KNU တုံ့ပြန်
၂။ လူနှစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့သူ လူတစ်စုကို ကော်သူးလေတရားရေးအရ အရေးယူနိုင်ရန် စီစဉ်
၃။ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ၏ မွန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုကိုယ်စားလှယ်လောင်း မွန်ပြည်သစ်နယ်မြေတွင် မဲဆွယ်မရဖြစ်နေ
၄။ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေ အဝင်အထွက်အားလုံး ပိတ်
၅။ ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်း RCSS/SSA လှုပ်ရှားရာ တောပိုင်းသို့ အစိုးရတပ်ပစ်ခတ်
၆။ ချင်းပြည်နယ် ဒုတိယအကြိမ် မဲစာရင်းပထမအကြိမ် မဲစာရင်းထက် ၁ သောင်းကျော်လျော့နည်း
၇။ ကယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကို စွပ်စွဲပြစ်တင်မှု အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး ကြားနာမည်
၈။ မဲဆွယ်မိန့်ခွန်း ဆင်ဆာ ဖြတ်သည့်ကိစ္စ ထားဝယ်တိုင်းရင်းသားများပါတီ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
၉။ မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရယ်ကာကွယ်တားဆီးရေး လွှတ်တော်အသီးသီးသို့တင်ပြသွားရန် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီက မူဝါဒ ချမှတ်ထား
၁၀။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို လာမည့်အစိုးရလက်ထက်တွင်လည်း ဆက်လက်ကန့်ကွက်သွားမည်ဟု ဒေသခံများပြော
၁၁။ ချင်းပါတီ CNLD ကို မဲပေးထောက်ခံကြရန် ချင်းလူငယ်ကွန်ယက်တောင်းဆို
၁၂။ ဧရာဝတီ ကရင်လူငယ်ကော်မတီမှ ကရင်ပါတီ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက် ကူညီမှုများစတင်
၁၃။ နမ္မတူမြို့နယ် အတွင်း ဆယ်ကျော်သက် အမျိုးသမီးတဦး မီးရှို့ခံရသည့် အလောင်းတွေ့
၁၄။ မိုးညှင်းခရိုင်တွင် ပုံစံ (၃-က) မဲထည့်ရန်လျောက်ထားသော တပ် နဲ့ ရဲ အင်အား ၁ ထောင်ကျော်ရှိ
၁၅။ သထုံမြို့နယ်အတွင်း ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) ပါတီနှင့် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ (KPP) တို့ ပူးပေါင်းကာ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူခြင်းများ ပြုလုပ်
၁၆။ ဖလမ်းဆူရ်ဘုန်လေယာဉ်ကွင်းဖွင့်ပွဲ ယခုလ အောက်တိုဘာလထဲတွင်ကျင်းပမည်
၁၇။ လူသတ်တရားခံ တပ်မတော်သားတွေ ပြန်လွှတ်ပေးတဲ့အဖြစ်မျိုး နောင်မဖြစ်ဖို့ ကုလမှာ မြန်မာကတိပေး
၁၈။ ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီက ရုပ်မြင်သံကြားတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက် ရိုက်ကူးရေး မပြုလုပ်တော့ဟုဆို
၁၉။ မြောင်းမြမြို့နယ် ငါးမြင်းချောင်းကျေးရွာတွင် ကရင်အမျိုးသားပါတီ အောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲ ပြုလုပ်
၂၀။ ငွေပျော်စံပြကျေးရွာတွင် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းသူနှင့် သုံးစွဲသူများလာ
၂၁။ မင်းပြားတွင် နှစ်ရက်ဆက်တိုက် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
၂၂။ COVID ကာလ Stay at Home အစီအစဉ်ကြောင့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖားကန့်ဒေသရှိ သိန်းနှင့် ချီသော ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ဖွယ်ရှိနေ
၂၃။ ရခိုင်ရှိ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများတွင် ဖျားနာသူများပြားလာနေ၍ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရန် လိုအပ်နေ
၂၄။ တီးတိန်မြို့နယ် သစ်တောနယ်မြေက နေအိမ်တွေကို ဖယ်ရှားခိုင်း
၂၅။ အမ်းတွင် နောက်ပြန်လက်ပြန်ကြိုးချည် ထားသော ပုတ်ပွအလောင်း ၂လောင်းတွေ့ရှိရပြီး ပိုင်ရှင် မသိရသေး
၂၆။ ဒီဇယ်ဆီပြတ်လပ်မှုကြောင့် ပလက်ဝမြို့တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးနိုင်တော့မည်မဟုတ်
၂၇။ စောင့်ကြည့်ကြပ်မတ်တဲ့နေရာကနေ ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားသူ အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် (၁)နှစ်နှင့် (၆)လ ချမှတ်ခံရ
၂၈။ စစ်တွေမှာ ဒုက္ခသည် ထောက်ပံ့ငွေ ဖြတ်တောက်ခံနေရ
၂၉။ ကုန်တင်ယာဉ် နှင့် ခရီးသည်ယာဉ် များ ထွက်ခွာခွင့် ၁၄ ရက် ပိတ်မည်
၃၀။ ကိုဗစ်ကြောင့် ကယားပြည်နယ် အထင်ကရနေရာများ လည်ပတ်ခွင့်ပိတ်
၃၁။ မြဝတီမြို့တွင် ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ၁ ဦး သေဆုံး
၃၂။ စစ်တွေဆိပ်ကမ်းကို ရှေ့နှစ်ဆန်းပိုင်း စလည်ပတ်နိုင်ဖို့ အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာ ဆွေးနွေး
၃၃။ မြဝတီခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် Covid-19 အတည်ပြုလူနာ ၃ ဦး ဆေးကုသမှုခံယူနေ၊ ၎င်းတို့နှင့် ထိတွေ့ခဲ့သူ ၇၀ နီးပါး Quarantine ထားရှိ
October 1, 2020 787
မြဝတီ-ကော့ကရိတ်လမ်းဟောင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တပ်မတော်သားများ၏ ပစ်သတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်တွင် KNU -ကရင် အမျိုးသားအစည်းအရုံး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုများရှိကြောင်း တပ်မတော်ဘက်မှ ပြောဆိုမှု အပေါ်အခြေအမြစ် မရှိသည့် စွပ်စွဲချက်သာဖြစ်ကြောင်း KNU-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးက ပြန်လည်တုံ့ပြန် ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့က မြဝတီ-ကော့ကရိတ် လမ်းဟောင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တပ်မတော်သား ၂ ဦး ပစ်သတ် ခံရမှုနှင့် မိုင်းထောင်မှုဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်သူများကို ဖမ်းဆီးရမိထားပြီး စစ်ဆေးချက်အရ KNU တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည်ဟု တပ်မတော်ဘက်မှ ပြောဆိုခဲ့ခြင်းအပေါ် KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ပဒိုစောတာဒိုမူးက ယခုလို ပြောဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းက “နံပါတ်တစ်က ဒီကိစ္စက လုံးဝမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ သူတို့(စစ်တပ်) စွပ်စွဲတဲ့ဟာတွေကလည်း ကျနော်တို့ အတွက် အခြေအမြစ်မရှိဘူး။ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ တကယ်လို့ KNU လူဆိုရင် သူတို့မှာ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်တွေ အကုန်လုံးရှိတယ်လေ။ ထုတ်ပြောသည်ဖြစ်စေ၊ မပြောသည်ဖြစ်စေ ကျနော်တို့ မသိဘူးဒါကတော့ တပ်မတော်ဘက်ကထွက်လာတဲ့ သူပြောတဲ့ပုံစံ အရတော့ ဟိုကထုတ်ပြောလို့ပေါ့နော်။ ဒီလိုမျိုးလူတစ်ယောက်ယောက်က သူ့ပါသူပြောတဲ့ကိစ္စကို အထောက်အထား မရှိဘဲ နဲ့ ကျနော်တို့ကို အဲ့လို စွပ်စွဲတဲ့ကိစ္စမျိုးက မဖြစ်သင့်ဘူး”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျူးလွန်သူ နှစ်ဦးကို နယ်ခြားစောင့်တပ်(BGF)နှင့် တပ်မတော်တို့မှ မသင်္ကာသည့် နေရာအချို့ကို လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေစဉ် ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၂၇ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးရမိပြီး ကနဦး စစ်ဆေးချက်များအရ KNU ၏ တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည်ဟု တပ်မတော် သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ဧရာဝတီ သတင်းဌာနသို့ ယမန်နေ့ (စက်တင်ဘာ ၃၀) က ပြော ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကျူးလွန်သူများမှာ ၃ ဦးဖြစ်ပြီး ၂ ဦးကို ဖမ်းမိထားက ကျန်တစ်ဦးမှာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေဆဲ ဖြစ် ကြောင်း ဖမ်းဆီးရမိသူများ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ KNU တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များ မဟုတ်သလို ၎င်းတို့ကို မည်သူကခိုင်းစေကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆို နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းနှင့် KNU ၏ အောက်ခြေအဆင့်မှ ခိုင်းစေခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ထည့် သွင်း ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နေစဉ် ကာလအတွင်း ထိုသို့ အချက်အလက် ခိုင်လုံ မှုမရှိဘဲ အပြန်အလှန် စွပ်စွဲပြောဆိုမှုများကြောင့် လက်ရှိဖော်ဆောင်သွားနေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်များအပေါ် ထိခိုက်မှုရှိလာနိုင် ကြောင်း နှင့် ၎င်းပြောဆိုမှုအပေါ် ကန့်ကွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း KNU ဘက်က ဆိုသည်။ http://kicnews.org/2020/10 /%e1%80%b1%e1%80%80%e1% 80%ac %e1%80%b7%e1%80%80%e1%
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံခရိုင် ၊ ပိုင်ကျုံ(လှိုင်းဘွဲ)မြို့နယ်၊ သေ့မော်ကလူ့ အုပ်စုတွင် စက်တင်ဘာလ အစောပိုင်း က ဖြစ်ပွား ခဲ့သော လူနှစ်ဦးအား သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် လူတစ်စုကို ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ ကော်သူးလေ တရား ရေးအရ အရေးယူနိုင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း KNU ဘက်က ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့က နွားအငှားလာရောက်ပို့ဆောင်ကြသည့် မယ်ပလာခီး ရွာသားနှစ်ဦးအား ဒေသအ ခေါ် လယ့်ကဆောနေရာအရောက်တွင် အဆိုပါ လူအုပ်စုက ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီး မသေမချင်း သတ်ဖြတ် ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကျူးလွန်သူအပါအဝင် ညွှန်ကြားသူကိုပါ KNUမှ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အရေးယူနိုင်ရန် ဆောင် ရွက်လျက်ရှိသည်ဟု KNU အတွင်း ရေးမှူး (၂) ပဒိုစောလှထွန်းက ပြောသည်။ “ ဒီကိစ္စက ရာဇဝတ်မှု ဖြစ်တဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာအမှုကိစ္စတွေ အမှန်ဖြစ် ပေါ်ရေးအတွက်ကတော့ KNPF (ကရင်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့)ကို တာဝန်ပေးထားတာပေါ့။ ဖာအံခရိုင်၊ တပ်မဟာ (၇) ဘက်က ဖြစ်တဲ့ အ တွက် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ဘက်ကကော တပ်မဟာဘက်ကကော ဝိုင်းပြီးတော့ တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးတာပေါ့။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ ကရင်လက်နက်ကိုင်အား လုံးပါဝင်သည့် ခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးပြီး ကော်သူးလေ တရားဥပဒေ အတိုင်း စီရင်မှုများပြုလုပ်ရန် သဘောထားရှိခဲ့သော်လည်း ယနေ့အချိန်ထိ လုပ်ငန်းစဉ်၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေ တင်ပြမှုမှာ ဗဟိုသို့ မရောက်ရှိသေးကြောင်း ပဒိုစောလှထွန်းက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ လူသတ်မှုကို အဓိက ကျူးလွန်သူမှာ သုံးဦးဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် အဓိက ညွန်ကြားသူ မှာ ဒေသ၏ ဖိုးရသေ့ခေါ် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ခံယူထားသူဖြစ်ပြီး အားလုံးစုစုပေါင်း (၁၆)ဦး ခန့်ရှိ ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့ကို ခရိုင်အဆင့် ကရင်အမျုိးသားရဲတပ်ဖွဲ့-KNPF မှ စစ်ဆေးမှုအရ ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုကို ဝန်ခံထားကြောင်း KNU တပ်မဟာ(၇) တာဝန်ရှိသူများထံမှ သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ (၉)ရက်နေ့က ဖေ့စ်ဘွတ်လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်တွင် ထွက်ပေါ်လာသည့် ရုပ်သံ မှတ်တမ်းတစ်ခုအရ လက်ထိတ်ဖြင့် လက်နောက်ပြန်ခတ်ကာ မှောက်လျက်သား အရပ်ဝတ်လူ ၂ ဦး အား လူအုပ်စုတစ်စုက ရိုက်နှက်၊ ကန်ကျောက်ပြီး ဦးခေါင်း၊ လည်ပင်းနှင့် နံကြားနေရာများကို ဓားမြောင်ဖြင့် အခါခါ ထိုးသွင်းမှုများ လုပ်ဆောင်ကြသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။ http://kicnews.org/category/article/
လက်ရှိ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုအရှိန် မြင့်မားနေသည့်ကာလ၌ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်ရှိ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ မော်လမြိုင် ခရိုင်နယ်မြေအတွင်း လူစိမ်းများဝင်ရောက်ခွင့်မပြုသဖြင့် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မွန် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုကိုယ်စားလှယ်လောင်း ကိုယ်တိုင်လာရောက် မဲဆွယ်မရဖြစ်နေကြောင်း မွန်သတင်း အေဂျင်စီသို့ ပြော သည်။
“ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် မွန်ပြည်သစ်ပါတီနယ်မြေမှာ အပြင်လူစိမ်းတွေ လာခွင့်မရှိဘူး ကန့်သတ်ထားတယ်၊ အဲဒီနေရာ တွေကို မဲဆွယ်စည်းရုံးဖို့ ကျနော်လည်း သွားဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော့်ကို ခြွင်းချက်အနေနဲ့ ခွင့်ပြုပေးသည့်တိုင် အောင် မသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ့်အတွက်ကြောင့် ဒေသခံတွေငြိုငြင်မှုမရှိစေရအောင် ကိုယ်ကရောဂါပိုးမရှိပေမယ့် သံသယအဖြစ်မခံချင်လို့ပါ”ဟု MUP ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မွန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်ထွန်းလွင်က မွန်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ထောက်ခံချက်အမျိုးမျိုးဖြင့် တစ်နေရာမှတစ်နေရာ ခရီးသွားလာနေရသည့်အတွက် မွန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ကိုယ်စားလှယ် လောင်း တစ်ဦးအနေဖြင့် ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရှိ မွန်ကျေးရွာများသို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက် မဲဆွယ်နိုင်မည့် အနေအထား မရှိနိုင်သည်ကို မွန်တိုင်းရင်းသားများ နားလည်ခွင့်လွှတ်စေလိုကြောင်း နိုင်ထွန်းလွင် က ဆက်ပြောသည်။
“ကြားအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်က ကျနော်တို့မွန်ပြည်သစ်နယ်မြေမှာဆိုရင် နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းကို ကျနော်တို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေအတိုင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်ပြုထားပါတယ် ဥပမာ နိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုရင် ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မြို့နယ်အဆင့် ဒီဒေသခံပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုပဲ လူထုနဲ့တွေ့ဆုံစည်းရုံးဖို့ ခွင့်ပြုပေးထားပါတယ် အပြင်လူတွေ လာရောက် စည်းရုံးခွင့်မပြုပါဘူး”ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီ Covid-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ(ဗဟို) ဥက္ကဌ နိုင်ဗညားလယ်က ပြောသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကချင်၊ ကယား နှင့် ကရင်ပြည်နယ် အောင်နိုင်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌတို့၏ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ အွန်းလိုင်းစကားဝိုင်း၌ မွန်ပြည်သစ် ပါတီနယ်မြေတွင် မွန်နှင့်ပတ်သက်သည့် ပါတီများကိုသာ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုကြောင်း NLD ပါတီ ကရင်ပြည်နယ် အောင်နိုင် ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းနိုင်က စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့သည်။ http://burmese. monnews.org/2020/09/30/%e1%80% 99%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%ba%e1%
မြန်မာပြည်တွင် Covid-19 ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ ပိုမိုများပြားလာသည့်အတွက် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ထိန်းချူပ်ရာဒေသသို့ ဝင်ထွက်သွားလာမှုများအားလုံးကို အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း KIO Covid-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးကော်မတီမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အစိုးရထိန်းချုပ်နယ်မြေမှ ပိုးတွေ့အတည်ပြုလူနာများနှင့် ထိတွေ့ခဲ့သောသူများသည် KIO ထိန်းချူပ်ရာဒေသအတွင်းသို့ ရောက်လာသောကြောင့် ယခုလိုအဝင်အထွက်ပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု KIO Covid-19 ကာကွယ်တားဆီးရေး ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ဟိန်းဝေါမ် က ယခုလိုပြောသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကူဗစ်ကူးစက်လူနာများပြားလာသည် နှင့်အညီ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့ လူနာများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ မြို့ကြီးတွေကနေ KIO ထိန်းချုပ်ရာဒေသကို တစ်ယောက် နှစ် ယောက် ဝင်လာတဲ့အတွက် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ရောဂါကူးစက်မှုလျော့ကျတဲ့အထိ ပိတ်ပင်ဖို့ ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက် လုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်တယ်” ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး ဟိန်းဝေါမ် က ပြောသည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် မိုင်ဆတ်ပါ (Maisak Pa) ဂိတ်မှတဆင့် KIO နယ်မြေသို့ ဝင်ရောက်လာသော မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှ ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုကြောင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းသယ်ဆောင်သည့် မည်သည့်ယာဉ်ကိုမျှ ဝင်ခွင့်မပြုကြောင်းနှင့် စားသောက်ဆိုင်များတွင် စုပေါင်းစားသောက်ခြင်းမပြုပဲ ပါဆယ်ထုတ် စနစ်ဖြင့်သာရောင်းချရန် ဟူသည့် အချက် (၃) ချက် ပါရှိသည်။ ထုတ်ပြန်ချက်သည် KIO ထိန်းချူပ်ရာဒေသ မိုင်ဆတ်ပါ ဝင်ပေါက် သာမက မိုင်ဂျာယာန် နှင့် အခြားKIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေရှိ ဂိတ်များ အားလုံးအကျူံးဝင် ကြောင်း၎င်းကဆက်ပြောသည်။ KIO ထိန်းချူပ်ရာဒေသရှိ လူဦးရေ အယောက် ၁၀၀ ကျော်ကို တရုတ်နိုင်ငံအကူအညီဖြင့်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင်လည်း ကွာရန်တင်းနေရာ ၄ ခုတွင် လူဦးရေ ၂၀၀ ခန့်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ https://burm ese.kachinnews.com/2020/10/01/kio-%e1%80%91%e 1%80%ad%e1%80%94%e1%80%ba%e1% 80%b8%e1%80%81% e1%80 %bb%
၅။ ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်း RCSS/SSA လှုပ်ရှားရာတောပိုင်းသို့ အစိုးရတပ်ပစ်ခတ်
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်း RCSS/SSA လှုပ်ရှားနေထိုင်ရာတောပိုင်းက်သို့ အစိုးရတပ်မတော်မှ စစ်ကြောင်း ၂ ကြောင်းထိုးကာ လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့် အင်အားဖြင့် ပစ်ခတ် ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
စက်တင်ဘာလလ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက အစိုးရတပ်မတော်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကကျောက်မဲမြို့ ကျွဲကုန်းမှ နောင်ပိန်အွန်၊ ထိုမှတဆင့် နားပိန်း-နားပုံသို့လည်းကောင်း၊ ကျန်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကလည်း ကောင်းဟုန်းမှ နားပုံ-နားပိန်းဘက်သို့လည်းကောင်း တက်လာကြပြီး RCSS/SSA လှုပ်ရှားရာ ကျောက်မဲမြို့ အရှေ့မြောက်ဘက် ၅ မိုင် ၆ မိုင်အကွာရှိ တောပိုင်းသို့လက်နက်ကြီးငယ်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြကြောင်း နောင်ပိန်-ဂုတ်တွင်း ဒေသခံများကပြောသည်။ နောင်ပိန် ဒေသခံတဉီးက – “ဒီနေ့မနက် ၇ နာရီလောက်က အစိုးရစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကျွဲကုန်းဘက်ကတက်လာတယ်။ နောက် တကြောင်းက ကောင်းဟုန်းဘက်ကတက်လာတယ်။ နားပုံရွာကထွက်တာနဲ့ လက်နက်ကြီးငယ်နဲ့ အရပ်မျက်နှာအဘက် ဘက်ကို ပစ်ခတ်တယ်။ RCSS/SSA ဘက်ကတော့ ပြန်ပစ်ခတ်တာမကြားမိဘူး”- ဟုသျှမ်းသံတော်ဆင့်အားပြောသည်။
၄င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး RCSS/SSA ၏စစ်မြေပြင်အတွင်း အရာရှိတဉီးက“သူတို့ဘက်ကတဘက်တည်းပစ်ခတ်နေတာ။ သစ်ပင် ခြုံပုတ်တွေထဲပစ်ခတ်တာ။ ကျနော်တို့တပ်စခန်းကို တိုက်ရိုက်မပစ်ခတ်လာလို့ ကျနော်တို့လည်းပြန်မပစ်ခတ်ခဲ့ပါဘူး”ဟု သျှမ်းသံတော်ဆင့်အားပြောသည်။ နားပုံ နားပိန်းရွာသားတဉီးကလည်း -” ကျနော်တို့ဒေသမှာRCSS/SSA လှုပ်ရှား လာတာ ဟိုးအရင်ကတည်းကဘဲ။ ခုချိန်ထိတော့ ထွက်ပြေးရမလားမထွက်ပြေးရမလား မသိသေးဘူး။ စောင့်ကြည့်နေသေးတယ် အခြေအနေ “- ဟု သျှမ်းသံတော်ဆင့်အားပြောပြသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/18720
၆။ ချင်းပြည်နယ် ဒုတိယအကြိမ်မဲစာရင်း ပထမအကြိမ် မဲစာရင်းထက် ၁သောင်းကျော်လျော့နည်း
၂၀၂၀ ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲအတွက် ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမဲစာရင်းကို ချင်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစပြီး ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်ကပ်ထားပြီး မဲထည့်မည့်ဦးရေ ၃၃၁၆၉၈ ဦး ရှိပြီး ပထမအကြိမ် မဲစာရင်းထက် ၁ သောင်းကျော် လျော့နည်းသွားကြောင်း ချင်းပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အတွင်းရေးမှူး ဦးလင်းကျော်ထံ မှ သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ စီစစ်ပြီးတော့ ပုံစံ(၃)နဲ့လျှောက်တဲ့သူပြန်ဖြည့်ရတဲ့ဟာရှိတယ်၊ပုံစံ(၄)နဲ့ ကန့်ကွက်တဲ့သူ ပြန်ဖြုတ်ရတဲ့ သူရှိ တယ်၊ ပြီးတော့ တစ်အိမ်တက်ဆင်း ပြန်လုပ်ကျသေးတယ်၊ ရပ်ကွက်ကော်မရှင်နဲ့ မြို့နယ်ကော်မရှင်နဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့၊ လုပ်တဲ့အခါမှာ မတွေ့တော့တဲ့လူတွေပါရှိတယ်၊ ပြန်ဖြုတ်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်၊ တစ်ချို့ကတော့ ရူးသွပ် တဲ့ လူတွေပါနေတော့ ကန့်ကွက်တဲ့သူတွေလည်း မရှိပဲနဲ့လည်း၊ အဲဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ ပြန်ဖြုတ်ရတယ်ပေါ့၊ door to door လုပ်ပြီးတော့ စီစစ်တဲ့အခါမှာ မလျှောက်ပဲနဲ့ ကျန်နေသေးတဲ့ လူတွေကိုလည်းပြန်ထည့်တယ်၊ ပထမအကြိမ် မဲကပ်တဲ့ အခါမှာ ပုံစံ(၄)နဲ့ ပြန်ဖြုတ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်၊ ပြီးတော့မြေပြင်မှာဖြုတ်သင့်တဲ့လူတွေကို ဥပဒေအရ ပြန်ပြီးပယ်ဖျက် လိုက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်၊ အဲဒီနှစ်ခုခြားနားလိုက်တဲ့အခါမှာ လျော့သွားတယ်ပေါ့” ဟု ချင်းပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အတွင်းရေးမှူး ဦးလင်းကျော်ထံမှ သိရသည်။
ပထမအကြိမ်မဲစာရင်းကပ်ထားချိန်တွင် မဲစာရင်းတွင် ကျား ၁၅၉၆၂၅ ဉီး မ ၁၇၂၀၇၃ ဦး စုစုပေါင်း ၃၄၂၁၃၇ ဦး ရှိပြီး ၊ ယခု ဒုတိယအကြိမ် ကပ်ထားချိန်တွင် ၃၃၁၆၉၈ ဦး ရှိပြီး မဲစာရင်းတွင်ပါရှိသူဦးရေ ၁ သောင်းကျော် လျော့နည်းသွားကြောင်း သိရသည်။ ချင်းပြည်နယ် တစ်ပြည်နယ်လုံးတွင် မဲစာရင်းဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည် ကပ်ထားကြေညာပြီး ယနေ့ အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်နေ့မှ (၁၄)ရက်နေ့ထိ ကပ်ထားကြေညာသွားမည်ဖြစ်ပြီး နာမည်စာရင်းမပါပါက ပုံစံ(၃) ဖြင့် ပြန်လည်လျှောက်ထားလို့ ရကြောင်းလည်းသိရသည်။ https://www.chinworld.org/2020/10/01/%e1%80%81%e1 %80%bb%e1%80 %84%e 1%80%ba%e1%80
၇။ ကယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကို စွပ်စွဲပြစ်တင်မှု အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ကြားနာမည်
ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအယ်လ်ဖောင်းရှိုကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်က စွပ်စွဲပြစ်တင်ခဲ့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ညီမညီ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးက လာမယ့် အောက်တိုဘာ ၆ ရက်မှာ e-Court စနစ်နဲ့ ကြားနာသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပေါ် စွပ်စွဲပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပ‌ဒေ ပုဒ်မ ၂၆၃ ပုဒ်မခွဲ(ခ) နဲ့ (ဂ) တို့ကို အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပေးဖို့ တင်သွင်းထားတဲ့အပေါ် ကြားနာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှုကြားနာမှာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာမယ့် အောက်တိုဘာ ၆ ရက် မနက် ၁၀ နာရီမှာ ယူကျုကနေ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မယ်လို့ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးက ကြေညာပါတယ်။
ကြားနာမယ့်အထဲမှာ အချက် ၃ ချက်ပါရှိပါတယ်။ အဲဒီအချက်တွေကတော့ ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုကို နိုင်ငံတော်သမ္မတက စက်တင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် ၂၄/၂၀၂၀ နဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်မှ ရပ်စဲပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် သူဟာ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးသို့တင်သွင်းလွှာတင်သွင်းခွင့် ရှိသူဟုတ်မဟုတ် ကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စွပ်စွဲ ပြစ်တင်သူ ၅ ဦး ထဲက ဦးသိန်းအောင် (ခ) ဦးစဲရယ် နုတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက် လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း ဦးရေ အနည်းဆုံး လေးပုံတပုံ ပြည့်ခြင်းမရှိတော့တဲ့ အခြေအနေမှာ စွပ်စွဲချက်ကို ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၆၃ (ခ)ကို အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုဖို့ လိုအပ်ခြင်း ရှိ/မရှိ ကို ကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးအယ်ဖောင်းရှိုအပေါ် စွပ်စွဲ ပြစ်တင်ချက်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ဖို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရာမှာ စွပ်စွဲပြစ်တင်ရာမှာ ပါဝင်တဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦးကို ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းထားတာဟာလည်း ပုဒ်မ ၂၆၃ (ဂ) အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုဖို့ လိုအပ်ခြင်း ရှိမရှိ ကြားနာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမှုကြားနာမှုအတွင်း ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဘက်က တရား လွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်မင်းမင်းစိုး လိုက်ပါဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပေမယ့် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့ ကြားနာမှု အတွက် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့ စာရင်းပေးထားပါတယ်။ လွှတ်တော်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သမ္မတထံပေးပို့ပြီး သမ္မတကလည်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုကို တာဝန်ကနေ ရပ်စဲခဲ့ပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/413897
နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာများဖြစ်သည့် ရေဒီယို၊ မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား (MRTV)တို့က ထုတ်လွှင့်ပေးမည့် ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံး ဟောပြောချက် မိန့်ခွန်းစာသား လေးပုံတစ်ပုံကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် – UEC က ဖြတ်တောက်လိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထားဝယ်တိုင်းရင်းသားများပါတီ (ဗဟို)က ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“ထားဝယ်တိုင်းရင်းသားများပါတီရဲ့ ဟောပြောချက်တွေထဲမှာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေကို ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခံရပါ တယ်။ မိန့်ခွန်းပါ အပိုဒ် ၃၂ ပိုဒ်အနက် အရေးကြီးတဲ့ ရှစ်ပိုဒ်ကို ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခံရပါတယ်။ မိန့်ခွန်းအားလုံးရဲ့ လေးပုံ တစ်ပုံကို ဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ သဘော ဖြစ်နေပါတယ်”ဟု ယင်း ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးမင်းက ပြောသည်။ ယင်းသို့ ဖြတ် တောက်ခြင်းမှာ ဒေသခံမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ အမှန်တကယ် ကြုံတွေ့ခံစားနေရသော အရေးကိစ္စများကို ထုတ်ဖော်ပြောဆို ခွင့်အား ပိတ်ပင်ရာရောက်ကြောင်း ပါတီက သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။ ဒီမိုကရေစီ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ညီညွတ်သော လုပ်ရပ်မဟုတ် ကြောင်းလည်း အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြသည်။ ထို့ပြင် ပါတီ၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများနှင့် အများပြည်သူတို့ လွတ်လပ်စွာ အစီရင်ခံပိုင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ရာရောက်ကြောင်း ပါတီဘက်က ယူဆသည်။
ဖြတ်တောက်ခံရသည့် အချက်များမှာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအကြို မဲဆွယ်ကာလက ခွင့်ပြုချက်ရခဲ့ဖူးသည့် အချက်များ ဖြစ်ကြောင်း၊ ပါတီအနေဖြင့် အဓိက ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်မည့် အချက်များလည်း ဖြစ်နေကြောင်း ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးမင်း က ဟင်္သာမီဒီယာကို ပြောသည်။“ဒီ အဓိကအချက်တွေကိုပဲ သူ(ရွေး/ကော်) က ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ၂၀၁၅ တုန်း က ခွင့်ပြုပေးထားခဲ့တာကို ဘာကြောင့်ခုမှ ဆင်ဆာလုပ်တာလဲ၊ ဆိုတော့ အံ့လည်း အံ့ဩတယ်။ တရားမျှတပြီး လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပပေးမယ်လို့ ကော်မရှင်က ပြောနေတယ်။ မေးခွန်းတွေ ထုတ်စရာ အများကြီး ရှိတာပေါ့နော်”ဟု ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌက ဆိုသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75822
၉။ မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရယ်ကာကွယ်တားဆီးရေး လွှတ်တော်အသီးသီးသို့တင်ပြသွားရန် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီက မူဝါဒချမှတ်ထား
ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရများအနေဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရယ် ကာကွယ်တား ဆီးမှုမြှင့်တင်စေရေး အလေးပေးဆောင်ရွက်လာစေရန် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ လွှတ်တော် အသီးသီးသို့ ရောက်ရှိပါက တင်ပြတောင်းဆိုသွားရန် မူဝါဒချမှတ်ထားကြောင်း မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီမှ သိရသည်။
မွန်ပြည်နယ်တလွှား၌ လူငယ်အများအပြား မူးယစ်ဆေးစွဲသူများပြားလာသည့်အတွက် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး အထူးအာရုံစိုက်၍ တိုက်ဖျက်သွားရန် အရေးကြီးကြောင်း မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၁) နိုင်လယိတမက ပြောသည်။“မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူတွေကို ဖမ်းဆီးမိခဲ့ရင် ပြစ်ဒဏ်တစ်ခုလို ချမှတ်တော့မှာမဟုတ်ဘဲ စိတ်ပိုင်းနဲ့ အကျင့်စာရိတ္တ စရိုက်ပိုင်း ဆိုင်ရာတွေကို ပြုပြင်နိုင်ဖို့အတွက် ပြန်လည်တည်ထောင် ရေးစခန်တွေ ထူထောင်နိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ကြိုးစားတိုက်တွန်း သွားမယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ “မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ချမှတ် ထားတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာ မူဝါဒထဲမှာ အခန်း (၂) ခန်း ပါဝင်တဲ့အတွက် လူငယ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေက အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့ ကျန်းမာရေးအပိုင်းကိုပဲ ထည့်ထားတယ်လို့ မြင်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ လူငယ် ကဏ္ဍကိုလည်း ထည့်ထားတာတွေ့လို့ အရမ်းကိုဝမ်းသာမိပါတယ်လို့်”တိုးတက်သော မွန်လူငယ်များအစည်းအရုံးမှ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံပရိုက်က ဆိုသည်။
အစိုးရ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးမည့်မူဝါဒများတွင်ပါရှိသည့် ကုသခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ လူ့အင်အား ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ ဆေးရုံနှင့် ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးစခန်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း အစစအရာရာတွင် အားနည်း နေသေးသည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ ထို့အတူ မူးယစ်ဆေးစွဲကုသရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းအတွက် ပညာပေးကဏ္ဍ များတွင် တိုးတက်သော မွန်လူငယ်အဖွဲ့အစည်း (MYPO)၊ မွန်လူငယ်ပညာပေးရေးအဖွဲ့ (MYEO)၊ မွန်ပြည်လူ့အခွင့်အရေး ဖောင်ဒေးရှင်း HURFOM စသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ပညာပေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသော မွန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ http://burmese.monnews.org/20 20/09/30/%e1%80%99%e1%80%b0%e1%80%9a%e1%80%85%e1%
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ထာဝရ ရပ်တန့်စေရန် လာမည့်အစိုးရအဆက်ဆက်တွင်လည်း ဆက်လက်ကန့်ကွက်သွားမည်ဖြစ်သည်ဟု စီမံကိန်းယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း ၉နှစ်ပြည့်နေ့တွင် ဒေသခံများက ပြောဆိုခဲ့သည်။
လက်ရှိ NLD အစိုးရသည်၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ရာစဉ်က မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကတိကဝတ်များပေးခဲ့ သော်လည်း အစိုးရသက်တမ်း ၅ နှစ်ကုန်ဆုံးတော့မည့် ကာလအတွင်းအထိ တစ်စုံတရာ ပြောဆိုမှုမရှိခဲ့သည့်အတွက် နောက်တက်လာမည့်အစိုးရကိုလည်း အယုံအကြည်မရှိကြောင်း မြစ်ဆုံဒေသခံတစ်ဦး ဖြစ်သည့် ဒေါ်လုရာက ယခုလို ပြော ဆိုသည်။“အမေစုကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ပြောတာလား။ ပါတီကိုဦးတည်ပြီး ပြောခဲ့တာလား အခုချိန် ထိ မသဲကွဲသေးဘူး။ ကျမတို့အနေနဲ့ အခုတက်လာမယ့် အစိုးရကိုလည်း သိပ်ယုံလို့မရဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခု အစိုးရတောင် ကတိကဝတ်တွေ အများကြီးပေးပြီး မဲဆွယ်ခဲ့တယ်။ မဲဆွယ်တဲ့ ပါတီတိုင်းက မြစ်ဆုံအရေးကို မားမား မတ်မတ်ရပ်ပေးတဲ့သူ ထာဝရရပ်တန့်အောင် ပြောပေးနိုင်တဲ့သူ ပြောခဲ့ပြီး မဲထည့်ခဲ့ကြတာဘဲ။ နောက်ဆုံးအစိုးရ ဖြစ်သွားတဲ့ အခါတော့ ပါတီမှာပြောတဲ့ဟာနဲ့ တစ်မျိုးပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ဒေသခံတွေ မဲထည့်ဖို့ တအားစိုးရိမ် တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ပါတီရဲ့အစိုးရဘဲတက်တက် မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်တန့်ဖို့က ထာဝရကြိုးစားသွားမယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
“ကိုယ့်ရဲ့ဒေသမှာ အခုလို ပြန်ပြီး နေရာရှင်းလင်းရေးတွင် ပြန်လုပ်ရတော့ အရင်နေခဲ့တဲ့အချိန်တွေကို ပြန်သတိရ တယ်။ တဖက်မှာက စိုးရိမ်စိတ်တွေအနည်းငယ်တော့ရှိနေတယ်။ အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အစိုးရတွေက နည်းမျိုးစုံနဲ့ ပြန်သိမ်းလာမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်ရတယ်။ တန်ဖရဲကျေးရွာက မြစ်ဆုံးအနီးတဝိုက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက်က အင်မတန်မှ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အရင်ကတည်းကနေ ယခုအချိန်ထိ ဒီနေရာမှာဘဲ စားဝတ် နေရေးအတွက် အကျိုးပြုတဲ့ဒေသဖြစ်တယ်။ ပြီးရင် ဒီနေရာက အားလုံးရဲ့အသက်သွေးကြော ဖြစ်နေတယ်။ မြစ်ဆုံနဲ့ တန်ဖရဲကျေးရွာကို ခွဲခြားထားလို့မရဘူး။ သူက တစ်ခုတည်းဖြစ်သလို တစ်နေရာမှာဘဲ။ ဒေသခံတွေရဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အမွေအနှစ်တွေလည်း အားလုံးဒီနေရာမှာဘဲရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေရာက လုံးဝ ပျောက်ကွယ်သွားလို့မရတဲ့နေရာ ဖြစ် တယ်။ စီမံကိန်းရပ်တန့်ဖို့လည်း အမြဲဆောင်ရွက်နေတယ်” ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရသည့် ကျေးရွာ ၅ ခုခန့်ရှိပြီး ၎င်းကျေးရွာများမှာ တန်ဖရဲ၊ အောင်ဂျာယာန်၊ ဒေါင်ပန်၊ လဖျဲ့ကထောင်နှင့် မလိဇွပ် စသော ကျေးရွာများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို အောင်မြင်သာကျေးရွာနှင့် မလိယန်ကျေးရွာသစ်တို့တွင် နေရာချခဲ့သည်။ https://burmese.kachinnews.c om/202010/01/%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%85%e
ချင်းလူထုများ၏နစ်နာမှုများနှင့် နိုင်ငံရေးရပိုင်ခွင့်များပြန်လည်ရယူဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ချင်း အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် (CNLD) ပါတီကို မဲပေးထောက်ခံကြရန် ချင်းလူငယ်များကွန်ယက်အဖွဲ့က စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့က ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကာ တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ချင်းလူငယ်များကွန်ယက်အဖွဲ့မှ ဗဟိုကော် မတီဝင် Salai Mon Bio က မိမိတို့လိုချင်သည့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ချင်းကံကြမ္မာ ချင်းတွေကဖန်တီးခွင့်ကို CNLD ပါတီက သာ ကိုယ်စားပြုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်သည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ တောင်းဆို ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ခိုနူမ်းသုန် ကိုပြောသည်။
“ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကာလမှာ အဓိက ကျနော်တို့ ချင်းတွေအဓိကလိုချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးအကြွေးက အခုထိ ကို အကောင်အထည်မဖော်ဆောင်နိုင်သေးဘူး။ ကျနော်တို့လိုချင်တာက ပင်လုံစာချုပ်မှာပါတဲ့ ကတိကဝတ်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့နဲ့ ချင်းအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားများလိုလားတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုမတည်ဆောက်နိုင်ဘူး။ အဲဒါကိုတည်ဆောက်ဖို့ရန်က ကျနော်တို့ပြည်မအခြေပြု ဗမာပါတီကြီး နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ USDP နဲ့ NLD ကို မဲပေးလာခဲ့တယ်၊ သူတို့သက်တမ်းတစ်ကြိမ်စီယူခဲ့ပြီပြီ ကျနော်တို့လိုချင်တာ သူတို့အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့ မြင်ခဲ့ပြီး ပြီ။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့ရဲ့ စစ်မှန်သောအခွင့်အရေး စစ်မှန်သောနိုင်ငံရေးကို ကျနော်တို့ချင်းပါတီ လက်ရှိသုံးပါတီပေါင်း လိုက်တဲ့ CNLD ကသာလုပ်ပေးနိုင်မယ် ယုံကြည်ချက်နဲ့ ပြည်သူတွေကို CNLD ကိုမဲပေးဖို့ တိုက်တွန်းရခြင်းဖြစ်တယ်။ CNLD ကို ကျနော်တို့ မဲပေးရခြင်းဟာ ချင်းတွေကိုကိုယ်စားပြုနိုင်တယ်။ နောက်တစ်ခု ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ချင်းကံကြမ္မာကို ချင်းတွေက ဖန်တီးခွင့်ကို CNLD ကသာ ကိုယ်စားပြုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ် အဲဒါကြောင့် တောင်းဆိုရ ခြင်းဖြစ်တယ်” ဟု Salai Mon Boi ကပြောသည်။
ချင်းတိုင်းရင်းသားများအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲအတွက် ပြည်မပါတီကြီးများကို မဲပေးထောက်ခံခဲ့ကြသော်လည်း လူမျိုးတမျိုး ဘာသာတခုကိုသာ အခွင့်ထူးပေးထားသော မျိုးစောင့်ဥပဒေများပြဌာန်းခြင်း၊ ချင်းလူမျိုးများနှင့် အခြား တိုင်းရင်း သားများ၏ ရိုးရာဓလေ့မြေယာပိုင်ဆိုင်မူများအား ဆန့်ကျင်သည့် မြေယာဥပဒေများကို တိုင်းရင်းသားများကန့်ကွက်သည့် ကြားမှ ပြဌာန်းခြင်း၊ ချင်းလူမျိုးများနှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားတို့၏ သဘောထားများ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့်ကြားမှ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကြေးရုပ်ထုများကို အတင်းအဓမ္မ စိုက်ထူရန် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူများအတွက် လုံလောက်သော အထောက်အပံ့များ မရှိနေခြင်းများအပြင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့ နေရဆဲဖြစ် သည် ချင်းလူငယ်များကွန်ယက်၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ချင်းလူငယ်များကွန်ယက်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး ချင်းအမျိူးသားရေး၊ ချင်းလူမျိူးများ၏ ရပိုင်ခွင့်များ၊ ချင်းလူငယ်များအခွင့်အရေးတို့ကို အခြေခံလှုပ်ရှားဆောင်ရွက် နေသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75873
နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကရင်ပါတီများ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဧရာဝတီကရင်လူငယ်ယာယီ ကော်မတီမှ လူငယ် များပါဝင်ကာ ကူညီဆောင်ရွက်မှုများပြု လုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကရင်ပါတီများအား ကူညီပေးမည့်အရေးကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်များအတွင်း ကျင်းပခဲ့ ကြသည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကရင်လူငယ်နှီး နှောဖလှယ်ပွဲများမှ ရရှိလာသည့် သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက် များအတိုင်း ဧရာဝတီ ကရင်လူငယ်ယာယီကော်မတီမှ ဆက်လက်အကောင်အထည် ဖော်လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယင်းယာယီ ကော်မတီ မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ စထွဋ်ဝေအောင်က ပြောသည်။“ဒီ ၂၀၂၀ အတွင်းနဲ့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာ ကရင်ပါတီ တွေနဲ့အတူ ဧရာဝတီိတိုင်းမှာရှိတဲ့ ကရင်လူငယ်တွေအနေနဲ့ ကရင့်အရေးအရာနဲ့ကရင်အမျိုးသားရေး၊ နိုင်ငံရေးကို ပိုမိုမြှင့် တက်လာ အောင်ကူညီ မယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့အတိုင်း ဒီအနေအထားကို ကူညီပေးတာဖြစ်ပါ တယ်”ဟု ပြောသည်။
“ ခရိုင်အလိုက်ကူညီဖို့ဖွဲ့ထားလူငယ်တွေအနေနဲ့ သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခရိုင်မှာရှိတဲ့ ကရင်ပါတီကိုပဲ ကူညီဖြစ် တဲ့ ပုံစံဖြစ် တော့ တဖက်ကကျန်တဲ့ကရင်ပါတီကိုကူညီရာမှာ အားနည်းတဲ့ပုံစံလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်။ ကရင် လူငယ်တွေအနေနဲ့ နှစ်ဖက်မျှပြီးကူညီကြဖို့ပေါ့။ နောက်ပြီး ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက် အောင်မြင်သင့်သ လောက်မအောင်မြင်ဘူးပေါ့။ အဓိက ကတော့ ကိုဗစ်ကြောင့်လူငယ်တွေ စုစည်းလို့ မရတဲ့အခက်အခဲလည်း ပါတယ်”ဟု မြောင်းမြကရင်လူငယ်တစ်ဦးက ပြော ဆိုသည်။ လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကရင်ပါတီများဖြစ်သည့် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ -KPP နှင့် ကရင်အမျိုးသားပါတီ -KNP တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဝင် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်ပြီး ဧရာဝ တီတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း KPP မှ ၃၁ ဦးနှင့် KNP မှ ၈ ဦးတို့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်ဟု ကရင်ပါ တီများ၏ ထုတ်ပြန်ထားမှုများ အရ သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%a7% e1%80%9b%e1%80%ac%e1%81%80%e1% 80%90%e1%
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း နမ္မတူမြို့နယ် အတွင်း ယနေ့(အောက်တိုဘာ ၁)ရက်တွင် ဆယ်ကျော်သက် အမျိုးသမီးတဦး မီးရှို့ ခံရသည့် အလောင်း တွေ့ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ မီးရှို့ခံရသည့် အမျိုးသမီး ရုပ်အလောင်းကို နမ္မတူ-လားရှိုးသွားရာလမ်း၊ နမ္မတူမြို့မှ (၇)မိုင်ခန့်ကွာဝေးသည့် ပန်းသပြေ ကျေးရွာ အနီးတွင် တွေ့ရှိကြောင်း ရုပ်အလောင်းကို သွားရောက် သယ်သည့် လူမှု အဖွဲ့အစည်းမှ ကိုချစ်မွှေးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။ “ကျနော်တို့ လူမှုကူညီရေးအသင်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့က နေ့လည် ၁ နာရီ ခွဲမှာ ဖုန်းဆက်လာ လို့ ကျနော်တို့သွားသယ်တာ။ အမျိုးသမီးအလောင်းပါ။ အသက် က ၁၅၊၁၆ နှစ်ပဲ ရှိမယ်”ဟု ကိုချစ်မွှေး ကပြောသည်။ လက်ရှိ အချိန်ထိ မီးရှို့ခံရသည့် အမျိုးသမီး၏ ဆွေးမျိုးများကို မသိရှိသေးကြောင်း၊ အမျိုးသမီး၏ ရုပ်အလောင်းကို နမ္မတူ ပြည်သူ့ဆေးရုံ ရင်ခွဲရုံတွင် ပို့ဆောင်ထားကြောင်း ကိုချစ်မွှေးက ဆိုသည်။
မီးရှို့သတ်ခံရသည့် အမျိုးသမီး၏ ရုပ်အလောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့(နမ္မတူ) နှင့် မေတ္တာရှင် နာရေး လူမှုကူညီရေးအသင်းမှ သွားရောက်သယ်ဆောင်ကာ နမ္မတူ ဆေးရုံ ရင်ခွဲရုံသို့ဆေးစစ်ချက်ရယူရန် သယ်ဆောင်သွား ကြောင်း သိရသည်။ အမျိုးသမီး တဦးကို သတ်ပြီး မီးရှို့သွားမည့် တရားခံကို သက်ဆိုင်ရာမှစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/18737
မိုးညှင်းခရိုင်တွင် ပထမအကြိမ် မဲစာရင်းကြေညာပြီးနောက် ရက် (၉၀) နေထိုင်ကြောင်း ပုံစံ (၃-က) ဖြင့်အသစ် လာရောက်လျောက်ထားသည့် တပ်မတော်သား၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်း ၁၃၀၀ ဦးခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးမှ သိရသည်။ မိုးညှင်းခရိုင်တစ်ခုလုံးတွင် ပုံစံ (၃-က)ဖြင့် လာရောက်လျောက်ထားသူဦးရေ ၁၆၀၀၀ ကျော် အနက် တပ်မတော်သား၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ အင်အား ၁၃၀၀ ဦး ရှိကြောင်း ဆိုသည်။
“လက်ရှိ ၂၅ ရက်နေ့ထိ စာရင်းချုပ်ထားတာကျတော့ တပ်နဲ့ရဲ ရက်ပေါင်း ၉၀ကျော် မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် လျှောက် ထားတဲ့စာရင်းက တပ်မတော်သားဆိုရင် ၉၀၀ နီးပါးလောက်ရှိတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကလည်း ၄၀၀ နီးပါးလောက် တောင်းထား ကြပြီ။ လက်ရှိချိန်ထိတော့ စာရင်းက မပိတ်သေးတဲ့ချိန်ကျတော့ အတိအကျတော့ ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ လောလောဆယ် တော့ ၁၃၀၀လောက်ရှိနေပြီ။” ဟု မိုးညှင်းရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ အရာရှိဦးမျိုးမင်းအောင်ကပြောသည်။ မိုးညှင်းခရိုင် တစ်ခုလုံးရှိ တပ်မဲဆန္ဒရှင်များစာရင်းကို သီးသန့်ကောက်ထားခြင်းမရှိသည့်အတွက် လက်ရှိ ခရိုင်တွင် တပ်မဲဆန္ဒရှင် မည်မျှ ရှိပြီကို မသိနိုင်ကြောင်း နှင့် ပုံစံ (၃-က) လာရောက်လျောက်ထားသည့် စာရင်းကိုသာ သိနိုင်ကြောင်း ဆိုသည်။ လက်ရှိ အထိလည်း ပုံစံ (၃-က) လျောက်နေဆဲကာလဖြစ်သောကြောင့် နောက်ဆုံးစာရင်းကိုမူ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပြန်လည်ထုတ်ပြန်သည့်အချိန်မှ သိရမည်ဖြစ်သည်။
“တပ်မဲစာရင်းက ကျနော်တို့ဆီမှာ သပ်သပ်ခွဲထားတာမရှိဘူးခင်ဗျ။ ဘာလို့မရှိလဲဆိုရင် မဲရုံအလိုက်မှာ တပ်ကို မဲစာရင်းသီးသန့်မသွားဘဲနဲ့ သက်ဆိုင်ရာတပ်တွေကလည်း ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုမှာပါတယ်လေ။ အဲရပ်ကွက် ကျေးရွာမဲစာရင်းမှာဘဲ တစ်ခါတည်းပေါင်းထည့်တယ်။ သီးသန့်စာရင်းလုပ်မထားပါဘူးခင်ဗျ။ မဲစာရင်းကြေညာတဲ့ချိန်လည်း ကျေးရွာမဲစာရင်းမှာဘဲ တစ်ခါတည်းကြေညာပေးတယ်။ နာမည်တွေကလည်း ဗိုလ်မှူး၊ဗိုလ်ကြီးတွေမခွဲထားဘူး အားလုံးက ဦးဘယ်သူ ဒေါ်ဘယ်သူဆိုပြီးတော့ဘဲ အကုန်ပေါင်းပေးထားတယ်။”ဟု မိုးညှင်း ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အရာရှိ ဦးမျိုးမင်းဦးက ပြောသည်။ လာမည့် ၂၀၂၀ တွင်လည်း တပ်မဲ သီးသန့်ကောက်ထားခြင်းမရှိသည့်အပြင် တပ်မဲရုံလည်း သီးသန့်ထားရှိခဲ့ခြင်းမရှိသည့်အတွက် အရပ်သားများနှင့်အတူသာ မဲပေးရန်စီစဉ်ထားပြီး မိုးညှင်းခရိုင်တွင် အဆို တပ်သားများ မဲပေးရမည့် မဲရုံ ၁၂ ရုံရှိသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/01/%e1%8 0%99%e1% 80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1
သထုံမြို့နယ်အတွင်း ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) ပါတီနှင့် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ (KPP) တို့ ပူးပေါင်းကာ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်က ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အောင်နိုင်ရေး ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူခြင်း ဆောင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲထံ တင်ပြထားသည့်အတွက် သထုံမြို့ နှင့် သုဝဏ္ဏဝတီမြို့များ တွင် ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး ဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူခဲ့ကြောင်း ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) ပါတီ (မွန်ပြည်နယ်) အတွင်းရေးမှူး ခွန်တေဇက ပြောကြားသည်။
၎င်းက ဆက်လက်ပြီး “ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး ဆိုင်းဘုတ်မှာ ကျွန်တော်တို့ မဟာမိတ်ပါတီနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပအိုဝ်းအမျိုး သားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) ပါတီနဲ့ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ သထုံမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁) နဲ့(၂) ၊ နောက် ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားလုံး ကိုယ်စား လှယ်လောင်း လေးဦး ပါဝင်တဲ့ အောင်နိုင်ရေး ဆိုင်းဘုတ်ကို တင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင်ကို ပန်းဖလက်တွေမှာလည်း ဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်း လေးဦးရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို အတူတူရိုက်နှိပ် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အဲဒီ ပန်းဖလက်တွေကိုပဲ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေဆီကို ဖြန့်ဝေပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။ တိုင်းရင်းသားများ အားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးဖြင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြမည်ဆိုပါက နိုင်ငံရေးအရွေ့တစ်ခုကို ရောက်ရှိနိုင်မည်ဟု ယုံကြည် ကြောင်း၊ ထို့ပြင် မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားပါတီ၊ ကရင်တိုင်းရင်းသားပါတီနှင့် မွန်တိုင်းရင်းသားပါတီတို့ ဆက်လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ပါက အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ခွန်တေဇက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) ပါတီ (မွန်ပြည်နယ်) အနေဖြင့် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နေရာ၊ သထုံမြို့နယ်တွင် မဲဆန္ဒနယ် နှစ်နေရာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးချယ်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မွန်ညီညွတ်ရေး ပါတီ (MUP) အနေဖြင့် မွန်ပြည်နယ်အပြင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး နှင့် တနင်္သာရီ ဒေသကြီးတို့တွင် မဲဆန္ဒနယ် ၆၇ နေရာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်အရွေးချယ်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/194517
ဖလမ်းမြို့အနီးရှိ ဆူရ်ဘုန်လေယာဉ်ကွင်းကို ယခုလအောက်တိုဘာလအထဲတွင် ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပမည်ဟု ချင်းပြည်နယ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိ စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်ကပြောပါသည်။ စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က “ဆူရ်ဘုန်လေယာဉ်ကွင်းကို အောက်တိုဘာလထဲမှာ ဖွင့်ပွဲကျင်းပသွားမယ် ရက်အတိအကျတော့ မသိရသေးဘူး လူကြီးတွေအားတဲ့အချိန် အောက်တိုဘာလ ထဲမှာ လုပ်သွားဖို့ လျာထားတာတော့ ရှိတယ် ၊လျာထားတာတော့ အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့မှာ ဆင်းပြီးတော့ စမ်းသပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပေမဲ့ ရာသီဥတု အခြေနေတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်”ဟုပြောသည်။
ယခုအချိန်တွင်လက်ရှိလေယာဉ်ကွင်းမှာ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပြီး မကြာမီ လေယာဉ်ပြေးဆင်းနိုင်တော့မည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က “လေယာဉ်ကွင်းက ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းပြီးနေ ကျန်နေတယ် တောင် နှစ်ဖက်လုံးကို နည်းနည်းဖြိုဖို့ ကျန်နေတယ် ၊တော်တော်လေးတော့ ပြီးနေပြီ ဆင်းဖို့ဘဲ ကျန်တော့တယ်။ လေယာဉ်ကွင်း ရှိတဲ့နေရာကလည်း သီးခြားနေရာမျိုးဖြစ်နေတော့ အခုလိုကာလမှာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကို မရပ်နားဘဲ လုပ်နေကြ တယ် ကျန်းမာရေးက ထုတ်ပြန်တဲ့အတိုင်း ခြောက်ပေအကွာအဝေး နေကြပြီး လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြတယ်”ဟုပြောသည်။
ဖလမ်း-ဆူရ်ဘုန်လေယာဉ်ကွင်းကို ရံပုံငွေ ကျပ် ဘီလီယံ ၁၄၀ အကုန်ကျခံ တည်ဆောက်ထားပြီး လေယာဉ်ပြေးလမ်း အလျားပေ ၆ဝဝဝနှင့် အကျယ်ပေ ၁၀၀ ရှိပြီး ခရီးသည် ရဝကျော် လိုက်ပါနိုင်သည့် (ATR-72) လေယာဉ်များ အဆင်းအတက် ပြုလုပ် ရပ်နားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ https://www.chinworld.org/2020/10/01/%e1 %80%96%e1%80%9c%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မောင်တောမြို့နယ်ရှိ အင်းဒင်နဲ့ ဂူတာပြင်ကျေးရွာက မွတ်စလင်တွေကို ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခဲ့ တာကြောင့် ထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ တရားခံတပ်မတော်သားတွေကို တစ်နှစ်အတွင်း လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက် တဲ့ ကိစ္စလို နောင်မှာဖြစ်ပွားတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ မြန်မာအစိုးရက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယောက်မြို့မှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ (၇၅) ကြိမ်မြောက်ကုလအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးအတွင်း မနေ့က အင်တာနက်ဗီဒီယိုကနေတဆင့် ပြောကြားတဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေက အခုလို ထည့်သွင်းပြောလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက် တတိယမြောက် စက်ဘက် ဆိုင်ရာ တရားရုံးကို မကြာခင်မြင်တွေ့ရတော့မယ်လို့လည်း သူကပြောခဲ့ပါတယ်။
အင်းဒင်ကျေးရွာလူသတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရာရှိတွေအပါအဝင် တပ်မတော်သား ၇ ဦးကို စစ်တရားရုံးနဲ့ စစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လမှာ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ချမှတ်ခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း (၂၀၁၈)ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ၊ တစ်နှစ်တောင် မပြည့်သေးတဲ့ကာလအတွင်းမှာ တပ်မတော်သားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာကြောင့် ကုလသမဂ္ဂ အရာရှိကြီးတွေအပါအဝင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက ဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news /Myanmar-at-UNGA-meeting-inndin-case-09302020151209.html
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရပိုင် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် သတင်းစာတို့တွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ရိုက်ကူးရန်အတွက် ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ – AFP အနေဖြင့် ပါဝင်မည် မဟုတ်တော့ကြောင်း ယင်းပါတီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးကျော်ဇောဦးက ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် – UEC မှ ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာပြီး မဲဆွယ် စည်းရုံးရေးစာတမ်းကို ရေသားခဲ့သော်လည်း အနှစ်သာရမရှိတော့အောင် ဖြတ်တောက်လိုက်သည့် အတွက် ယင်းအစီစဉ် တွင်မပါဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက် ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်။“ကျင့်ဝတ်တွေကို ဖောက်ဖျက်ကျော်လွန်ခြင်းမရှိအောင် ကျနော်တို့ အသေအချာရေးကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ ရေးပြီးပို့ထားတဲ့ စာကြမ်းကို UEC က တော်တော်များများ ဖြတ်တောက်ပလိုက်တဲ့ အတွက် အနှစ်သာရပိုင်းက မကျန်တော့ဘူးပေါ့နော်။ အဲဒီကြောင့် MRTV နဲ့ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေကတဆင့် မဲဆွယ် စည်းရုံးမယ့် ဥစ္စာမှာ မပါဝင်တော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်တာပါ။”ဟု AFP ပါတီ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးကျော်ဇောဦးက ပြောသည်။
ဖြတ်တောက်ခံထားရသည့်အထဲတွင် ယင်းပါတီတည်ထောင်သူ ဒေါက်တာအေးမောင်၏အမည်၊ UEC မှ ယခင်က ခွင့်ပြု ထားပြီးဖြစ်သည့် ပါတီရည်ရွယ်ချက်၊ ဖွဲစည်းပုံနှင့် အနာဂတ်တွင်လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ရှိ စစ်ရေးပဋိပက္ခ ကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေကြရသည့် ရခိုင်ပြည်သူတို့၏ အခက်ခဲများ ပါဝင်ကြောင်း AFP ၏ စာတမ်းတွင်ဖော်ပြ ထားသည်။ ယခုကဲ့သို ဖြတ်တောက်ခံရခြင်းမှာ AFP တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ – ANP နှင့် ရခိုင့်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် – ALD ပါတီတို့ လည်းပါဝင်ကြောင်း အဆိုပါ ပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူအချို့က ပြောသည်။ ယခုဖြစ်စဉ်သည် UEC နှင့် သက်ဆိုင်ရာပါတီတို့အကြား ဖြစ်ပေါ်သည့် ကိစ္စသာဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေနှင့် တစ်စုံတစ်ရာ ပြောဆိုရန် မရှိကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဌ ဒေါ်တင်လှိုင်က ပြောသည်။ http://www .mizzimaburmese.com/article/74013
မြောင်းမြမြို့နယ် ငါးမြင်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု ငါးမြင်းချောင်းကျေးရွာတွင် ကရင်အမျိုးသားပါတီက စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် အောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲအား ကျန်းမာရေးဌာန ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ကရင်အမျိုးသားပါတီမှာ မြောင်းမြမြို့နယ်တွင် တိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) နေရာတစ်ခုတွင်သာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ယနေ့အချိန်ထိ ကျန်းမာရေဌာန ညွှန်ကြားချက်များကြောင့် လူစုလူဝေးဖြင့် ဟောပြောခြင်းများ မဆောင် ရွက်နိုင်သေးသော်လည်း ပါတီအောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ်များကိုမူ လိုက်လံစိုက်ထူလျက်ရှိကြောင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးရာတွင် ကန့်သတ်ချက်များပြားမှုကြောင့် လက်ကမ်းစာစောင်များဝေငှခြင်းများကိုပါ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေ ရကြောင်းသိရသည်။
ကျွန်တော်တို့ပါတီကို တပ်ချုပ်နဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ ၃၄ ပါတီထဲမှာ ပါဝင်တယ်ဆိုပြီး ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် တိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးတွေလဲ ရှိနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ဆက်သွားနေပါတယ်။ အခုထိ လူစုလူဝေးနဲ့ ဟောပြောစည်းရုံးမှုတွေ မလုပ်ဆောင်သေးဘူး။ လူ ၅၀ အထိ စည်းရုံးခွင့်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ ပြည်သူတွေကို စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ မရှိစေချင်လို့ ကျွန်တော်တို့ တစ်အိမ်တက် တစ်အိမ်ဆင်း ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲ စည်းရုံးမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်”ဟု မြောင်းမြ မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကရင်အမျိုးသားပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စစွဲမက် က ပြောကြားသည်။ https://news-eleven.com/article/194354
ကချင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကိုနေရာချထားသည့် မြစ်ကြီးနား ငွေပျော်စံပြကျေးရွာတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချမှုနှင့် သုံးစွဲသူများလာသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာက ထိရောက်စွာ တာဝန်ယူပေးခြင်းမရှိသဖြင့် လူငယ်မိဘများက စိုးရိမ်နေကြ သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများလာသောကြောင့် ကျေးရွာအတွင်း ခိုးမှု၊ လုယက်မှုများလာမည်ကိုလည်း စိုးရိမ်နေကြ သည်။“မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရွာမှာရှိတဲ့ လူငယ်တွေလည်း ပျက်စီးကုန်ပြီ အဖွဲ့အစည်း အသင်းတော်တွေမှာ ပါဝင်မှုလည်း မရှိကြတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုဘဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ရှေ့ဆက် ရောက်လာမဲ့ အချိန်တွေမှာ အိမ်ထောင်တိုင်း ပဋိပက္ခတွေနှင့် ကွဲတဲ့သူက ကွဲ၊ ရွာအတွင်းဆိုလည်း ခိုးမှု၊ လုယက်မှုတွေနှင့် အရမ်းများလာ လိမ့်မယ်။” ဟု ငွေပျော်စံပြကျေးရွာဒေသခံ ဦးဇဟဲ ခေါင်ဇယ် ကပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်ခန့်မှစပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးစတင်ဖောင်းပွလာခြင်းဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဘက်ကလည်း ထိရောက်စွာ တာဝန်ယူပေးခြင်းမရှိကြောင်း ဒေသခံများပြောသည်။ ကျေးရွာတွင် မူးယစ်ဆေးဝါး ဖောင်းပွလာသောကြောင့် မိဘများက ကလေးများကို မြို့ပေါ်မှာသာ ထားရှိကြောင်း ဒေသခံ ဒေါ်ရွယ်တောင် က ပြောသည်။“ဒီလို နေရာမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး ဖောင်းပွနေတာကို အစိုးရက ဘာလို့ ဘာမှတာဝန်မယူတာလဲ။ ဘယ်လိုတာဝန်ယူတယ် ကျွန်မတို့မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ သုံးစွဲတဲ့ သူတွေ၊ ရောင်းတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ထိထိမိမိတာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ မတွေ့ရဘူး။ ဒါ ကြောင့် မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ (Pat Jasan) ဆိုရင်တော့ ကျွန်မတို့ယုံတယ်။ အရွယ် ရောက်လာတဲ့ ကလေးတွေအ တွက်စိုးရိမ်တယ်။ ကျွန်မဆို ကျွန်မကလေးတွေကို မြို့မှာဘဲ ထားထားတယ်။ ကြောက်လို့မခေါ်လာရဲဘူး။”ဟု ပြောသည်။
“မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ အရင်ကဒီရွာရောင်းတဲ့သူမရှိရင်တောင်မှ မြို့ထဲက လာရောင်းကြမှာဘဲ။ ရှူတဲ့သူရှိရင်တော့ ရောင်းတဲ့သူတွေက သူ့အလိုလိုနည်းလမ်းပေါင်းစုံနှင့် ရောက်လာမှာဘဲလေ။ အဲ့တော့ ဘယ်မှာရောင်း နေတယ်ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မသိဘူး။ ဘယ်သူသုံးစွဲနေတယ်ဆိုတာလည်း ကျွန်တော်တိတိကျကျတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ သတင်းတိကျမှု၊ ကိုယ့်သားသမီး သောက်သုံးတယ်။ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတယ်ဆိုရင် မိဘ တွေက အပ်နှံရဲတဲ့ သတ္တိရှိရမှာ။ မရှိရင်တော့ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးက ပျောက်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူး။”ဟု ငွေပျော်စံပြကျေးရွာ အုပ်ချူပ်ရေးမှူး ဦးသောင်းဆာကပြောသည်။ ပလန ကချင်လူထုမူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ (Pat Jasan) ကလည်း ငွေပျော် ကျေးရွာနှင့် လမ်းခရီးဝေးသဖြင့် အချိန်မှီ ချက်ချင်းသွားရောက် ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်းတာဝန်ရှိသူများပြော သည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/02/%e1%80%84%e1%80%bd%e1% 80%b1%e1%80%95%e1
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ် မေလွမ်းကျေးရွာအနီး ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး ကျေးရွာအတွင်း ကျည်ကျရောက်မှုများရှိကာ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်သံများကြားရကြောင်း မင်းပြားမြို့နယ် ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ် ဦးလှသိန်းအောင်ကပြောဆိုသည်။“နာရီပိုင်းလောက်က မေလွမ်းရွာနားမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီး အဲဒီဖက်က ဒေသခံတစ်ယောက်က ဖုန်းနဲ့ပြောတာရှိတယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ ဖုန်းနဲ့ဆက်တာတော့ရှိတယ်။ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေတော့ မသိရသေးဘူး။ မေးလွမ်းရွာကိုတော့ ကျည်တွေဘာတွေကျတာတော့ ရှိတယ်လို့ကြားတယ်” ဟု ၎င်းကပြောဆိုသည်။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များ အစည်းအရုံး (REC) အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်သူ ကိုဇော်ဇော်ထွန်းကလည်း မေလွမ်းကျေးရွာအနီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည်ကို မင်းပြားရှိ REC အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးပြောဆိုချက်အရ သိရသော်လည်း အသေးစိတ်အခြေအနေများကို မသိရှိရသေးကြောင်း ပြောဆိုသည်။
စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ကလည်း မင်းပြားမြို့နယ် အတွင်း မေလွမ်းကျေးရွာနှင့် ဖားပြိုကျေးရွာကြား ဇောက်ချောင်းတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကာ အောက်တိုဘာလ ၁ရက်နေ့ ယနေ့ နံနက်ပိုင်း ရာမောင်တံတားအနီး ဆနွင်းတောင်တွင်လည်း တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရှိရသည်။ https://ww w.khitthitnews.com/2020/10/%e1%80%99%e1 %80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80
COVID ကာလ Stay at Home အစီအစဉ်ကြောင့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖားကန့်ဒေသရှိ သိန်းနှင့်ချီသော ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအနေဖြင့် မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ဖွယ်ရှိနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ တွင် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်မည့် အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကို ဇူလိုင် ၂၅ ရက်မှ သြဂုတ် ၇ ရက်အထိ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများတွင် နှစ်ပတ်တာ ကြေညာခဲ့သည်။
ထိုသို့ကြေညာရာတွင် မဲစာရင်းတွင် အမည်စာရင်း မပါဝင်ပါက ပုံစံ (၃) ဖြင့် မဲစာရင်းတွင် အမည်ထည့်သွင်းပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်ပြီး မဲစာရင်းတွင် မပါဝင်သင့်သူများ ပါဝင်နေလျှင် ပုံစံ (၄) ဖြင့် ကန့်ကွက်ရန်နှင့် မဲစာရင်းပါအချက်အလက်များ မှားယွင်းနေလျှင် ပုံစံ (၄-ဂ) ဖြင့် ပြင်ဆင်လွှာ တင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထား သည်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ပထမအကြိမ် မဲစာရင်းကြေညာချက်အရ ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် မဲဆန္ဒရှင် ၁၆၃၀၀၀ ကျော်ရှိ ကြောင်း ဖားကန့်မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံမှ သတင်းရရှိသည်။“ ဖားကန့်မြို့နယ်မှာ အခုထိ မဲစာရင်းမှာ ကြေငြာ ထားတဲ့စာရင်းဟာ မဲပေးမယ့်သူ ၁၆၃၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ပုံစံ (၃-က) နဲ့ လျှောက်ထားမယ့် အရေအတွက် ကတော့ များနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကာယကံရှင်တွေက လျှောက်ထားမှသာ သိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖားကန့်မြို့နယ်မှာတော့ (၃-က) နဲ့ လျှောက်ထားတဲ့ အရေအတွက်ကတော့ အများဆုံးကတော့ ရေမဆေးကျောက်ရှာသူတွေ အများဆုံးပဲ။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေနဲ့ တာဝန်လာထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာက နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ စစ်တပ်၊ ရဲ၊ တိုက်ခိုက်ရေး အထူးရဲတပ်ရင်းတွေကနေ ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးမယ်ဆိုရင် ပုံစံ (၃-က) နဲ့ လာရောက်လျှောက်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသိန်းဟန်က ပြောကြားသည်။
ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီ (KSPP) အနေဖြင့် မြေပြင်ဆင်း၍ ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် အစိုးရ က ဖားကန့်မြို့နယ်ကို Stay at Home ကြေညာလိုက်သည့်အတွက် လုပ်ဆောင်ပေး၍ မရတော့ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီ (KSPP) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဘရန်ရှောင်က ပြောကြားသည်။ ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် မြို့ပေါ် ခြောက်ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အုပ်စုပေါင်း ၂၁ အုပ်စုရှိပြီး ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ခွင့်သက်တမ်းရှိ ကုမ္ပဏီ ၇၇ ခုရှိကာ မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်မှ လာရောက်၍ ရေမဆေးကျောက်ရှာသူ သိန်းဂဏန်းအထိရှိသည့်အပြင် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအများအပြား ရှိနေသည်။ https://news-eleve n.com/ar ticle/194369
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပွားနေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများ၌ ဖျားနာသူ များပြားလာနေသဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရန်လိုအပ်နေကြောင်း စစ်ဘေးရှောင်များက ဆိုကြသည်။
ဒုက္ခသည်ဦးရေ ၃၃၂၁ ဦးရှိသည့် တိန်ညိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွင် ဖျားနာသူ ၃၀ နှင့် ၅၀ ကြားရှိလာကာ ၎င်းတို့မှာ မည်သည့်ကြောင့် ဖျားနာနေခြင်းအား မသိရှိဖြစ်နေကြပြီး ဆေးကုသမှုခံယူမည့်နေရာမရှိသဖြင့် ဆေးဆိုင်တို့မှ ဆေးများ ဝယ်ယူသောက်သုံးနေရကြောင်း စခန်းတာဝန်ခံ ဦးဝေလှအောင်ထံမှသိရသည်။“အရင်တုန်းကဆိုရင် တိန်ညိုဆေးရုံကြီးကို သွားပြလိုက်လို့ရတယ်။ ဆေးလည်း အခမဲ့ကုသပေးတာပေါ့နော်၊ ဘာရောဂါဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသိရတယ်။ အခုက တိန်ညိုမှာ ဆေးခန်းသွားပြစရာ ဆရာဝန်လည်းမရှိဘူး”ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။ အလားတူ ဒုက္ခသည်ဦးရေ နှစ်ထောင် ကျော် ရှိသည့် မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ပီပင်ရင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွင်လည်း ဖျားနာသူ ၆ ဦးနှင့် ခရုရောဂါဖြစ်နေသည့် အသက် ၂ နှစ်အရွယ်ကလေးအတွက် ဆေးကုသရန် အခက်အခဲ ဖြစ်နေကြောင်း စခန်းတာဝန်ခံ ဦးကျော်မြသိန်းက ပြောသည်။
ထိုစခန်းတွင် စက်တင်ဘာလတတိယအပတ်က အသက် (၇၃)နှစ်အရွယ်ရှိ အစာအိမ်ရောဂါအခံရှိသူ အဖွားတစ်ဦးမှာ တစ်လခန့်ဖျားနာပြီးနောက် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဒေါက်တာစိုးဝင်းပိုင်က“တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေဆိုရင်တော့ သွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး တစ်လမှာ နှစ်ကြိမ်လောက် ကျန်းမာရေးစောက်ရှောက်မှုလုပ်ပေးတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ကိုဗစ်ကာလ ဖျားနေတဲ့ သူတွေ ကို Swab ယူပေးထားပါတယ်”ဟု ဆိုသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75895
တီးတိန်မြို့နယ်၊ ခိုင်ကမ်းမြို့မှာ သစ်တောနယ်မြေမှာ နေထိုင်သူတွေကို ကျူးကျော်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး အိမ်တွေဖယ်ရှား ပေးဖို့ သစ်တောဌာနက အမိန့်စာပို့ အကြောင်းကြားထားပါတယ်။ ခိုင်ကမ်းမြို့နယ်၊ အမှတ် ၄ ရက်ကွက်၊ ကွဲတံတားရဲ့ အောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ နေအိမ် ၂၆ လုံးကို စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့က နောက်ဆုံးထား ဖယ်ရှားခိုင်းတာဖြစ်ပြီး ဒေသခံတွေကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့ ကာလဖြစ်တာကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ဖို့ အခက်အခဲရှိနေ တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒေသခံတချို့ကတော့ နေအိမ်ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ အခက်အခဲတွေရှိတာကြောင့် အတည်တကျနေနိုင်ဖို့ ဆန္ဒရှိနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့က ကျူးကျော်နေအိမ်တွေက မိသားစုဝင်တွေကို ကိုးမိုင်သစ်တောစခန်းမှာ လာခေါ်ခဲ့ပြီး စစ်ဆေး မေးမြန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဦးထန်လမ်မုန့်က RFA ကို ပြောပါတယ်။“ကျွန်တော်တို့ကို သစ်တောကနေ စစ်ဆေး မေးမြန်းဖို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေပေါ့ဗျာ၊ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အစိုးရ ကိုးမိုင်သစ်တောရုံးကို ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ သူတို့ စစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့ မိဘအမည်တို့၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တို့၊ ခိုင်ကမ်းကို ဘယ်နှစ်ခုနှစ်က စရောက်သလဲ၊ ကျူးကျော်ဘဝကို ဘယ်နှခုနှစ်ကရောက်လဲ ဒါတွေမေးပါတယ်။ ပြီးတော့ နောက်ဆုံး အချက်ကတော့ သစ်တောကနေပြီးတော့ ဒီမှာကျူးကျော်မြေကို ဖယ်ရှားမယ်၊ ရှင်းလင်းမယ်ဆိုပြီးမှ နောက်တစ်ကြိမ် တတိယအကြိမ် စာပေးခံရရင် မင်းတို့ ဘယ်လိုခံစားချက်ရှိပါသလဲဆိုပြီး မေးမြန်းပါတယ်။ အဲဒါကျတော့ လူကြီးမင်းတို့ရယ် ကျွန်တော်တို့မှာ ခိုလှုံစရာလုံးဝမရှိတဲ့အခါကျတော့ ဖယ်တော့ ဖယ်ရှားချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတော်ကလည်း နေရာချထား ပေးတဲ့အထိ ခိုလှုံခွင့်ပေးပါဆိုပြီးမှ ကျွန်တော်တို့ အသနားခံခဲ့ပါတယ်”ကွဲချောင်းကူးတံတားရဲ့ အပေါ်ဘက်က အိမ်တွေက တော့ သစ်တောမြေကိုကျူးတဲ့ ပုံစံဖြစ်ပေမယ့် ဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးက တိုင်ပင်ပြီး နေရာချထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ကို ဖယ်ရှားခိုင်းတာမျိုးမရှိဘူးလို့ ချင်းလူမှုရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကိုဇမ်းထွမ်းက ပြောပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခိုင်ကမ်းမြို့ သစ်တောဦးစီးဌာနကို RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမယ့် လက်ခံဖြေကြားခြင်း မရှိပါဘူး။ တီးတိန်မြို့နယ်၊ ခိုင်ကမ်းမြို့ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးလှမျိုးကတော့ နေအိမ်တွေ ဖယ်ရှားဖို့ ကိစ္စကို သစ်တောဌာနက ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရက ညွှန်ကြားချက်မရှိသးကြောင်း ပြောပါတယ်။ https://www.rfa.org/bur mese/news/chin-slum-house-09302020055838.html
ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့နယ်တွင် ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၂၇၊ ၂၈ ရက်နေ့တွင် လက်ပြန်ကြိုးချည်ထားသော အမည်မသိ ပိုင်ရှင်မရှိသော အလောင်း ၂လောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း အမ်းမြို့နယ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းရေးရာ စောင့်ကြည့်လှုပ်ရှား ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုမျိုးလွင်ပြောဆိုသည်။ အဆိုပါ အလောင်း ၂ လောင်းကို အမ်းမြို့နယ်အအတွင်းရှိ အိုးပုံကျေးရွာ အနီး မြောက်ဦးချောင်းထဲတွင် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့က အလောင်း ၁လောင်းတွေ့ရှိပြီး စက်တင်ဘာ ၂၈ရက်နေ့တွင် အမ်းချောင်းဝ ပေသာမော်ပေါက်တွင် အလောင်း ၁ လောင်း တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ ဒီလ ၂၇ရက်နေ့မှာ တစ်လောင်းတွေ့တယ်ပေါ့။ အဲတာက အမ်းမြို့နယ် အိုးပုံကျေးရွာ အနီး မြောက်ဦးချောင်းထဲမှာ ပထမဦးဆုံးတွေ့တဲ့အလောင်းပေါ့။ လက်ကို နောက်ပြန်တုတ်ထားတဲ့ တစ်လောင်းတွေ့တယ်ပေါ့။ ၂၈ ရက်နေ့မှာပေါ့။ အမ်း ချောင်းဝပေါ့။ ပေသာမော်ပေါက်မှာ ဒုတိယတစ်လောင်းတွေ့တယ်ပေါ့။ အဲဒီအလောင်း ၂ လောင်းတွေ့တာတော့ ရှိတယ်။ ၂၇ ရက်နေ့က တွေ့တဲ့အလောင်းကတော့ အမ်းရဲစခန်းကနေပြီးတော့ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက အလောင်းကို သယ်ယူသွား တယ်ပေါ့။ ၂၈ ရက်နေ့မှာ တွေ့တဲ့အလောင်းကတော့ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ဒေသခံတွေက မြေမြှုတ်လိုက်ကျတယ်ပေါ့။ အဲဒီ အလောင်းက အမ်းချောင်းထဲမှာ မျောနေတဲ့ အခါမှာ အဲဒီချောင်းကို မှီခိုနေရတဲ့ ရေလုပ်သားတွေရှိတယ်။ အဲဒီရေလမ်း ကြောင်းကို မှီခိုနေရတဲ့ ဒေသခံတွေ အဲဒီအလောင်းကို မြင်တွေ့တဲ့အခါ စိုးရိမ်စိတ်တွေ ထိတ်လန့်စေမှုတွေ မြင့်တက်နေတဲ့ အနေအထားမှာရှိတဲ့အခါ အဲဒီအလောင်းကို ဒေသခံတွေက မြေမြှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။ အလောင်း ၂လောင်းလုံးက လက်ကို နောက်ပြန်ကြိုးတုတ်ထားတယ်” ဟု ကိုမျိုးလွင်က ပြောဆိုသည်။
“ အလောင်း ၂ လောင်းလုံးကို ချည်ထားတဲ့ ကြိုးကလည်း ပုံစံတူနေတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော် သုံးသပ်မိသလောက်ဆိုရင် ဒီ အလောင်း ၂ လောင်းက တစ်နေရာထဲမှာ ဖြစ်တာလား။ ဒီအလောင်း ၂ လောင်းက ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်မိ တယ်။ ဒါပေမယ့် အလောင်း ၂လောင်းတွေ့တဲ့ နေရာတွေကတော့ တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာဝေးတယ်။ ၁ဝမိုင်လောက်တော့ ဝေးတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အလောင်း ၂လောင်းတွေ့တဲ့ ချောင်းကတော့ တဆက်တည်းပဲ မြောက်ဦးချောင်းက ထွက်တာနဲ့ အမ်းချောင်းကိုရောက်တယ်ပေါ့။ ချောင်းကတော့ တဆက်တည်းပေါ့”ဟု ကိုမျိုးလွင်ကပြောဆိုသည်။ အမ်းမြို့နယ်မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ထုမေကလည်း ယင်းဖြစ်စဉ်ကို အင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်သည့်အတွက် သိရှိ ထားသော်လည်း အလောင်းပိုင်ရှင်မည်သူဆိုသည်ကို မသိရှိရသေးကြောင်း ဆက်လက် စုံစမ်းမေးမြန်းနေကြောင်း ပြောဆို သည်။ https://www.khitthitnews.com/2020/10/%e1%80%a1%e1%80%9 9%e1%80%ba%e1%80%b8%e1
ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပလက်ဝမြို့တွင် စက်သုံးဆီ (ဒီဇယ်) ပြတ်လပ်မှုကြောင့် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ည မှစ၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ပလက်ဝမြို့နယ်အုပ်ချူပ်ရေးမှူးထံမှသိရသည်။
ပလက်ဝမြို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရာတွင် အသုံးပြုမည့် ဒီဇယ် ပီပါ (၁၂၀) လုံးသည် ဆမီးမြို့တွင်သောင်တင်နေပြီး နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိခြင်းကြောင့် သယ်ယူရန်အခက်အခဲဖြစ်နေကြသည်ဟု ပလက်ဝမြို့နယ်အုပ်ချူပ်ရေးမှူး ဦးအောင်လောဟာ ကပြောသည်။“လက်ရှိ ကျနော်တို့ဆီမှာ ရှိတဲ့ဟာက ကုန်သွားတယ်၊ ဆမီးမှာ ပီပါ အလုံး ၁၂၀ တော့ရှိ တယ် ဒါပေမယ့် လမ်းကြောင်း မကောင်းသေးလို့မသယ်နိုင်သေးတာ၊ အဲဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာက ဟိုဘက်အဖွဲ့အစည်း
တွေရှိတယ်လေ လမ်းကြောင်းရှင်းမှဘဲ တပ်ကခွင့်ပြုတာကိုး တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီစောင့်နေတာကတော့’’ဟု ဦးအောင်လော ဟာ ကပြောသည်။ မဟာဓာတ်အားလိုင်းမရောက်ရှိနိုင်သေးသည့်အတွက် မြို့နယ်လျှပ်စစ် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးဦးစီးဌာနမှ ဒီဇယ်ဆီအသုံးသော မီးစက်ဖြင့် ယခင်က တစ်ရက်လျှင် (၄) နာရီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးလေ့ရှိသည်။
ပလက်ဝမြို့နယ်သည် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) တို့ စစ်မက်ဖြစ်ပွားရာဒေသဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ဆမီးမြို့တို့မှ ဆက်သွယ်သော လမ်းကြောင်းများပြတ်တောက်သည့်အတွက် စက်သုံးဆီအပြင် စားနပ်ရိက္ခာများလည်း ပြတ် တောက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ကလည်း နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိသောကြောင့် စက်သုံးဆီများ သယ်ယူရန် အခက်အခဲဖြစ်နေသည့်အတွက် ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ရက်အတော်ကြာလျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက် ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75896
လွိုင်ကော်တက္ကသိုလ် စောင့်ကြည့်ကြပ်မတ်တဲ့နေရာကနေ ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူကို အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် (၁)နှစ်နှင့် (၆)လ ချမှတ်ခံရတယ်လို့ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ရှမ်းပြည်နယ် လားရှိုးမြို့ကနေ လွိုင်ကော်မြို့ကို ပြန်လာတာတဲ့ လွိုင်ကော်မြို့ နွားလဝိုး ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထီးပလောခူကျေးရွာမှာ နေထိုင်သူ အမျိုးသား တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ထွက်ပြေးဖို့ ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက် လုံခြုံရေးတာဝန်ကျ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက တားမြစ်ပေမယ့်လည်း လုံခြုံရေးတာ ဝန်ကျ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကို ခိုက်ရန်ပြုပြီး ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၂၆/၂၉ အရ လွိုင်ကောမြို့နယ်တရားရုံးကို တရားစွဲဆိုတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကယားပြည်နယ်မှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့် တရားစွဲဆိုခံရပြီး ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကယားပြည်နယ် မြို့နယ်အသီးသီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်)ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး စောင့်ကြည့်ကြပ်မတ်တဲ့ Community Based Facility Quarantine ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုမှာ စက်တင်ဘာလ ၂၉ရက်နေ့အထိ လူဦးရေ (၃၆၃)ဦးရှိပြီး ဆေးစစ်ချက်အဖြေ စောင့်ဆိုင်းဆဲလူနာ (၃၆) ဦးရှိတယ်လို့ ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လူမှုစာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားချက်အရ သိရပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75882
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာ ကပ်ဘေးကာလအတွင်း အစိုးရ ထောက်ပံ့ငွေကို အပြည့်အဝမရကြဘူးလို့ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်တွေက ပြောပါတယ်။ စစ်တွေမြို့ ခေါင်းဒုက္ကာ အမှတ်(၂)ဒုက္ခသည်စခန်းက အမည်မဖော်လိုတဲ့ ဒုက္ခသည်တစ်ဦးက မနေ့က စခန်း စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီကနေတဆင့် ဒုက္ခသည်တွေကို ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်တဲ့အခါ ငွေလေးသောင်းကျပ် ကိုင်ဆောင်ကာ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းရိုက်ကြပြီးနောက် ငွေသုံးထောင်ကိုဖြတ်ပြီး ကျန်တဲ့သုံးသောင်းခုနှစ်ထောင်ကိုသာ ဒုက္ခသည်တွေကို ပေးခဲ့ ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သက္ကယ်ပြင်ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ အုန်းတောကြီးတောင် စခန်းတွေက ဒုက္ခသည်တွေကလည်း အလားတူ ဖြတ်တောက်ခံရ ပါတယ်။ အုန်းတောကြီးမြောက် ဒုက္ခသည်စခန်းမှာတော့ အခန်းပေါင်း ၂၇၀၀ ကျော်အနက် အိမ်ထောင်စု ၂၁၅ စုဟာ ထောက်ပံ့ကြေး ပေးအပ်မယ့် စာရင်းထဲမှာ မပါတာကြောင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ မနေ့ကတင်ပြလိုက်ကြတယ်လို့ စခန်း လူကြီးတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ အလားတူ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ဆင်သေပြင်ကျေးရွာကနေ ထိပ်ထူး ပေါက်ကျေးရွာကို ထွက်ပြေးခိုလှုံနေကြရတဲ့ မွတ်စလင် အိမ်ထောင်စု ၇၁ စုအနက် ၅၇ စုကို ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ရာ မှာလည်း တစ်အိမ် ထောင်ကို ခုနစ်ထောင်ကျပ်စီ ဖြတ်တောက်ခံရတယ်လို့ ရွာသားတွေက ပြောပါတယ်။
အခုလိုဖြတ်တောက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ ဒုက္ခသည် ငါးဦးက မနေ့က သွား ရောက်တိုင်ကြားခဲ့ရာမှာ ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေမယ်လို့ အကြောင်းပြန်ခဲ့ပေမယ့် ကျေးရွာကို ပြန်ရောက်လာချိန်မှာ တော့ ကျေးရွာအာဏာပိုင်တွေက ရွာကနေ နှင်ထုတ်တာကြောင့် ဒီနေ့မနက်မှာတော့ မူလနေရပ် ဆင်သေပြင်ရွာကို ပြန်နေ ကြရတယ်လို့ ရွာကနေ နှင်ထုတ်ခံရတဲ့ ဦးမာမောက်ခေါ်ဘီက RFA ကို ပြောပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ထောက်ပံ့ ကြေးငွေတွေကို ဘယ်သူတွေက ဖြတ်တောက်တယ် ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ RFA က ဆက်လက် စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/refugees-in-sittwe-10012020032254.html
သျှမ်းပြည်ကိုဗစ်-၁၉ ထိန်းချုပ်ရေး နှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေး ကော်မတီ မှ ကုန်တင်ကား နှင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ ထွက်ခွာခွင့် (၁၄) ရက် ပိတ်လိုက်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ သျှမ်းပြည်တွင်းသို့ ကုန်တင်ကားနှင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ ဝင်/ထွက် သွားလာခွင့်ကို အောက်တိုဘာ ၁ မှ ၁၄ ရက်ထိ ယာယီပိတ်ထားလိုက်ကြောင်း သျှမ်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့က စက်တင်ဘာ (၃၀) ရက် တွင် ပြုလုပ်သည့် သျှမ်းပြည် ကိုဗစ်-၁၉ ထိန်းချုပ်ရေး နှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေး ကော်မတီ ၌ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ထောက်ခံစာရှိရင်လာလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ထောက်ခံစားက ၂ပတ်အတွင်း ရောဂါ ကင်းရှင်ကြောင်းထောက်ခံချက် ဖြစ်ရမယ်”ဟု မူဆယ်သစ်သီးပွဲရုံပိုင်ရှင် စိုင်းမြင့်ဘို က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကိုပြောသည်။ မူဆယ်မြို့သို့လာမည့် ကုန်တင် ကား သမားများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေး ထောက်ခံစာပါရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထောက်ခံစာပါမှသာလျှင် ဝင်ခွင့်ပေးမည် ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ မူဆယ်(၁၀၅)မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်တွင် ကားသမားတဦးထံ ကိုဗစ်-၁၉ တွေ့ရှိပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ တင်းကြပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
သျှမ်းပြည် အတွင်းသို့ အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှ ကုန်တင်ယာဉ်များ ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်လာပါက ကုန်တင် ယာဉ်မောင်းနှင်သည့် ယာဉ်မောင်း နှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်များတွင် ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနက (၂) ပတ် အတွင်း ထုတ်ပေးထားသည့် Covid-19 ရောဂါ ကင်းရှင်းကြောင်း (Negative) ထောက်ခံချက် ပါရှိမှသာ ဝင်ရောက်ဖြတ် သန်းခွင့်ပြု မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သျှမ်းပြည် အတွင်းမှ ကုန်တင်ယာဉ်များ အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် များသို့ ထွက်ခွာခွင့်ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်ထိ ခေတ္တရပ်ထားနားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https ://burmese.shannews.org/archives/18730
ကယားပြည်နယ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ တားဆီးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာ ဖော်ဆောင် နိုင်ရေးအတွက် လူစုလူဝေး မဖြစ်ပေါ်စေရန် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရီးသွားလာမှု၊ လည်ပတ်မှုများသည့် အထင်ကရ နေရာ များအား ယာယီပိတ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် သတင်း ထုတ်ပြန် သည်။ ထုတ်ပြန်ချက်အရ လွိုင်ကော် ထီးစဲခါးရေတံခွန်နှင့် ကြတ်ဂူ၊ ဒီးမော့ဆို ငွေတောင်ဆည်၊ ထီးပွင့်ကန်၊ ကန်ခုနစ်ဆင့်၊ ပန် ပက်ကျေးရွာ၊ တနီးလာလဲ၊ ကွိုင်ငံနှင့် ရေပြာအိုင်(နန်းမယ်ခုံ)၊ ဖရူဆို ထီးပရူနူဂူနှင့် ဆင်ဖြူတောင်များသို့ လာရောက် လည် ပတ်ခွင့်အား အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်ထိ ပိတ်ထားမည် ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ အထင်ကရ နေရာများသည် အထူးသဖြင့် ပြည်နယ်ပြင်ပမှ လာရောက်ကြသူတိုင်း သွားရောက် လည်ပတ်လေ့ရှိ သည့် နေရာများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်သန်းလင်းက “ကျနော်တို့ ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဒီနေ့ထိ ရောဂါပိုး လုံးဝမတွေ့ရှိသေးတာကြောင့် ဒါကိုဆက်ထိန်းတဲ့ အနေနဲ့ရော၊ လုံးဝ ဖြစ်ပွားမှု မရှိအောင် ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပါ ခဏပိတ်လိုက် တာပါ” ဟု ဧရာဝတီသို့ အတည်ပြု ပြောဆိုသည်။
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အောက်တိုဘာ ၁ လလုံး ကယားပြည်နယ်ရှိ ခရီးသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းများ ပြေးဆွဲခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းထားပြီး ပြည်နယ်အတွင်း ပြေးဆွဲလျက်ရှိသော ယဉ်လိုင်းများကိုမူ ကျန်း မာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ပြေးဆွဲခွင့်ပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ကယားပြည်နယ်အတွင်းသို့ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူ အားလုံးနှင့် နိုင်ငံတွင်း မည်သည့် ဒေသမှမဆို ဝင် ရောက်လာသူအားလုံး Community Based Facility Quarantine (၁၄) ရက် နေထိုင်စေပြီး ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁) ကြိမ် ရယူ စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကာ Home Quarantine (၇) ရက် ထားရှိဆောင်ရွက်မည်ဟုလည်း သိရသည်။ https://burma. irrawaddy.com/news/2020/0 9/30/230798. html
ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့ အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊ မြို့ပတ်လမ်းနေ အသက် (၃၇)နှစ်ရွယ် ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ အမျိုးသား (၁)ဦး သည် ကင်ဆာရောဂါအခံဖြင့် စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က မြဝတီခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရ သည်။ Hospital Quarantine ထားရှိကာ စက်တင်ဘာ ၂၈ရက်နေ့တွင် ၎င်းအား ဓာတ်ခွဲနမူနာ အာခေါင်တို့ဖတ်(swab) ယူ၍ ပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ရာ စက်တင်ဘာလ(၃၀) ညပိုင်း ထုတ်ပြန် ချက်တွင် ပါဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ Stay at home ကြေညာထားသည့် ရန်ကုန်မြို့မှ ပြန်လာသူဖြစ်သည့်အတွက် ၎င်းအား ကိုင်တွယ်ကုသခဲ့သည့် မြဝတီခရိုင်ဆေးရုံ ဝန်ထမ်း အားလုံး Quarantine ဝင်ကာ Swab ယူ၍ စစ်ဆေးသွားမည်ဟုလည်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
၎င်းအပြင် ကွယ်လွန်သူ၏ ဇနီးဖြစ်သော လူနာစောင့်အမျိုးသမီးမှာ စစ်ဆေးချက်အရ Covid- 19 ပိုးမတွေ့ရှိသလို Covid-19 ပိုးတွေ့လူနာ သေဆုံးသူနှင့် ဇနီးတို့သည် ရန်ကုန်မှဆေးရုံ ဆင်း ပြီး မြဝတီခရိုင်ဆေးရုံးကြီးသို့ တိုက်ရိုက် Quarantine ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့် ယာဉ်မောင်းမှလွဲ၍ အခြားမည်သည့် Contact Person မျှမရှိကြောင်း မြဝတီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေး မှူး ဦးတေဇာအောင်က ပြောသည်။
မြဝတီမြို့ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ခွန်ဆာဝင်းနေ ထိုင်းပြန် အသက် ၂ နှစ် က လေးငယ် (၁)ဦးမှာ ရောဂါပိုးကင်းစင်၍ ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ရခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ယခု နောက်ဆုံး ပိုးတွေ့ အသက် (၃၇)နှစ်အရွယ် အမျိုးသား(၁)ဦးမှာ သေဆုံးခဲ့၍ လက်ရှိတွင် မြဝတီခရိုင် ပြည်သူ့ဆေးရုံ၌ covid-19 ပိုးတွေ့ အတည်ပြုလူနာ (၃)ဦးအား သီးသန့်ဆောင်တွင် ဆေးဝါကု သမှု ခံယူလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%9d %e1% 80%90%e1%80%ae%e1%8
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တည်ဆောက်နေတဲ့ စစ်တွေဆိပ်ကမ်း ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်အတွင်း လုပ်ငန်း စတင် လည်ပတ်နိုင်ဖို့ မြန်မာနဲ့ အိန္ဒိယ ပူးတွဲ ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံခြားရေး အတွင်းဝန် Harsh Shringla က ပြောပါ တယ်။ ကြာပသတေးနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ အိန္ဒိယ-မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနတွေ အကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးစိုးဟန်နဲ့ ဆွေးနွေးအပြီး အိန္ဒိယ ဘက်က အခုလို ပြောကြားလိုက်တာပါ။ အိန္ဒိယကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖြတ် ကျော်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအထိ ဆက်သွယ်မယ့် သုံးနိုင်ငံ အဝေးပြေးလမ်းတည်ဆောက်ရာမှာ ပါဝင်တဲ့ တံတား ၆၉ စင်းတည်ဆောက်ရေး တင်ဒါ ခေါ်ယူရေး လုပ်ငန်းတွေကိုတွေလည်း မကြာခင် စတင်တော့မယ်လို့ Shringla က ပြောပါတယ်။
စစ်တွေဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်ရေးက ကုလားတန်မြစ် ဘက်စုံ စီမံကိန်းရဲ့ တစိတ်တဒေသ ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ကုန်းတွင်းပိတ် အရှေ့မြောက်ဘက် ပြည်နယ်တွေ မီဇိုရမ် ပြည်နယ်ကတဆင့် ပင်လယ်ထွက်ပေါက် ရရှိရေးအတွက် အရေးပါတဲ့ စီမံကိန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းတွေ စတင်နိုင်တဲ့အခါမှာ အိန္ဒိယ ကုန်ပစ္စည်း တွေကို ကုလားတန်မြစ်ကတဆင့် စစ်တွေဆိပ်ကမ်းအရောက်ပေးပို့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုတွေ တိုးမြှင့်နိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ နှစ်နိုင်ငံအကြား တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရေး သဘောတူညီချက် ရနိုင်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်က အရှိန်မြှင့် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ကိုလည်း အိန္ဒိယ နိုင်ငံခြားရေး အတွင်းဝန်က တောင်းဆို ထားပါတယ်။
ရခိုင်အရေးကိစ္စကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ရာမှာ အိန္ဒိယအနေနဲ့ မြန်မာနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့အတူ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း သုံးနိုင်ငံ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းက အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူတွေ ဘေးရန်ကင်းကင်းနဲ့ စောစီးစွာ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်း အိန္ဒိယ နိုင်ငံခြားရေး အတွင်းဝန် Shringla က ပြောပါ တယ်။ https://burmese.voanews.com/a/sittwe-india-myanmar-project-/5605 881.html
ပြည်တွင်း ကူးစက်မှုမြင့်မားလျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ မြဝတီမြို့သို့ ရောက်ရှိလာသူ (၃)ဦးထံမှ Covid-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိ၍ မြဝတီခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ပေးထားပြီး ၎င်းတို့နှင့် ထိတွေ့ခဲ့သူ (၇၀) ဦးခန့်အား Quarantine ထားရှိကာ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဟု မြဝတီခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတေဇာအောင်က ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့မှ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့က ပြန်လာပြီး ၂၃ ရက်နေ့က မြဝတီခရိုင်ဆေးရုံတွင် ပဏာမ စစ်ဆေး စဉ် Covid-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ မြဝတီမြို့ သင်္ဃန်းညီနောင် မြို့သစ် ၇ လမ်းမှ အသက် ၄၇ နှစ်အရွယ် အမျိုး သမီး (၁)ဦး၊ စက်တင်ဘာ လ ၁၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့မှ မြဝတီမြို့သို့ရောက်ရှိပြီး ၂၀ ရက်နေ့တွင် မြဝတီ အ ထက(၁) Quarantine Center တွင် အသွားအလာကန့်သတ်ထားသူ အသက်(၂၁)အရွယ် အမျိုးသား(၁)ဦး နှင့် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့မှ မြဝတီမြို့သို့ရောက်ရှိပြီး ဟိုတယ်တစ်ခုတွင် တည်းခိုနေထိုင်ပြီး စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် မြဝတီ အ.ထ.က(၁) Quarantine Center တွင် အသွားအလာ ကန့်သတ်ထားသူ အသက် (၅၆)နှစ် အရွယ် အမျိုးသား(၁)ဦး စုစုပေါင်း ကိုဗစ် အတည်ပြုလူနာ (၃)ဦးကို သီးသန့်ထားရှိကာ ဆေးဝါးကုသမှုပြုလုပ်နေကြောင်း ဦးတေဇာအောင်က ပြောသည်။ ယင်းတို့ ၃ ဦးနှင့် ထိတွေ့ခဲ့သည့် contact persons စုစုပေါင်း (၇၀)ဦးခန့်အား မြဝတီမြို့ တိုးချဲ့ မဲကနယ် Quarantine Center တွင် သီးသန့်ထားရှိကာ လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်သွား မည်ဟု မြဝတီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဆက်ပြော သည်။
“ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအပါအဝင် stay at home သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြို့နယ်တွေက ပြန်လာသူတွေကို မြဝတီမြို့အဝင် သင်္ဃန်းညီနောင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှ စပြီး ပိုမိုတင်းကြပ်ကာ စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီး မြဝတီ အ.ထ.က(၁) ကျောင်းမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Quarantine စခန်းမှာ ထားရှိပြီး လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်မှုတွေ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်”ဟု ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတေဇာအောင်က ပြောသည်။ http://kicnews.org /2020/09/%e1% 80%bb%e1%80%99%e1%80%9d%e1%80%90%e1%80%ae%e1%
၁။ ကော့ကရိတျလမျးဟောငျး တပျမတျောသားပဈသတျခံရမှုကိစ်စ စှပျစှဲပွောဆိုမှု အခွအေမွဈမရှိကွောငျး KNU တုံ့ပွနျ
၂။ လူနှဈဦးကို သတျဖွတျမှု ကြူးလှနျခဲ့သူ လူတဈစုကို ကျောသူးလတေရားရေးအရ အရေးယူနိုငျရနျ စီစဉျ
၃။ မှနျညီညှတျရေးပါတီ၏ မှနျတိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုကိုယျစားလှယျလောငျး မှနျပွညျသဈနယျမွတှေငျ မဲဆှယျမရဖွဈနေ
၄။ KIO ထိနျးခြုပျနယျမွေ အဝငျအထှကျအားလုံး ပိတျ
၅။ ကြောကျမဲမွို့နယျအတှငျး RCSS/SSA လှုပျရှားရာ တောပိုငျးသို့ အစိုးရတပျပဈခတျ
၆။ ခငျြးပွညျနယျ ဒုတိယအကွိမျ မဲစာရငျးပထမအကွိမျ မဲစာရငျးထကျ ၁ သောငျးကြျောလြော့နညျး
၇။ ကယားဝနျကွီးခြုပျဟောငျးကို စှပျစှဲပွဈတငျမှု အခွခေံဥပဒဆေိုငျရာ ခုံရုံး ကွားနာမညျ
၈။ မဲဆှယျမိနျ့ခှနျး ဆငျဆာ ဖွတျသညျ့ကိစ်စ ထားဝယျတိုငျးရငျးသားမြားပါတီ ကွညောခကျြ ထုတျပွနျ
၉။ မူးယဈဆေးဝါးအန်တရယျကာကှယျတားဆီးရေး လှတျတျောအသီးသီးသို့တငျပွသှားရနျ မှနျညီညှတျရေးပါတီက မူဝါဒ ခမြှတျထား
၁၀။ မွဈဆုံစီမံကိနျးကို လာမညျ့အစိုးရလကျထကျတှငျလညျး ဆကျလကျကနျ့ကှကျသှားမညျဟု ဒသေခံမြားပွော
၁၁။ ခငျြးပါတီ CNLD ကို မဲပေးထောကျခံကွရနျ ခငျြးလူငယျကှနျယကျတောငျးဆို
၁၂။ ဧရာဝတီ ကရငျလူငယျကျောမတီမှ ကရငျပါတီ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးမြားအတှကျ ကူညီမှုမြားစတငျ
၁၃။ နမ်မတူမွို့နယျ အတှငျး ဆယျကြျောသကျ အမြိုးသမီးတဦး မီးရှို့ခံရသညျ့ အလောငျးတှေ့
၁၄။ မိုးညှငျးခရိုငျတှငျ ပုံစံ (၃-က) မဲထညျ့ရနျလြောကျထားသော တပျ နဲ့ ရဲ အငျအား ၁ ထောငျကြျောရှိ
၁၅။ သထုံမွို့နယျအတှငျး ပအိုဝျးအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ (PNO) ပါတီနှငျ့ ကရငျပွညျသူ့ပါတီ (KPP) တို့ ပူးပေါငျးကာ ရှေးကောကျပှဲ အောငျနိုငျရေး ဆိုငျးဘုတျစိုကျထူခွငျးမြား ပွုလုပျ
၁၆။ ဖလမျးဆူရျဘုနျလယောဉျကှငျးဖှငျ့ပှဲ ယခုလ အောကျတိုဘာလထဲတှငျကငျြးပမညျ
၁၇။ လူသတျတရားခံ တပျမတျောသားတှေ ပွနျလှတျပေးတဲ့အဖွဈမြိုး နောငျမဖွဈဖို့ ကုလမှာ မွနျမာကတိပေး
၁၈။ ရခိုငျ့ဦးဆောငျပါတီက ရုပျမွငျသံကွားတှငျ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးအတှကျ ရိုကျကူးရေး မပွုလုပျတော့ဟုဆို
၁၉။ မွောငျးမွမွို့နယျ ငါးမွငျးခြောငျးကြေးရှာတှငျ ကရငျအမြိုးသားပါတီ အောငျနိုငျရေးဆိုငျးဘုတျတငျပှဲ ပွုလုပျ
၂၀။ ငှပြေျောစံပွကြေးရှာတှငျ မူးယဈဆေးဝါး ရောငျးသူနှငျ့ သုံးစှဲသူမြားလာ
၂၁။ မငျးပွားတှငျ နှဈရကျဆကျတိုကျ တိုကျပှဲဖွဈပှား
၂၂။ COVID ကာလ Stay at Home အစီအစဉျကွောငျ့ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ဖားကနျ့ဒသေရှိ သိနျးနှငျ့ ခြီသော ရှပွေ့ောငျးလုပျသားမြား မဲပေးခှငျ့ဆုံးရှုံးနိုငျဖှယျရှိနေ
၂၃။ ရခိုငျရှိ စဈဘေးရှောငျစခနျးမြားတှငျ ဖြားနာသူမြားပွားလာနေ၍ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုပေးရနျ လိုအပျနေ
၂၄။ တီးတိနျမွို့နယျ သဈတောနယျမွကေ နအေိမျတှကေို ဖယျရှားခိုငျး
၂၅။ အမျးတှငျ နောကျပွနျလကျပွနျကွိုးခညျြ ထားသော ပုတျပှအလောငျး ၂လောငျးတှရှေိ့ရပွီး ပိုငျရှငျ မသိရသေး
၂၆။ ဒီဇယျဆီပွတျလပျမှုကွောငျ့ ပလကျဝမွို့တှငျ လြှပျစဈဓာတျအားဖွနျ့ဖွူးနိုငျတော့မညျမဟုတျ
၂၇။ စောငျ့ကွညျ့ကွပျမတျတဲ့နရောကနေ ထှကျပွေးဖို့ကွိုးစားသူ အလုပျနှငျ့ထောငျဒဏျ (၁)နှဈနှငျ့ (၆)လ ခမြှတျခံရ
၂၈။ စဈတှမှော ဒုက်ခသညျ ထောကျပံ့ငှေ ဖွတျတောကျခံနရေ
၂၉။ ကုနျတငျယာဉျ နှငျ့ ခရီးသညျယာဉျ မြား ထှကျခှာခှငျ့ ၁၄ ရကျ ပိတျမညျ
၃၀။ ကိုဗဈကွောငျ့ ကယားပွညျနယျ အထငျကရနရောမြား လညျပတျခှငျ့ပိတျ
၃၁။ မွဝတီမွို့တှငျ ကိုဗဈအတညျပွုလူနာ ၁ ဦး သဆေုံး
၃၂။ စဈတှဆေိပျကမျးကို ရှနှေ့ဈဆနျးပိုငျး စလညျပတျနိုငျဖို့ အိန်ဒိယနဲ့မွနျမာ ဆှေးနှေး
၃၃။ မွဝတီခရိုငျပွညျသူ့ဆေးရုံတှငျ Covid-19 အတညျပွုလူနာ ၃ ဦး ဆေးကုသမှုခံယူနေ၊ ၎င်းငျးတို့နှငျ့ ထိတှခေဲ့သူ ၇၀ နီးပါး Quarantine ထားရှိ
မွဝတီ-ကော့ကရိတျလမျးဟောငျးတှငျ ဖွဈပှားခဲ့သညျ့ တပျမတျောသားမြား၏ ပဈသတျခံရမှုဖွဈစဉျတှငျ KNU -ကရငျ အမြိုးသားအစညျးအရုံး တပျဖှဲ့ဝငျမြား၏ ပါဝငျပတျသကျမှုမြားရှိကွောငျး တပျမတျောဘကျမှ ပွောဆိုမှု အပျေါအခွအေမွဈ မရှိသညျ့ စှပျစှဲခကျြသာဖွဈကွောငျး KNU-ကရငျအမြိုးသား အစညျးအရုံးက ပွနျလညျတုံ့ပွနျ ပွောဆိုခဲ့သညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ သွဂုတျလ ၃၀ ရကျနကေ့ မွဝတီ-ကော့ကရိတျ လမျးဟောငျးတှငျ ဖွဈပှားခဲ့သညျ့ တပျမတျောသား ၂ ဦး ပဈသတျ ခံရမှုနှငျ့ မိုငျးထောငျမှုဖွဈစဉျတှငျ ပါဝငျသူမြားကို ဖမျးဆီးရမိထားပွီး စဈဆေးခကျြအရ KNU တပျဖှဲ့ဝငျမြားဖွဈသညျဟု တပျမတျောဘကျမှ ပွောဆိုခဲ့ခွငျးအပျေါ KNU အထှထှေအေတှငျးရေးမှူးခြုပျ ပဒိုစောတာဒိုမူးက ယခုလို ပွောဆိုခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးက “နံပါတျတဈက ဒီကိစ်စက လုံးဝမဟုတျဘူးပေါ့နျော။ သူတို့(စဈတပျ) စှပျစှဲတဲ့ဟာတှကေလညျး ကနြျောတို့ အတှကျ အခွအေမွဈမရှိဘူး။ ဘာဖွဈလဲဆိုတော့ တကယျလို့ KNU လူဆိုရငျ သူတို့မှာ ကိုယျပိုငျနံပါတျတှေ အကုနျလုံးရှိတယျလေ။ ထုတျပွောသညျဖွဈစေ၊ မပွောသညျဖွဈစေ ကနြျောတို့ မသိဘူးဒါကတော့ တပျမတျောဘကျကထှကျလာတဲ့ သူပွောတဲ့ပုံစံ အရတော့ ဟိုကထုတျပွောလို့ပေါ့နျော။ ဒီလိုမြိုးလူတဈယောကျယောကျက သူ့ပါသူပွောတဲ့ကိစ်စကို အထောကျအထား မရှိဘဲ နဲ့ ကနြျောတို့ကို အဲ့လို စှပျစှဲတဲ့ကိစ်စမြိုးက မဖွဈသငျ့ဘူး”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
ဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ ကြူးလှနျသူ နှဈဦးကို နယျခွားစောငျ့တပျ(BGF)နှငျ့ တပျမတျောတို့မှ မသင်ျကာသညျ့ နရောအခြို့ကို လုံခွုံရေးဆောငျရှကျနစေဉျ ပွီးခဲ့သညျ့ စကျတငျဘာလ ၂၇ရကျနကေ့ ဖမျးဆီးရမိပွီး ကနဦး စဈဆေးခကျြမြားအရ KNU ၏ တပျဖှဲ့ဝငျမြားဖွဈသညျဟု တပျမတျော သတငျးမှနျ ပွနျကွားရေးအဖှဲ့မှ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ဧရာဝတီ သတငျးဌာနသို့ ယမနျနေ့ (စကျတငျဘာ ၃၀) က ပွော ဆိုခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ အဆိုပါ ကြူးလှနျသူမြားမှာ ၃ ဦးဖွဈပွီး ၂ ဦးကို ဖမျးမိထားက ကနျြတဈဦးမှာ ထှကျပွေးလှတျမွောကျနဆေဲ ဖွဈ ကွောငျး ဖမျးဆီးရမိသူမြား၏ ထှကျဆိုခကျြအရ KNU တပျဖှဲ့ဝငျမြားဖွဈပွီး အမွဲတမျးတပျဖှဲ့ဝငျမြား မဟုတျသလို ၎င်းငျးတို့ကို မညျသူကခိုငျးစကွေောငျး ထုတျဖျောပွောဆို နိုငျခွငျးမရှိသေးကွောငျးနှငျ့ KNU ၏ အောကျခွအေဆငျ့မှ ခိုငျးစခွေငျးဖွဈကွောငျးလညျး ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ထညျ့ သှငျး ပွောဆိုခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျအတှကျ ယုံကွညျမှု တညျဆောကျနစေဉျ ကာလအတှငျး ထိုသို့ အခကျြအလကျ ခိုငျလုံ မှုမရှိဘဲ အပွနျအလှနျ စှပျစှဲပွောဆိုမှုမြားကွောငျ့ လကျရှိဖျောဆောငျသှားနသေညျ့ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျမြားအပျေါ ထိခိုကျမှုရှိလာနိုငျ ကွောငျး နှငျ့ ၎င်းငျးပွောဆိုမှုအပျေါ ကနျ့ကှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး KNU ဘကျက ဆိုသညျ။ http://kicnews.org/2020/10 /%e1%80%b1%e1%80%80%e1% 80%ac %e1%80%b7%e1%80%80%e1%
ကရငျပွညျနယျ၊ ဖားအံခရိုငျ ၊ ပိုငျကြုံ(လှိုငျးဘှဲ)မွို့နယျ၊ သမေ့ျောကလူ့ အုပျစုတှငျ စကျတငျဘာလ အစောပိုငျး က ဖွဈပှား ခဲ့သော လူနှဈဦးအား သတျဖွတျခဲ့သညျ့ လူတဈစုကို ကအေဲနျယူ-ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး၏ ကျောသူးလေ တရား ရေးအရ အရေးယူနိုငျရနျ စီစဉျနကွေောငျး KNU ဘကျက ပွောသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ စကျတငျဘာလ ၁ ရကျနကေ့ နှားအငှားလာရောကျပို့ဆောငျကွသညျ့ မယျပလာခီး ရှာသားနှဈဦးအား ဒသေအ ချေါ လယျ့ကဆောနရောအရောကျတှငျ အဆိုပါ လူအုပျစုက ဖမျးဆီးခြုပျနှောငျပွီး မသမေခငျြး သတျဖွတျ ခဲ့ခွငျးကွောငျ့ ကြူးလှနျသူအပါအဝငျ ညှနျကွားသူကိုပါ KNUမှ ဖမျးဆီးခဲ့ပွီး အရေးယူနိုငျရနျ ဆောငျ ရှကျလကျြရှိသညျဟု KNU အတှငျး ရေးမှူး (၂) ပဒိုစောလှထှနျးက ပွောသညျ။ “ ဒီကိစ်စက ရာဇဝတျမှု ဖွဈတဲ့အတှကျ သကျဆိုငျရာအမှုကိစ်စတှေ အမှနျဖွဈ ပျေါရေးအတှကျကတော့ KNPF (ကရငျအမြိုးသားရဲတပျဖှဲ့)ကို တာဝနျပေးထားတာပေါ့။ ဖာအံခရိုငျ၊ တပျမဟာ (၇) ဘကျက ဖွဈတဲ့ အ တှကျ ခရိုငျအုပျခြုပျရေး ဘကျကကော တပျမဟာဘကျကကော ဝိုငျးပွီးတော့ တာဝနျယူလုပျဆောငျပေးတာပေါ့။”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ ကရငျလကျနကျကိုငျအား လုံးပါဝငျသညျ့ ခုံရုံးဖှဲ့စဈဆေးပွီး ကျောသူးလေ တရားဥပဒေ အတိုငျး စီရငျမှုမြားပွုလုပျရနျ သဘောထားရှိခဲ့သျောလညျး ယနအေ့ခြိနျထိ လုပျငနျးစဉျ၏ နောကျဆုံးအခွအေနေ တငျပွမှုမှာ ဗဟိုသို့ မရောကျရှိသေးကွောငျး ပဒိုစောလှထှနျးက ဆကျပွောသညျ။
အဆိုပါ လူသတျမှုကို အဓိက ကြူးလှနျသူမှာ သုံးဦးဖွဈပွီး ပါဝငျပတျသကျသူမြားနှငျ့ အဓိက ညှနျကွားသူ မှာ ဒသေ၏ ဖိုးရသခေ့ျေါ ဘာသာရေး ခေါငျးဆောငျတဈဦး ခံယူထားသူဖွဈပွီး အားလုံးစုစုပေါငျး (၁၆)ဦး ခနျ့ရှိ ကွောငျးနှငျ့ ၎င်းငျးတို့ကို ခရိုငျအဆငျ့ ကရငျအမြုိးသားရဲတပျဖှဲ့-KNPF မှ စဈဆေးမှုအရ ပွဈမှုကြူးလှနျမှုကို ဝနျခံထားကွောငျး KNU တပျမဟာ(၇) တာဝနျရှိသူမြားထံမှ သိရသညျ။ ပွီးခဲ့သညျ့ စကျတငျဘာလ (၉)ရကျနကေ့ ဖစျေ့ဘှတျလူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာပျေါတှငျ ထှကျပျေါလာသညျ့ ရုပျသံ မှတျတမျးတဈခုအရ လကျထိတျဖွငျ့ လကျနောကျပွနျခတျကာ မှောကျလကျြသား အရပျဝတျလူ ၂ ဦး အား လူအုပျစုတဈစုက ရိုကျနှကျ၊ ကနျကြောကျပွီး ဦးခေါငျး၊ လညျပငျးနှငျ့ နံကွားနရောမြားကို ဓားမွောငျဖွငျ့ အခါခါ ထိုးသှငျးမှုမြား လုပျဆောငျကွသညျကို တှမွေ့ငျရသညျ။ http://kicnews.org/category/article/
လကျရှိ ကိုဗဈရောဂါပိုးကူးစကျမှုအရှိနျ မွငျ့မားနသေညျ့ကာလ၌ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျရှိ မှနျပွညျသဈပါတီ မျောလမွိုငျ ခရိုငျနယျမွအေတှငျး လူစိမျးမြားဝငျရောကျခှငျ့မပွုသဖွငျ့ မှနျညီညှတျရေးပါတီ MUP ကရငျပွညျနယျလှတျတျော မှနျ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုကိုယျစားလှယျလောငျး ကိုယျတိုငျလာရောကျ မဲဆှယျမရဖွဈနကွေောငျး မှနျသတငျး အဂေငျြစီသို့ ပွော သညျ။
“ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျ မှနျပွညျသဈပါတီနယျမွမှော အပွငျလူစိမျးတှေ လာခှငျ့မရှိဘူး ကနျ့သတျထားတယျ၊ အဲဒီနရော တှကေို မဲဆှယျစညျးရုံးဖို့ ကနြျောလညျး သှားဖွဈတော့မှာ မဟုတျပါဘူး၊ ကနြေျာ့ကို ခွှငျးခကျြအနနေဲ့ ခှငျ့ပွုပေးသညျ့တိုငျ အောငျ မသှားဖို့ဆုံးဖွတျထားတယျ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကိုယျ့အတှကျကွောငျ့ ဒသေခံတှငွေိုငွငျမှုမရှိစရေအောငျ ကိုယျကရောဂါပိုးမရှိပမေယျ့ သံသယအဖွဈမခံခငျြလို့ပါ”ဟု MUP ကရငျပွညျနယျလှတျတျော မှနျတိုငျးရငျးသားလူမြိုးစု ကိုယျစားလှယျလောငျး နိုငျထှနျးလှငျက မှနျသတငျးအဂေငျြစီသို့ ပွောသညျ။
လကျရှိတှငျ ကရငျပွညျနယျအတှငျး ထောကျခံခကျြအမြိုးမြိုးဖွငျ့ တဈနရောမှတဈနရော ခရီးသှားလာနရေသညျ့အတှကျ မှနျတိုငျးရငျးသားလူမြိုးစု ကိုယျစားလှယျ လောငျး တဈဦးအနဖွေငျ့ ပွညျနယျတဈခုလုံးရှိ မှနျကြေးရှာမြားသို့ ကိုယျတိုငျသှား ရောကျ မဲဆှယျနိုငျမညျ့ အနအေထား မရှိနိုငျသညျကို မှနျတိုငျးရငျးသားမြား နားလညျခှငျ့လှတျစလေိုကွောငျး နိုငျထှနျးလှငျ က ဆကျပွောသညျ။
“ကွားအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျက ကနြျောတို့မှနျပွညျသဈနယျမွမှောဆိုရငျ နိုငျငံရေးပါတီတိုငျးကို ကနြျောတို့ သတျမှတျထားတဲ့ စညျးကမျးတှအေတိုငျး မဲဆှယျစညျးရုံးခှငျ့ပွုထားပါတယျ ဥပမာ နိုငျငံရေးပါတီကိုယျစားလှယျတှဆေိုရငျ ကွာအငျးဆိပျကွီး မွို့နယျအဆငျ့ ဒီဒသေခံပါတီအဖှဲ့ဝငျတှကေိုပဲ လူထုနဲ့တှဆေုံ့စညျးရုံးဖို့ ခှငျ့ပွုပေးထားပါတယျ အပွငျလူတှေ လာရောကျ စညျးရုံးခှငျ့မပွုပါဘူး”ဟု မှနျပွညျသဈပါတီ Covid-19 ကာကှယျတားဆီးရေးနှငျ့ အရေးပျေါတုံ့ပွနျရေးကျောမတီ(ဗဟို) ဥက်ကဌ နိုငျဗညားလယျက ပွောသညျ။ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ NLD ပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ ကခငျြ၊ ကယား နှငျ့ ကရငျပွညျနယျ အောငျနိုငျရေးကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌတို့၏ စကျတငျဘာ ၂၉ ရကျနေ့ အှနျးလိုငျးစကားဝိုငျး၌ မှနျပွညျသဈ ပါတီနယျမွတှေငျ မှနျနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ပါတီမြားကိုသာ ဝငျရောကျခှငျ့ပွုကွောငျး NLD ပါတီ ကရငျပွညျနယျ အောငျနိုငျ ရေးကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးသနျးနိုငျက စှပျစှဲပွောဆိုခဲ့သညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/09/30/%e1%80% 99%e1%80%bd %e1%80% 94%e1%80%ba%e1%
အစိုးရထိနျးခြုပျနယျမွမှေ ပိုးတှအေ့တညျပွုလူနာမြားနှငျ့ ထိတှခေဲ့သောသူမြားသညျ KIO ထိနျးခြူပျရာဒသေအတှငျးသို့ ရောကျလာသောကွောငျ့ ယခုလိုအဝငျအထှကျပိတျလိုကျခွငျးဖွဈသညျဟု KIO Covid-19 ကာကှယျတားဆီးရေး ကျောမတီ အတှငျးရေးမှူး ဗိုလျမှူးကွီး ဟိနျးဝေါမျ က ယခုလိုပွောသညျ။ “မွနျမာနိုငျငံအတှငျး ကူဗဈကူးစကျလူနာမြားပွားလာသညျ နှငျ့အညီ ကိုဗဈကူးစကျခံရတဲ့ လူနာမြားနှငျ့ထိတှခေဲ့တဲ့ မွို့ကွီးတှကေနေ KIO ထိနျးခြုပျရာဒသေကို တဈယောကျ နှဈ ယောကျ ဝငျလာတဲ့အတှကျ အခြိနျအတိုငျးအတာ တဈခုထိ ရောဂါကူးစကျမှုလြော့ကတြဲ့အထိ ပိတျပငျဖို့ ဆိုတဲ့ရညျရှယျခကျြ လုပျဆောငျရခွငျးဖွဈတယျ” ဟု ဗိုလျမှူးကွီး ဟိနျးဝေါမျ က ပွောသညျ။
အဆိုပါ ထုတျပွနျခကျြတှငျ မိုငျဆတျပါ (Maisak Pa) ဂိတျမှတဆငျ့ KIO နယျမွသေို့ ဝငျရောကျလာသော မညျသူတဈဦး တဈယောကျကိုမြှ ဝငျရောကျခှငျ့မပွုကွောငျး၊ ကုနျပစ်စညျးသယျဆောငျသညျ့ မညျသညျ့ယာဉျကိုမြှ ဝငျခှငျ့မပွုကွောငျးနှငျ့ စားသောကျဆိုငျမြားတှငျ စုပေါငျးစားသောကျခွငျးမပွုပဲ ပါဆယျထုတျ စနဈဖွငျ့သာရောငျးခရြနျ ဟူသညျ့ အခကျြ (၃) ခကျြ ပါရှိသညျ။ ထုတျပွနျခကျြသညျ KIO ထိနျးခြူပျရာဒသေ မိုငျဆတျပါ ဝငျပေါကျ သာမက မိုငျဂြာယာနျ နှငျ့ အခွားKIO ထိနျးခြုပျနယျမွရှေိ ဂိတျမြား အားလုံးအကြူံးဝငျ ကွောငျး၎င်းငျးကဆကျပွောသညျ။ KIO ထိနျးခြူပျရာဒသေရှိ လူဦးရေ အယောကျ ၁၀၀ ကြျောကို တရုတျနိုငျငံအကူအညီဖွငျ့စဈဆေးခဲ့ပွီး လကျရှိအခြိနျတှငျလညျး ကှာရနျတငျးနရော ၄ ခုတှငျ လူဦးရေ ၂၀၀ ခနျ့ရှိနကွေောငျး သိရသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/01/kio-%e1%80%91%e 1%80% ad%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80
၅။ ကြောကျမဲမွို့နယျအတှငျး RCSS/SSA လှုပျရှားရာတောပိုငျးသို့ အစိုးရတပျပဈခတျ
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျအတှငျး RCSS/SSA လှုပျရှားနထေိုငျရာတောပိုငျးကျသို့ အစိုးရတပျမတျောမှ စဈကွောငျး ၂ ကွောငျးထိုးကာ လကျနကျကွီးလကျနကျငယျမြားဖွငျ့ အငျအားဖွငျ့ ပဈခတျ ခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။
စကျတငျဘာလလ ၃၀ ရကျနေ့ နံနကျပိုငျးက အစိုးရတပျမတျောစဈကွောငျးတဈကွောငျးကကြောကျမဲမွို့ ကြှဲကုနျးမှ နောငျပိနျအှနျ၊ ထိုမှတဆငျ့ နားပိနျး-နားပုံသို့လညျးကောငျး၊ ကနျြစဈကွောငျးတဈကွောငျးကလညျး ကောငျးဟုနျးမှ နားပုံ-နားပိနျးဘကျသို့လညျးကောငျး တကျလာကွပွီး RCSS/SSA လှုပျရှားရာ ကြောကျမဲမွို့ အရှမွေ့ောကျဘကျ ၅ မိုငျ ၆ မိုငျအကှာရှိ တောပိုငျးသို့လကျနကျကွီးငယျပဈခတျခဲ့ကွကွောငျး နောငျပိနျ-ဂုတျတှငျး ဒသေခံမြားကပွောသညျ။ နောငျပိနျ ဒသေခံတဉီးက – “ဒီနမေ့နကျ ၇ နာရီလောကျက အစိုးရစဈကွောငျးတဈကွောငျးကြှဲကုနျးဘကျကတကျလာတယျ။ နောကျ တကွောငျးက ကောငျးဟုနျးဘကျကတကျလာတယျ။ နားပုံရှာကထှကျတာနဲ့ လကျနကျကွီးငယျနဲ့ အရပျမကျြနှာအဘကျ ဘကျကို ပဈခတျတယျ။ RCSS/SSA ဘကျကတော့ ပွနျပဈခတျတာမကွားမိဘူး”- ဟုသြှမျးသံတျောဆငျ့အားပွောသညျ။
၎င်းငျးနှငျ့ပတျသကျပွီး RCSS/SSA ၏စဈမွပွေငျအတှငျး အရာရှိတဉီးက“သူတို့ဘကျကတဘကျတညျးပဈခတျနတော။ သဈပငျ ခွုံပုတျတှထေဲပဈခတျတာ။ ကနြျောတို့တပျစခနျးကို တိုကျရိုကျမပဈခတျလာလို့ ကနြျောတို့လညျးပွနျမပဈခတျခဲ့ပါဘူး”ဟု သြှမျးသံတျောဆငျ့အားပွောသညျ။ နားပုံ နားပိနျးရှာသားတဉီးကလညျး -” ကနြျောတို့ဒသေမှာRCSS/SSA လှုပျရှား လာတာ ဟိုးအရငျကတညျးကဘဲ။ ခုခြိနျထိတော့ ထှကျပွေးရမလားမထှကျပွေးရမလား မသိသေးဘူး။ စောငျ့ကွညျ့နသေေးတယျ အခွအေနေ “- ဟု သြှမျးသံတျောဆငျ့အားပွောပွသညျ။ https://burmes .shannews.org/archives/18720
၆။ ခငျြးပွညျနယျ ဒုတိယအကွိမျမဲစာရငျး ပထမအကွိမျ မဲစာရငျးထကျ ၁သောငျးကြျောလြော့နညျး
၂၀၂၀ ပါတီစုံရှေးကောကျပှဲအတှကျ ခငျြးပွညျနယျအတှငျးမဲစာရငျးကို ခငျြးပွညျနယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျမှ အောကျတိုဘာလ ၁ ရကျနမှေ့စပွီး ဒုတိယအကွိမျ ပွနျလညျကပျထားပွီး မဲထညျ့မညျ့ဦးရေ ၃၃၁၆၉၈ ဦး ရှိပွီး ပထမအကွိမျ မဲစာရငျးထကျ ၁ သောငျးကြျော လြော့နညျးသှားကွောငျး ခငျြးပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ အတှငျးရေးမှူး ဦးလငျးကြျောထံ မှ သိရသညျ။
“ကြှနျတျောတို့ စီစဈပွီးတော့ ပုံစံ(၃)နဲ့လြှောကျတဲ့သူပွနျဖွညျ့ရတဲ့ဟာရှိတယျ၊ပုံစံ(၄)နဲ့ ကနျ့ကှကျတဲ့သူ ပွနျဖွုတျရတဲ့ သူရှိ တယျ၊ ပွီးတော့ တဈအိမျတကျဆငျး ပွနျလုပျကသြေးတယျ၊ ရပျကှကျကျောမရှငျနဲ့ မွို့နယျကျောမရှငျနဲ့ အုပျခြုပျရေးပိုငျးနဲ့ ပေါငျးပွီးတော့ပေါ့၊ လုပျတဲ့အခါမှာ မတှတေ့ော့တဲ့လူတှပေါရှိတယျ၊ ပွနျဖွုတျရတဲ့ဟာတှရှေိတယျ၊ တဈခြို့ကတော့ ရူးသှပျ တဲ့ လူတှပေါနတေော့ ကနျ့ကှကျတဲ့သူတှလေညျး မရှိပဲနဲ့လညျး၊ အဲဒီလူတှကေိုကြှနျတျောတို့ ပွနျဖွုတျရတယျပေါ့၊ door to door လုပျပွီးတော့ စီစဈတဲ့အခါမှာ မလြှောကျပဲနဲ့ ကနျြနသေေးတဲ့ လူတှကေိုလညျးပွနျထညျ့တယျ၊ ပထမအကွိမျ မဲကပျတဲ့ အခါမှာ ပုံစံ(၄)နဲ့ ပွနျဖွုတျတဲ့ဟာတှလေညျးရှိတယျ၊ ပွီးတော့မွပွေငျမှာဖွုတျသငျ့တဲ့လူတှကေို ဥပဒအေရ ပွနျပွီးပယျဖကျြ လိုကျတဲ့ဟာတှရှေိတယျ၊ အဲဒီနှဈခုခွားနားလိုကျတဲ့အခါမှာ လြော့သှားတယျပေါ့” ဟု ခငျြးပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ အဖှဲ့ခှဲ အတှငျးရေးမှူး ဦးလငျးကြျောထံမှ သိရသညျ။
ပထမအကွိမျမဲစာရငျးကပျထားခြိနျတှငျ မဲစာရငျးတှငျ ကြား ၁၅၉၆၂၅ ဉီး မ ၁၇၂၀၇၃ ဦး စုစုပေါငျး ၃၄၂၁၃၇ ဦး ရှိပွီး ၊ ယခု ဒုတိယအကွိမျ ကပျထားခြိနျတှငျ ၃၃၁၆၉၈ ဦး ရှိပွီး မဲစာရငျးတှငျပါရှိသူဦးရေ ၁ သောငျးကြျော လြော့နညျးသှားကွောငျး သိရသညျ။ ခငျြးပွညျနယျ တဈပွညျနယျလုံးတှငျ မဲစာရငျးဒုတိယအကွိမျပွနျလညျ ကပျထားကွညောပွီး ယနေ့ အောကျတိုဘာလ (၁)ရကျနမှေ့ (၁၄)ရကျနထေိ့ ကပျထားကွညောသှားမညျဖွဈပွီး နာမညျစာရငျးမပါပါက ပုံစံ(၃) ဖွငျ့ ပွနျလညျလြှောကျထားလို့ ရကွောငျးလညျးသိရသညျ။ https://www.chinworld.org/2020/10/01/%e1% 80%81%e1 %80%bb%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80
၇။ ကယားဝနျကွီးခြုပျဟောငျးကို စှပျစှဲပွဈတငျမှု အခွခေံဥပဒဆေိုငျရာခုံရုံး ကွားနာမညျ
ကယားပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျဟောငျးအယျလျဖောငျးရှိုကို ပွညျနယျလှတျတျောက စှပျစှဲပွဈတငျခဲ့မှုနဲ့ ပတျသကျပွီး ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒနေဲ့ ညီမညီ နိုငျငံတျောဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒဆေိုငျရာခုံရုံးက လာမယျ့ အောကျတိုဘာ ၆ ရကျမှာ e-Court စနဈနဲ့ ကွားနာသှားဖို့ရှိနပေါတယျ။ တိုငျးဒသေကွီး သို့မဟုတျ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျပျေါ စှပျစှဲပွဈတငျခွငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပ‌ဒေ ပုဒျမ ၂၆၃ ပုဒျမခှဲ(ခ) နဲ့ (ဂ) တို့ကို အနကျအဓိပ်ပါယျဖှငျ့ပေးဖို့ တငျသှငျးထားတဲ့အပျေါ ကွားနာမှာ ဖွဈပါတယျ။ အမှုကွားနာမှာနဲ့ ပတျသကျပွီး လာမယျ့ အောကျတိုဘာ ၆ ရကျ မနကျ ၁၀ နာရီမှာ ယူကြုကနေ တိုကျရိုကျ ထုတျလှငျ့မယျလို့ နိုငျငံတျောဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒဆေိုငျရာခုံရုံးက ကွညောပါတယျ။
ကွားနာမယျ့အထဲမှာ အခကျြ ၃ ခကျြပါရှိပါတယျ။ အဲဒီအခကျြတှကေတော့ ဦးအယျလျဖောငျးရှိုကို နိုငျငံတျောသမ်မတက စကျတငျဘာ ၃ ရကျနရေ့ကျစှဲပါ အမိနျ့အမှတျ ၂၄/၂၀၂၀ နဲ့ ဝနျကွီးခြုပျတာဝနျမှ ရပျစဲပွီးဖွဈတဲ့အတှကျ သူဟာ နိုငျငံတျော ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒဆေိုငျရာ ခုံရုံးသို့တငျသှငျးလှာတငျသှငျးခှငျ့ ရှိသူဟုတျမဟုတျ ကွားနာမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ စှပျစှဲ ပွဈတငျသူ ၅ ဦး ထဲက ဦးသိနျးအောငျ (ခ) ဦးစဲရယျ နုတျထှကျသှားတဲ့အတှကျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ စုစုပေါငျး ဦးရေ အနညျးဆုံး လေးပုံတပုံ ပွညျ့ခွငျးမရှိတော့တဲ့ အခွအေနမှော စှပျစှဲခကျြကို ဆကျလကျစုံစမျးစဈဆေးခွငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒေ ပုဒျမ ၂၆၃ (ခ)ကို အနကျအဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုဖို့ လိုအပျခွငျး ရှိ/မရှိ ကို ကွားနာမှာဖွဈပါတယျ။
ဦးအယျဖောငျးရှိုအပျေါ စှပျစှဲ ပွဈတငျခကျြကို စုံစမျးစဈဆေးနိုငျဖို့ စုံစမျးစဈဆေးရေးအဖှဲ့ကို ဖှဲ့စညျးရာမှာ စှပျစှဲပွဈတငျရာမှာ ပါဝငျတဲ့ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ၃ ဦးကို ထညျ့သှငျးဖှဲ့စညျးထားတာဟာလညျး ပုဒျမ ၂၆၃ (ဂ) အနကျအဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုဖို့ လိုအပျခွငျး ရှိမရှိ ကွားနာသှားမှာဖွဈပါတယျ။ အမှုကွားနာမှုအတှငျး ကယားပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျဟောငျးဘကျက တရား လှတျတျောရှနေ့ေ ဒျေါမငျးမငျးစိုး လိုကျပါဆောငျရှကျမှာဖွဈပမေယျ့ ကယားပွညျနယျလှတျတျောဥက်ကဋ်ဌကတော့ ကွားနာမှု အတှကျ ကိုယျတိုငျပါဝငျဖို့ စာရငျးပေးထားပါတယျ။ လှတျတျောရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကို သမ်မတထံပေးပို့ပွီး သမ်မတကလညျး ဝနျကွီးခြုပျ ဦးအယျလျဖောငျးရှိုကို တာဝနျကနေ ရပျစဲခဲ့ပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/413897
နိုငျငံပိုငျ မီဒီယာမြားဖွဈသညျ့ ရဒေီယို၊ မွနျမာ့အသံနှငျ့ရုပျမွငျသံကွား (MRTV)တို့က ထုတျလှငျ့ပေးမညျ့ ရှေးကောကျပှဲ မဲဆှယျစညျးရုံး ဟောပွောခကျြ မိနျ့ခှနျးစာသား လေးပုံတဈပုံကို ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ – UEC က ဖွတျတောကျလိုကျခွငျးနှငျ့ပတျသကျ၍ ထားဝယျတိုငျးရငျးသားမြားပါတီ (ဗဟို)က ကွညောခကျြတဈစောငျ ထုတျပွနျခဲ့သညျ။
“ထားဝယျတိုငျးရငျးသားမြားပါတီရဲ့ ဟောပွောခကျြတှထေဲမှာ အရေးကွီးတဲ့ အခကျြတှကေို ဆငျဆာဖွတျတောကျခံရပါ တယျ။ မိနျ့ခှနျးပါ အပိုဒျ ၃၂ ပိုဒျအနကျ အရေးကွီးတဲ့ ရှဈပိုဒျကို ဆငျဆာဖွတျတောကျခံရပါတယျ။ မိနျ့ခှနျးအားလုံးရဲ့ လေးပုံ တဈပုံကို ဖွတျတောကျလိုကျတဲ့ သဘော ဖွဈနပေါတယျ”ဟု ယငျး ပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးအေးမငျးက ပွောသညျ။ ယငျးသို့ ဖွတျ တောကျခွငျးမှာ ဒသေခံမဲဆန်ဒရှငျပွညျသူမြား အမှနျတကယျ ကွုံတှခေံ့စားနရေသော အရေးကိစ်စမြားကို ထုတျဖျောပွောဆို ခှငျ့အား ပိတျပငျရာရောကျကွောငျး ပါတီက သုံးသပျပွောဆိုသညျ။ ဒီမိုကရစေီ စံခြိနျစံညှနျးနှငျ့ ညီညှတျသော လုပျရပျမဟုတျ ကွောငျးလညျး အဆိုပါ ထုတျပွနျခကျြတှငျ ဖျောပွသညျ။ ထို့ပွငျ ပါတီ၏ လှတျလပျစှာ ထုတျဖျောပွောဆိုခှငျ့၊ မဲဆန်ဒရှငျ ပွညျသူမြားနှငျ့ အမြားပွညျသူတို့ လှတျလပျစှာ အစီရငျခံပိုငျခှငျ့ကို ပိတျပငျရာရောကျကွောငျး ပါတီဘကျက ယူဆသညျ။
ဖွတျတောကျခံရသညျ့ အခကျြမြားမှာ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲအကွို မဲဆှယျကာလက ခှငျ့ပွုခကျြရခဲ့ဖူးသညျ့ အခကျြမြား ဖွဈကွောငျး၊ ပါတီအနဖွေငျ့ အဓိက ဦးစားပေး လုပျဆောငျမညျ့ အခကျြမြားလညျး ဖွဈနကွေောငျး ပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးအေးမငျး က ဟင်ျသာမီဒီယာကို ပွောသညျ။“ဒီ အဓိကအခကျြတှကေိုပဲ သူ(ရှေး/ကျော) က ဖွတျလိုကျတဲ့အခါကတြော့ ၂၀၁၅ တုနျး က ခှငျ့ပွုပေးထားခဲ့တာကို ဘာကွောငျ့ခုမှ ဆငျဆာလုပျတာလဲ၊ ဆိုတော့ အံ့လညျး အံ့ဩတယျ။ တရားမြှတပွီး လှတျလပျတဲ့ ရှေးကောကျပှဲကို ကငျြးပပေးမယျလို့ ကျောမရှငျက ပွောနတေယျ။ မေးခှနျးတှေ ထုတျစရာ အမြားကွီး ရှိတာပေါ့နျော”ဟု ပါတီ ဥက်ကဋ်ဌက ဆိုသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-75822
၉။ မူးယဈဆေးဝါးအန်တရယျကာကှယျတားဆီးရေး လှတျတျောအသီးသီးသို့တငျပွသှားရနျ မှနျညီညှတျရေးပါတီက မူဝါဒခမြှတျထား
ပွညျထောငျစုအစိုးရနှငျ့ သကျဆိုငျရာတိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျအစိုးရမြားအနဖွေငျ့ မူးယဈဆေးဝါးအန်တရယျ ကာကှယျတား ဆီးမှုမွှငျ့တငျစရေေး အလေးပေးဆောငျရှကျလာစရေနျ မှနျညီညှတျရေးပါတီ MUP ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား လှတျတျော အသီးသီးသို့ ရောကျရှိပါက တငျပွတောငျးဆိုသှားရနျ မူဝါဒခမြှတျထားကွောငျး မှနျညီညှတျရေးပါတီမှ သိရသညျ။
မှနျပွညျနယျတလှား၌ လူငယျအမြားအပွား မူးယဈဆေးစှဲသူမြားပွားလာသညျ့အတှကျ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲ ရှေးကောကျခံ လှတျတျောကိုယျစားလှယျအားလုံး အထူးအာရုံစိုကျ၍ တိုကျဖကျြသှားရနျ အရေးကွီးကွောငျး မှနျညီညှတျရေးပါတီ MUP တှဲဖကျအတှငျးရေးမှူး (၁) နိုငျလယိတမက ပွောသညျ။“မူးယဈဆေးဝါးစှဲသူတှကေို ဖမျးဆီးမိခဲ့ရငျ ပွဈဒဏျတဈခုလို ခမြှတျတော့မှာမဟုတျဘဲ စိတျပိုငျးနဲ့ အကငျြ့စာရိတ်တ စရိုကျပိုငျး ဆိုငျရာတှကေို ပွုပွငျနိုငျဖို့အတှကျ ပွနျလညျတညျထောငျ ရေးစခနျတှေ ထူထောငျနိုငျဖို့ ကနြျောတို့ကွိုးစားတိုကျတှနျး သှားမယျ”ဟု ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။ “မှနျညီညှတျရေးပါတီ ခမြှတျ ထားတဲ့ မူးယဈဆေးဝါးဆိုငျရာ မူဝါဒထဲမှာ အခနျး (၂) ခနျး ပါဝငျတဲ့အတှကျ လူငယျ တဈယောကျအနနေဲ့ ဝမျးသာမိပါတယျ။ ဒီပွဿနာတှကေ အရေးကွီးတဲ့ကိစ်စဖွဈလို့ ကနျြးမာရေးအပိုငျးကိုပဲ ထညျ့ထားတယျလို့ မွငျတယျ။ နောကျပွီးတော့ လူငယျ ကဏ်ဍကိုလညျး ထညျ့ထားတာတှလေို့ အရမျးကိုဝမျးသာမိပါတယျလိျု့”တိုးတကျသော မှနျလူငယျမြားအစညျးအရုံးမှ တှဲဖကျ အတှငျးရေးမှူး နိုငျဟံပရိုကျက ဆိုသညျ။
အစိုးရ၏ မူးယဈဆေးဝါးတားဆီးမညျ့မူဝါဒမြားတှငျပါရှိသညျ့ ကုသခွငျး၊ ဖမျးဆီးခွငျး၊ လူ့အငျအား ထောကျပံ့ပေးခွငျး၊ ဘဏ်ဍာရေး၊ ဆေးရုံနှငျ့ ပွနျလညျတညျထောငျရေးစခနျး၊ ပစ်စညျးကိရိယာမြား ပံ့ပိုးပေးခွငျး အစစအရာရာတှငျ အားနညျး နသေေးသညျဟု ၎င်းငျးကဆိုသညျ။ ထို့အတူ မူးယဈဆေးစှဲကုသရေးနှငျ့ ပွနျလညျထူထောငျရေးစခနျးအတှကျ ပညာပေးကဏ်ဍ မြားတှငျ တိုးတကျသော မှနျလူငယျအဖှဲ့အစညျး (MYPO)၊ မှနျလူငယျပညာပေးရေးအဖှဲ့ (MYEO)၊ မှနျပွညျလူ့အခှငျ့အရေး ဖောငျဒေးရှငျး HURFOM စသညျ့ မူးယဈဆေးဝါးတိုကျဖကျြရေးလုပျငနျးမြားနှငျ့ မူးယဈဆေးဝါး ပညာပေးလုပျငနျး ဆောငျရှကျနသေော မှနျလူမှုအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးအကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျလြှကျရှိကွောငျး တှရှေိ့ရသညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/09/30 /%e1%80%99%e1 %80%b0%e1%80%9a %e1%80%85%e1%
လကျရှိ NLD အစိုးရသညျ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲမဲဆှယျရာစဉျက မွဈဆုံစီမံကိနျးနှငျ့ပတျသကျပွီး ကတိကဝတျမြားပေးခဲ့ သျောလညျး အစိုးရသကျတမျး ၅ နှဈကုနျဆုံးတော့မညျ့ ကာလအတှငျးအထိ တဈစုံတရာ ပွောဆိုမှုမရှိခဲ့သညျ့အတှကျ နောကျတကျလာမညျ့အစိုးရကိုလညျး အယုံအကွညျမရှိကွောငျး မွဈဆုံဒသေခံတဈဦး ဖွဈသညျ့ ဒျေါလုရာက ယခုလို ပွော ဆိုသညျ။“အမစေုကိုယျတိုငျလညျး တဈဦးတဈယောကျအတှကျပွောတာလား။ ပါတီကိုဦးတညျပွီး ပွောခဲ့တာလား အခုခြိနျ ထိ မသဲကှဲသေးဘူး။ ကမြတို့အနနေဲ့ အခုတကျလာမယျ့ အစိုးရကိုလညျး သိပျယုံလို့မရဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အခု အစိုးရတောငျ ကတိကဝတျတှေ အမြားကွီးပေးပွီး မဲဆှယျခဲ့တယျ။ မဲဆှယျတဲ့ ပါတီတိုငျးက မွဈဆုံအရေးကို မားမား မတျမတျရပျပေးတဲ့သူ ထာဝရရပျတနျ့အောငျ ပွောပေးနိုငျတဲ့သူ ပွောခဲ့ပွီး မဲထညျ့ခဲ့ကွတာဘဲ။ နောကျဆုံးအစိုးရ ဖွဈသှားတဲ့ အခါတော့ ပါတီမှာပွောတဲ့ဟာနဲ့ တဈမြိုးပွနျဖွဈသှားတာပေါ့။ ဒါကွောငျ့ ဒသေခံတှေ မဲထညျ့ဖို့ တအားစိုးရိမျ တယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျပါတီရဲ့အစိုးရဘဲတကျတကျ မွဈဆုံစီမံကိနျး ရပျတနျ့ဖို့က ထာဝရကွိုးစားသှားမယျ”ဟု ပွောဆိုသညျ။
“ကိုယျ့ရဲ့ဒသေမှာ အခုလို ပွနျပွီး နရောရှငျးလငျးရေးတှငျ ပွနျလုပျရတော့ အရငျနခေဲ့တဲ့အခြိနျတှကေို ပွနျသတိရ တယျ။ တဖကျမှာက စိုးရိမျစိတျတှအေနညျးငယျတော့ရှိနတေယျ။ အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ သကျဆိုငျရာ အာဏာပိုငျ အစိုးရတှကေ နညျးမြိုးစုံနဲ့ ပွနျသိမျးလာမလားဆိုပွီး စိုးရိမျရတယျ။ တနျဖရဲကြေးရှာက မွဈဆုံးအနီးတဝိုကျနတေဲ့ ပွညျသူတှအေတှကျက အငျမတနျမှ အဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ နရောဒသေတဈခုဖွဈတယျ။ အရငျကတညျးကနေ ယခုအခြိနျထိ ဒီနရောမှာဘဲ စားဝတျ နရေေးအတှကျ အကြိုးပွုတဲ့ဒသေဖွဈတယျ။ ပွီးရငျ ဒီနရောက အားလုံးရဲ့အသကျသှေးကွော ဖွဈနတေယျ။ မွဈဆုံနဲ့ တနျဖရဲကြေးရှာကို ခှဲခွားထားလို့မရဘူး။ သူက တဈခုတညျးဖွဈသလို တဈနရောမှာဘဲ။ ဒသေခံတှရေဲ့ အဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ အမှအေနှဈတှလေညျး အားလုံးဒီနရောမှာဘဲရှိတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီနရောက လုံးဝ ပြောကျကှယျသှားလို့မရတဲ့နရော ဖွဈ တယျ။ စီမံကိနျးရပျတနျ့ဖို့လညျး အမွဲဆောငျရှကျနတေယျ” ဟု ဒသေခံတဈဦးက ပွောဆိုသညျ။
မွဈဆုံစီမံကိနျးကွောငျ့ ရှပွေ့ောငျးခံခဲ့ရသညျ့ ကြေးရှာ ၅ ခုခနျ့ရှိပွီး ၎င်းငျးကြေးရှာမြားမှာ တနျဖရဲ၊ အောငျဂြာယာနျ၊ ဒေါငျပနျ၊ လဖြဲ့ကထောငျနှငျ့ မလိဇှပျ စသော ကြေးရှာမြားဖွဈပွီး ၎င်းငျးတို့ကို အောငျမွငျသာကြေးရှာနှငျ့ မလိယနျကြေးရှာသဈတို့တှငျ နရောခခြဲ့သညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/01/%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%85%e
ခငျြးလူထုမြား၏နဈနာမှုမြားနှငျ့ နိုငျငံရေးရပိုငျခှငျ့မြားပွနျလညျရယူဖျောဆောငျနိုငျရနျအတှကျ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ခငျြး အမြိူးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြူပျ (CNLD) ပါတီကို မဲပေးထောကျခံကွရနျ ခငျြးလူငယျမြားကှနျယကျအဖှဲ့က စကျတငျဘာလ ၂၈ ရကျနကေ့ ကွညောခကျြတဈစောငျထုတျပွနျကာ တောငျးဆိုလိုကျသညျ။ ခငျြးလူငယျမြားကှနျယကျအဖှဲ့မှ ဗဟိုကျော မတီဝငျ Salai Mon Bio က မိမိတို့လိုခငျြသညျ့ ကိုယျပိုငျပွဌာနျးခှငျ့ ခငျြးကံကွမ်မာ ခငျြးတှကေဖနျတီးခှငျ့ကို CNLD ပါတီက သာ ကိုယျစားပွုဖျောဆောငျပေးနိုငျမညျဟု ယုံကွညျသညျ့အတှကျ ယခုကဲ့သို့ တောငျးဆို ရခွငျးဖွဈသညျဟု ခိုနူမျးသုနျ ကိုပွောသညျ။
“ကနြျောတို့ နိုငျငံရေးအပွောငျးအလဲကာလမှာ အဓိက ကနြျောတို့ ခငျြးတှအေဓိကလိုခငျြတဲ့ နိုငျငံရေးအကွှေးက အခုထိ ကို အကောငျအထညျမဖျောဆောငျနိုငျသေးဘူး။ ကနြျောတို့လိုခငျြတာက ပငျလုံစာခြုပျမှာပါတဲ့ ကတိကဝတျတှကေို အကောငျအထညျဖျောဖို့နဲ့ ခငျြးအပါအဝငျ တိုငျးရငျးသားမြားလိုလားတဲ့ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုကိုမတညျဆောကျနိုငျဘူး။ အဲဒါကိုတညျဆောကျဖို့ရနျက ကနြျောတို့ပွညျမအခွပွေု ဗမာပါတီကွီး နှဈခုဖွဈတဲ့ USDP နဲ့ NLD ကို မဲပေးလာခဲ့တယျ၊ သူတို့သကျတမျးတဈကွိမျစီယူခဲ့ပွီပွီ ကနြျောတို့လိုခငျြတာ သူတို့အကောငျအထညျမဖျောနိုငျဘူးဆိုတာ ကနြျောတို့ မွငျခဲ့ပွီး ပွီ။ အဲဒါကွောငျ့ ကနြျောတို့ရဲ့ စဈမှနျသောအခှငျ့အရေး စဈမှနျသောနိုငျငံရေးကို ကနြျောတို့ခငျြးပါတီ လကျရှိသုံးပါတီပေါငျး လိုကျတဲ့ CNLD ကသာလုပျပေးနိုငျမယျ ယုံကွညျခကျြနဲ့ ပွညျသူတှကေို CNLD ကိုမဲပေးဖို့ တိုကျတှနျးရခွငျးဖွဈတယျ။ CNLD ကို ကနြျောတို့ မဲပေးရခွငျးဟာ ခငျြးတှကေိုကိုယျစားပွုနိုငျတယျ။ နောကျတဈခု ကနြျောတို့လိုခငျြတဲ့ ကိုယျပိုငျပွဌာနျးခှငျ့ ခငျြးကံကွမ်မာကို ခငျြးတှကေ ဖနျတီးခှငျ့ကို CNLD ကသာ ကိုယျစားပွုဖျောဆောငျပေးနိုငျမယျလို့ယုံကွညျတယျ အဲဒါကွောငျ့ တောငျးဆိုရ ခွငျးဖွဈတယျ” ဟု Salai Mon Boi ကပွောသညျ။
ခငျြးတိုငျးရငျးသားမြားအနဖွေငျ့ နိုငျငံရေးအပွောငျးအလဲအတှကျ ပွညျမပါတီကွီးမြားကို မဲပေးထောကျခံခဲ့ကွသျောလညျး လူမြိုးတမြိုး ဘာသာတခုကိုသာ အခှငျ့ထူးပေးထားသော မြိုးစောငျ့ဥပဒမြေားပွဌာနျးခွငျး၊ ခငျြးလူမြိုးမြားနှငျ့ အခွား တိုငျးရငျး သားမြား၏ ရိုးရာဓလမွေ့ယောပိုငျဆိုငျမူမြားအား ဆနျ့ကငျြသညျ့ မွယောဥပဒမြေားကို တိုငျးရငျးသားမြားကနျ့ကှကျသညျ့ ကွားမှ ပွဌာနျးခွငျး၊ ခငျြးလူမြိုးမြားနှငျ့ အခွားတိုငျးရငျးသားတို့၏ သဘောထားမြား ဆနျ့ကငျြကနျ့ကှကျသညျ့ကွားမှ ဗိုလျခြုပျ အောငျဆနျးကွေးရုပျထုမြားကို အတငျးအဓမ်မ စိုကျထူရနျ ကွိုးပမျးလုပျဆောငျခွငျး၊ စဈဘေးရှောငျ ပွညျသူမြားအတှကျ လုံလောကျသော အထောကျအပံ့မြား မရှိနခွေငျးမြားအပွငျ လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျခံနရေခွငျးတို့ကို ကွုံတှေ့ နရေဆဲဖွဈ သညျ ခငျြးလူငယျမြားကှနျယကျ၏ ထုတျပွနျခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ။ ခငျြးလူငယျမြားကှနျယကျသညျ ၂၀၁၂ ခုနှဈမှ စတငျပွီး ခငျြးအမြိူးသားရေး၊ ခငျြးလူမြိူးမြား၏ ရပိုငျခှငျ့မြား၊ ခငျြးလူငယျမြားအခှငျ့အရေးတို့ကို အခွခေံလှုပျရှားဆောငျရှကျ နသေညျ့အဖှဲ့ဖွဈသညျ။ https://ww w.bnionline.net/mm/news-75873
နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပမညျ့ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲအတှကျ ဧရာဝတီတိုငျး ဒသေကွီးအတှငျး ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျကွမညျ့ ကရငျပါတီမြား၏ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးလုပျငနျးမြားတှငျ ဧရာဝတီကရငျလူငယျယာယီ ကျောမတီမှ လူငယျ မြားပါဝငျကာ ကူညီဆောငျရှကျမှုမြားပွု လုပျနပွေီဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ကရငျပါတီမြားအား ကူညီပေးမညျ့အရေးကိစ်စမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈမြားအတှငျး ကငျြးပခဲ့ ကွသညျ့ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး ကရငျလူငယျနှီး နှောဖလှယျပှဲမြားမှ ရရှိလာသညျ့ သဘောထားဆုံးဖွတျခကျြ မြားအတိုငျး ဧရာဝတီ ကရငျလူငယျယာယီကျောမတီမှ ဆကျလကျအကောငျအထညျ ဖျောလုပျဆောငျနခွေငျး ဖွဈသညျဟု ယငျးယာယီ ကျောမတီ မှ အဖှဲ့ဝငျတဈဦးဖွဈသူ စထှဋျဝအေောငျက ပွောသညျ။“ဒီ ၂၀၂၀ အတှငျးနဲ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအလှနျမှာ ကရငျပါတီ တှနေဲ့အတူ ဧရာဝတီတိုငျးမှာရှိတဲ့ ကရငျလူငယျတှအေနနေဲ့ ကရငျ့အရေးအရာနဲ့ကရငျအမြိုးသားရေး၊ နိုငျငံရေးကို ပိုမိုမွှငျ့ တကျလာ အောငျကူညီ မယျဆိုတဲ့ သဘောထားဆုံးဖွတျခကျြခထြားတဲ့အတိုငျး ဒီအနအေထားကို ကူညီပေးတာဖွဈပါ တယျ”ဟု ပွောသညျ။
“ ခရိုငျအလိုကျကူညီဖို့ဖှဲ့ထားလူငယျတှအေနနေဲ့ သူတို့နဲ့သကျဆိုငျတဲ့ခရိုငျမှာရှိတဲ့ ကရငျပါတီကိုပဲ ကူညီဖွဈ တဲ့ ပုံစံဖွဈ တော့ တဖကျကကနျြတဲ့ကရငျပါတီကိုကူညီရာမှာ အားနညျးတဲ့ပုံစံလေးတော့ဖွဈသှားတယျ။ ကရငျ လူငယျတှအေနနေဲ့ နှဈဖကျမြှပွီးကူညီကွဖို့ပေါ့။ နောကျပွီး ကိုဗဈကာလဖွဈတဲ့အတှကျ အောငျမွငျသငျ့သ လောကျမအောငျမွငျဘူးပေါ့။ အဓိက ကတော့ ကိုဗဈကွောငျ့လူငယျတှေ စုစညျးလို့ မရတဲ့အခကျအခဲလညျး ပါတယျ”ဟု မွောငျးမွကရငျလူငယျတဈဦးက ပွော ဆိုသညျ။ လာမညျ့ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနေ့ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ကရငျပါတီမြားဖွဈသညျ့ ကရငျပွညျသူ့ပါတီ -KPP နှငျ့ ကရငျအမြိုးသားပါတီ -KNP တို့မှ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားဝငျ ရောကျယှဉျပွိုငျကွမညျဖွဈပွီး ဧရာဝ တီတိုငျးဒသေကွီး အတှငျး KPP မှ ၃၁ ဦးနှငျ့ KNP မှ ၈ ဦးတို့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကွမညျဖွဈသညျဟု ကရငျပါ တီမြား၏ ထုတျပွနျထားမှုမြား အရ သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%a7%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%81%80%e1% 80%90%e1%
သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး နမ်မတူမွို့နယျ အတှငျး ယနေ့(အောကျတိုဘာ ၁)ရကျတှငျ ဆယျကြျောသကျ အမြိုးသမီးတဦး မီးရှို့ ခံရသညျ့ အလောငျး တှရှေိ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
အဆိုပါ မီးရှို့ခံရသညျ့ အမြိုးသမီး ရုပျအလောငျးကို နမ်မတူ-လားရှိုးသှားရာလမျး၊ နမ်မတူမွို့မှ (၇)မိုငျခနျ့ကှာဝေးသညျ့ ပနျးသပွေ ကြေးရှာ အနီးတှငျ တှရှေိ့ကွောငျး ရုပျအလောငျးကို သှားရောကျ သယျသညျ့ လူမှု အဖှဲ့အစညျးမှ ကိုခဈြမှေးက သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။ “ကနြျောတို့ လူမှုကူညီရေးအသငျးကို ရဲတပျဖှဲ့က နလေ့ညျ ၁ နာရီ ခှဲမှာ ဖုနျးဆကျလာ လို့ ကနြျောတို့သှားသယျတာ။ အမြိုးသမီးအလောငျးပါ။ အသကျ က ၁၅၊၁၆ နှဈပဲ ရှိမယျ”ဟု ကိုခဈြမှေး ကပွောသညျ။ လကျရှိ အခြိနျထိ မီးရှို့ခံရသညျ့ အမြိုးသမီး၏ ဆှေးမြိုးမြားကို မသိရှိသေးကွောငျး၊ အမြိုးသမီး၏ ရုပျအလောငျးကို နမ်မတူ ပွညျသူ့ဆေးရုံ ရငျခှဲရုံတှငျ ပို့ဆောငျထားကွောငျး ကိုခဈြမှေးက ဆိုသညျ။
မီးရှို့သတျခံရသညျ့ အမြိုးသမီး၏ ရုပျအလောငျးကို မွနျမာနိုငျငံလူမှုကယျဆယျရေး အဖှဲ့(နမ်မတူ) နှငျ့ မတ်ေတာရှငျ နာရေး လူမှုကူညီရေးအသငျးမှ သှားရောကျသယျဆောငျကာ နမ်မတူ ဆေးရုံ ရငျခှဲရုံသို့ဆေးစဈခကျြရယူရနျ သယျဆောငျသှား ကွောငျး သိရသညျ။ အမြိုးသမီး တဦးကို သတျပွီး မီးရှို့သှားမညျ့ တရားခံကို သကျဆိုငျရာမှစဈဆေးနကွေောငျးသိရသညျ။ https://burmese.shan news.org/archives/18737
မိုးညှငျးခရိုငျတှငျ ပထမအကွိမျ မဲစာရငျးကွညောပွီးနောကျ ရကျ (၉၀) နထေိုငျကွောငျး ပုံစံ (၃-က) ဖွငျ့အသဈ လာရောကျလြောကျထားသညျ့ တပျမတျောသား၊ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ စုစုပေါငျး ၁၃၀၀ ဦးခနျ့ရှိပွီဖွဈကွောငျး ခရိုငျရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျရုံးမှ သိရသညျ။ မိုးညှငျးခရိုငျတဈခုလုံးတှငျ ပုံစံ (၃-က)ဖွငျ့ လာရောကျလြောကျထားသူဦးရေ ၁၆၀၀၀ ကြျော အနကျ တပျမတျောသား၊ ရဲတပျဖှဲ့ အငျအား ၁၃၀၀ ဦး ရှိကွောငျး ဆိုသညျ။
“လကျရှိ ၂၅ ရကျနထေိ့ စာရငျးခြုပျထားတာကတြော့ တပျနဲ့ရဲ ရကျပေါငျး ၉၀ကြျော မဲဆန်ဒနယျပွငျပရောကျ လြှောကျ ထားတဲ့စာရငျးက တပျမတျောသားဆိုရငျ ၉၀၀ နီးပါးလောကျရှိတယျ။ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျကလညျး ၄၀၀ နီးပါးလောကျ တောငျးထား ကွပွီ။ လကျရှိခြိနျထိတော့ စာရငျးက မပိတျသေးတဲ့ခြိနျကတြော့ အတိအကတြော့ ပွောလို့မရသေးပါဘူး။ လောလောဆယျ တော့ ၁၃၀၀လောကျရှိနပွေီ။” ဟု မိုးညှငျးရိုငျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျမှ အရာရှိဦးမြိုးမငျးအောငျကပွောသညျ။ မိုးညှငျးခရိုငျ တဈခုလုံးရှိ တပျမဲဆန်ဒရှငျမြားစာရငျးကို သီးသနျ့ကောကျထားခွငျးမရှိသညျ့အတှကျ လကျရှိ ခရိုငျတှငျ တပျမဲဆန်ဒရှငျ မညျမြှ ရှိပွီကို မသိနိုငျကွောငျး နှငျ့ ပုံစံ (၃-က) လာရောကျလြောကျထားသညျ့ စာရငျးကိုသာ သိနိုငျကွောငျး ဆိုသညျ။ လကျရှိ အထိလညျး ပုံစံ (၃-က) လြောကျနဆေဲကာလဖွဈသောကွောငျ့ နောကျဆုံးစာရငျးကိုမူ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ပွနျလညျထုတျပွနျသညျ့အခြိနျမှ သိရမညျဖွဈသညျ။
“တပျမဲစာရငျးက ကနြျောတို့ဆီမှာ သပျသပျခှဲထားတာမရှိဘူးခငျဗြ။ ဘာလို့မရှိလဲဆိုရငျ မဲရုံအလိုကျမှာ တပျကို မဲစာရငျးသီးသနျ့မသှားဘဲနဲ့ သကျဆိုငျရာတပျတှကေလညျး ရပျကှကျ၊ ကြေးရှာအုပျစုမှာပါတယျလေ။ အဲရပျကှကျ ကြေးရှာမဲစာရငျးမှာဘဲ တဈခါတညျးပေါငျးထညျ့တယျ။ သီးသနျ့စာရငျးလုပျမထားပါဘူးခငျဗြ။ မဲစာရငျးကွညောတဲ့ခြိနျလညျး ကြေးရှာမဲစာရငျးမှာဘဲ တဈခါတညျးကွညောပေးတယျ။ နာမညျတှကေလညျး ဗိုလျမှူး၊ဗိုလျကွီးတှမေခှဲထားဘူး အားလုံးက ဦးဘယျသူ ဒျေါဘယျသူဆိုပွီးတော့ဘဲ အကုနျပေါငျးပေးထားတယျ။”ဟု မိုးညှငျး ခရိုငျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ အရာရှိ ဦးမြိုးမငျးဦးက ပွောသညျ။ လာမညျ့ ၂၀၂၀ တှငျလညျး တပျမဲ သီးသနျ့ကောကျထားခွငျးမရှိသညျ့အပွငျ တပျမဲရုံလညျး သီးသနျ့ထားရှိခဲ့ခွငျးမရှိသညျ့အတှကျ အရပျသားမြားနှငျ့အတူသာ မဲပေးရနျစီစဉျထားပွီး မိုးညှငျးခရိုငျတှငျ အဆို တပျသားမြား မဲပေးရမညျ့ မဲရုံ ၁၂ ရုံရှိသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/01/%e1%80%99%e1% 80%ad%e1%8 0%af%e1%80%b8%e1
သထုံမွို့နယျအတှငျး ပအိုဝျးအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ (PNO) ပါတီနှငျ့ ကရငျပွညျသူ့ပါတီ (KPP) တို့ ပူးပေါငျးကာ စကျတငျဘာ ၃၀ ရကျက ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျရေး ဆိုငျးဘုတျစိုကျထူခွငျးမြား ပွုလုပျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ စကျတငျဘာ ၃၀ ရကျတှငျ ရှေးကောကျပှဲ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျ အရှေးခံကွမညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား၏ အောငျနိုငျရေး ဆိုငျးဘုတျစိုကျထူခွငျး ဆောငျရှကျရနျ သကျဆိုငျရာ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲထံ တငျပွထားသညျ့အတှကျ သထုံမွို့ နှငျ့ သုဝဏ်ဏဝတီမွို့မြား တှငျ ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျရေး ဆိုငျးဘုတျမြား စိုကျထူခဲ့ကွောငျး ပအိုဝျးအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ (PNO) ပါတီ (မှနျပွညျနယျ) အတှငျးရေးမှူး ခှနျတဇေက ပွောကွားသညျ။
၎င်းငျးက ဆကျလကျပွီး “ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျရေး ဆိုငျးဘုတျမှာ ကြှနျတျောတို့ မဟာမိတျပါတီနှဈခုဖွဈတဲ့ ပအိုဝျးအမြိုး သားအဖှဲ့ခြုပျ (PNO) ပါတီနဲ့ ကရငျပွညျသူ့ပါတီက ကိုယျစားလှယျလောငျးတှဖွေဈတဲ့ ပွညျသူ့လှတျတျော၊ သထုံမွို့နယျ ပွညျနယျလှတျတျော (၁) နဲ့(၂) ၊ နောကျ ကရငျတိုငျးရငျးသားရေးရာ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျးအားလုံး ကိုယျစား လှယျလောငျး လေးဦး ပါဝငျတဲ့ အောငျနိုငျရေး ဆိုငျးဘုတျကို တငျခဲ့ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအပွငျကို ပနျးဖလကျတှမှောလညျး ဒီကိုယျစားလှယျလောငျး လေးဦးရဲ့ ကိုယျရေးအခကျြအလကျတှကေို အတူတူရိုကျနှိပျ ဖျောပွပေးထားပါတယျ။ အဲဒီ ပနျးဖလကျတှကေိုပဲ မဲဆန်ဒရှငျ ပွညျသူတှဆေီကို ဖွနျ့ဝပေေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ”ဟု ပွောကွားသညျ။ တိုငျးရငျးသားမြား အားလုံး စညျးစညျးလုံးလုံးဖွငျ့ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျကွမညျဆိုပါက နိုငျငံရေးအရှတေ့ဈခုကို ရောကျရှိနိုငျမညျဟု ယုံကွညျ ကွောငျး၊ ထို့ပွငျ မှနျပွညျနယျအတှငျးရှိ ပအိုဝျးတိုငျးရငျးသားပါတီ၊ ကရငျတိုငျးရငျးသားပါတီနှငျ့ မှနျတိုငျးရငျးသားပါတီတို့ ဆကျလကျတှဲ ဆောငျရှကျပါက အောငျမွငျမှု ရရှိနိုငျမညျဟု ယုံကွညျကွောငျး ခှနျတဇေက ဆကျလကျ ပွောကွားသညျ။
ပအိုဝျးအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ (PNO) ပါတီ (မှနျပွညျနယျ) အနဖွေငျ့ ပအိုဝျးတိုငျးရငျးသားလူမြိုးရေးရာ ကိုယျစားလှယျလောငျး နရော၊ သထုံမွို့နယျတှငျ မဲဆန်ဒနယျ နှဈနရော ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျ အရှေးခယျြခံသှားမညျ ဖွဈကွောငျးနှငျ့ မှနျညီညှတျရေး ပါတီ (MUP) အနဖွေငျ့ မှနျပွညျနယျအပွငျ ကရငျပွညျနယျ၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး နှငျ့ တနင်ျသာရီ ဒသေကွီးတို့တှငျ မဲဆန်ဒနယျ ၆၇ နရော ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျအရှေးခယျြခံသှားမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/194517
ဖလမျးမွို့အနီးရှိ ဆူရျဘုနျလယောဉျကှငျးကို ယခုလအောကျတိုဘာလအထဲတှငျ ဖှငျ့ပှဲ ကငျြးပမညျဟု ခငျြးပွညျနယျ၏ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိ စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျကပွောပါသညျ။ စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျက “ဆူရျဘုနျလယောဉျကှငျးကို အောကျတိုဘာလထဲမှာ ဖှငျ့ပှဲကငျြးပသှားမယျ ရကျအတိအကတြော့ မသိရသေးဘူး လူကွီးတှအေားတဲ့အခြိနျ အောကျတိုဘာလ ထဲမှာ လုပျသှားဖို့ လြာထားတာတော့ ရှိတယျ ၊လြာထားတာတော့ အောကျတိုဘာလ (၁) ရကျနမှေ့ာ ဆငျးပွီးတော့ စမျးသပျဖို့ စီစဉျထားပမေဲ့ ရာသီဥတု အခွနေတှေကွေောငျ့ ဖွဈတယျ”ဟုပွောသညျ။
ယခုအခြိနျတှငျလကျရှိလယောဉျကှငျးမှာ ၉၈ ရာခိုငျနှုနျးပွီးစီးနပွေီဖွဈပွီး မကွာမီ လယောဉျပွေးဆငျးနိုငျတော့မညျဖွဈ ကွောငျးသိရသညျ။ စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျက “လယောဉျကှငျးက ၉၈ ရာခိုငျနှုနျးပွီးနေ ကနျြနတေယျ တောငျ နှဈဖကျလုံးကို နညျးနညျးဖွိုဖို့ ကနျြနတေယျ ၊တျောတျောလေးတော့ ပွီးနပွေီ ဆငျးဖို့ဘဲ ကနျြတော့တယျ။ လယောဉျကှငျး ရှိတဲ့နရောကလညျး သီးခွားနရောမြိုးဖွဈနတေော့ အခုလိုကာလမှာ လုပျငနျးဆောငျရှကျမှုတှကေို မရပျနားဘဲ လုပျနကွေ တယျ ကနျြးမာရေးက ထုတျပွနျတဲ့အတိုငျး ခွောကျပအေကှာအဝေး နကွေပွီး လုပျငနျးဆကျလကျလုပျဆောငျနကွေတယျ”ဟုပွောသညျ။
ဖလမျး-ဆူရျဘုနျလယောဉျကှငျးကို ရံပုံငှေ ကပျြ ဘီလီယံ ၁၄၀ အကုနျကခြံ တညျဆောကျထားပွီး လယောဉျပွေးလမျး အလြားပေ ၆ဝဝဝနှငျ့ အကယျြပေ ၁၀၀ ရှိပွီး ခရီးသညျ ရဝကြျော လိုကျပါနိုငျသညျ့ (ATR-72) လယောဉျမြား အဆငျးအတကျ ပွုလုပျ ရပျနားနိုငျမညျဖွဈကွောငျးလညျး သိရသညျ။ https://www.chinworld.org/2020/10/01/%e1 %80%96%e1%80%9c%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80
ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျး၊ မောငျတောမွို့နယျရှိ အငျးဒငျနဲ့ ဂူတာပွငျကြေးရှာက မှတျစလငျတှကေို ဖမျးဆီးသတျဖွတျခဲ့ တာကွောငျ့ ထောငျခခြံခဲ့ရတဲ့ တရားခံတပျမတျောသားတှကေို တဈနှဈအတှငျး လှတျငွိမျးခမျြးသာခှငျ့နဲ့ ပွနျလှတျပေးလိုကျ တဲ့ ကိစ်စလို နောငျမှာဖွဈပှားတော့မှာ မဟုတျဘူးလို့ ယုံကွညျကွောငျး စကျတငျဘာ ၂၉ ရကျနကေ့ ကငျြးပတဲ့ ကုလသမဂ်ဂ အထှထှေညေီလာခံမှာ မွနျမာအစိုးရက ပွောကွားလိုကျပါတယျ။
အမရေိကနျနိုငျငံ၊ နယူးယောကျမွို့မှာ နှဈစဉျကငျြးပတဲ့ (၇၅) ကွိမျမွောကျကုလအဖှဲ့ဝငျ နိုငျငံခေါငျးဆောငျမြား မကျြနှာစုံညီ အစညျးအဝေးအတှငျး မနကေ့ အငျတာနကျဗီဒီယိုကနတေဆငျ့ ပွောကွားတဲ့ မိနျ့ခှနျးမှာ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံရုံးဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ့ဆှကေ အခုလို ထညျ့သှငျးပွောလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။ ရာဇဝတျမှုတှအေတှကျ တတိယမွောကျ စကျဘကျ ဆိုငျရာ တရားရုံးကို မကွာခငျမွငျတှရေ့တော့မယျလို့လညျး သူကပွောခဲ့ပါတယျ။
အငျးဒငျကြေးရှာလူသတျမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး အရာရှိတှအေပါအဝငျ တပျမတျောသား ၇ ဦးကို စဈတရားရုံးနဲ့ စဈခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ ၂၀၁၈ ခုနှဈ မတျလမှာ ထောငျဒဏျ ၁၀ နှဈ ခမြှတျခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီနောကျပိုငျး (၂၀၁၈)ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ၊ တဈနှဈတောငျ မပွညျ့သေးတဲ့ကာလအတှငျးမှာ တပျမတျောသားတှကေို ပွနျလှတျပေးခဲ့တာကွောငျ့ ကုလသမဂ်ဂ အရာရှိကွီးတှအေပါအဝငျ နိုငျငံတကာအသိုငျးအဝိုငျးက ဝဖေနျရှုတျခခြဲ့ကွပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/Myanmar-at-UNGA-meeting-inndin-case-09302020151209.html
၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲအတှကျ နိုငျငံတျောအစိုးရပိုငျ ရုပျမွငျသံကွားနှငျ့ သတငျးစာတို့တှငျ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး ရိုကျကူးရနျအတှကျ ရခိုငျ့ဦးဆောငျပါတီ – AFP အနဖွေငျ့ ပါဝငျမညျ မဟုတျတော့ကွောငျး ယငျးပါတီ၏ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးကြျောဇောဦးက ပွောသညျ။
ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ – UEC မှ ခမြှတျထားသညျ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးမြားအတိုငျး လိုကျနာပွီး မဲဆှယျ စညျးရုံးရေးစာတမျးကို ရသေားခဲ့သျောလညျး အနှဈသာရမရှိတော့အောငျ ဖွတျတောကျလိုကျသညျ့ အတှကျ ယငျးအစီစဉျ တှငျမပါဝငျရနျဆုံးဖွတျလိုကျ ခွငျးဖွဈကွောငျးဆိုသညျ။“ကငျြ့ဝတျတှကေို ဖောကျဖကျြကြျောလှနျခွငျးမရှိအောငျ ကနြျောတို့ အသအေခြာရေးကွပါတယျ။ ကနြျောတို့ ရေးပွီးပို့ထားတဲ့ စာကွမျးကို UEC က တျောတျောမြားမြား ဖွတျတောကျပလိုကျတဲ့ အတှကျ အနှဈသာရပိုငျးက မကနျြတော့ဘူးပေါ့နျော။ အဲဒီကွောငျ့ MRTV နဲ့ နိုငျငံပိုငျ သတငျးစာတှကေတဆငျ့ မဲဆှယျ စညျးရုံးမယျ့ ဥစ်စာမှာ မပါဝငျတော့ဖို့ ဆုံးဖွတျတာပါ။”ဟု AFP ပါတီ၊ ဒုတိယဥက်ကဌ ဦးကြျောဇောဦးက ပွောသညျ။
ဖွတျတောကျခံထားရသညျ့အထဲတှငျ ယငျးပါတီတညျထောငျသူ ဒေါကျတာအေးမောငျ၏အမညျ၊ UEC မှ ယခငျက ခှငျ့ပွု ထားပွီးဖွဈသညျ့ ပါတီရညျရှယျခကျြ၊ ဖှဲစညျးပုံနှငျ့ အနာဂတျတှငျလုပျဆောငျမညျ့ လုပျငနျးစဉျမြား၊ လကျရှိ စဈရေးပဋိပက်ခ ကွောငျ့ ဒုက်ခရောကျနကွေရသညျ့ ရခိုငျပွညျသူတို့၏ အခကျခဲမြား ပါဝငျကွောငျး AFP ၏ စာတမျးတှငျဖျောပွ ထားသညျ။ ယခုကဲ့သို ဖွတျတောကျခံရခွငျးမှာ AFP တဈခုတညျးမဟုတျဘဲ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ – ANP နှငျ့ ရခိုငျ့ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ – ALD ပါတီတို့ လညျးပါဝငျကွောငျး အဆိုပါ ပါတီမြားမှ တာဝနျရှိသူအခြို့က ပွောသညျ။ ယခုဖွဈစဉျသညျ UEC နှငျ့ သကျဆိုငျရာပါတီတို့အကွား ဖွဈပျေါသညျ့ ကိစ်စသာဖွဈပွီး ပွညျနယျရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ အနနှေငျ့ တဈစုံတဈရာ ပွောဆိုရနျ မရှိကွောငျး ရခိုငျပွညျနယျ၊ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ ဥက်ကဌ ဒျေါတငျလှိုငျက ပွောသညျ။ http://www .mizzimaburmese.com/article/74013
မွောငျးမွမွို့နယျ ငါးမွငျးခြောငျးကြေးရှာအုပျစု ငါးမွငျးခြောငျးကြေးရှာတှငျ ကရငျအမြိုးသားပါတီက စကျတငျဘာ ၂၉ ရကျ နံနကျပိုငျးတှငျ အောငျနိုငျရေးဆိုငျးဘုတျတငျပှဲအား ကနျြးမာရေးဌာန ညှနျကွားခကျြမြားနှငျ့အညီ ပွုလုပျခဲ့ကွောငျး သတငျး ရရှိသညျ။
ကရငျအမြိုးသားပါတီမှာ မွောငျးမွမွို့နယျတှငျ တိုငျးဒသေကွီး မဲဆန်ဒနယျအမှတျ (၂) နရောတဈခုတှငျသာ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျမညျဖွဈပွီး ယနအေ့ခြိနျထိ ကနျြးမာရဌောန ညှနျကွားခကျြမြားကွောငျ့ လူစုလူဝေးဖွငျ့ ဟောပွောခွငျးမြား မဆောငျ ရှကျနိုငျသေးသျောလညျး ပါတီအောငျနိုငျရေးဆိုငျးဘုတျမြားကိုမူ လိုကျလံစိုကျထူလကျြရှိကွောငျး၊ မဲဆှယျစညျးရုံးရာတှငျ ကနျ့သတျခကျြမြားပွားမှုကွောငျ့ လကျကမျးစာစောငျမြားဝငှေခွငျးမြားကိုပါ လုပျဆောငျရာတှငျ အခကျအခဲမြား ကွုံတှနေ့ေ ရကွောငျးသိရသညျ။
ကြှနျတျောတို့ပါတီကို တပျခြုပျနဲ့ သှားရောကျတှဆေုံ့တဲ့ ၃၄ ပါတီထဲမှာ ပါဝငျတယျဆိုပွီး ထငျယောငျထငျမှားဖွဈအောငျ တိုကျခိုကျခံရတာမြိုးတှလေဲ ရှိနတေယျ။ ကြှနျတျောတို့ကတော့ ပုံမှနျအတိုငျးပဲ ဆကျသှားနပေါတယျ။ အခုထိ လူစုလူဝေးနဲ့ ဟောပွောစညျးရုံးမှုတှေ မလုပျဆောငျသေးဘူး။ လူ ၅၀ အထိ စညျးရုံးခှငျ့ရှိတယျဆိုပမေဲ့ ပွညျသူတှကေို စိုးရိမျပူပနျမှုတှေ မရှိစခေငျြလို့ ကြှနျတျောတို့ တဈအိမျတကျ တဈအိမျဆငျး ပုံစံမြိုးနဲ့ပဲ စညျးရုံးမှုတှေ လုပျဆောငျနပေါတယျ”ဟု မွောငျးမွ မွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ (၂) တှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ကရငျအမြိုးသားပါတီမှ ကိုယျစားလှယျလောငျး စစှဲမကျ က ပွောကွားသညျ။ https://news-eleven.com/article/194354
ကခငျြ စဈပွေးဒုက်ခသညျမြားကိုနရောခထြားသညျ့ မွဈကွီးနား ငှပြေျောစံပွကြေးရှာတှငျ မူးယဈဆေးဝါးရောငျးခမြှုနှငျ့ သုံးစှဲသူမြားလာသျောလညျး သကျဆိုငျရာက ထိရောကျစှာ တာဝနျယူပေးခွငျးမရှိသဖွငျ့ လူငယျမိဘမြားက စိုးရိမျနကွေ သညျ။ မူးယဈဆေးဝါးသုံးစှဲသူမြားလာသောကွောငျ့ ကြေးရှာအတှငျး ခိုးမှု၊ လုယကျမှုမြားလာမညျကိုလညျး စိုးရိမျနကွေ သညျ။“မူးယဈဆေးဝါးကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ရှာမှာရှိတဲ့ လူငယျတှလေညျး ပကျြစီးကုနျပွီ အဖှဲ့အစညျး အသငျးတျောတှမှော ပါဝငျမှုလညျး မရှိကွတော့ဘူး။ ဒါကွောငျ့ မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့ပတျသကျပွီး ဒီလိုဘဲဖွဈနမေယျဆိုရငျ ရှဆေ့ကျ ရောကျလာမဲ့ အခြိနျတှမှော အိမျထောငျတိုငျး ပဋိပက်ခတှနှေငျ့ ကှဲတဲ့သူက ကှဲ၊ ရှာအတှငျးဆိုလညျး ခိုးမှု၊ လုယကျမှုတှနှေငျ့ အရမျးမြားလာ လိမျ့မယျ။” ဟု ငှပြေျောစံပွကြေးရှာဒသေခံ ဦးဇဟဲ ခေါငျဇယျ ကပွောသညျ။
လှနျခဲ့သညျ့ ၂ နှဈခနျ့မှစပွီး မူးယဈဆေးဝါးစတငျဖောငျးပှလာခွငျးဖွဈပွီး သကျဆိုငျရာ အစိုးရဘကျကလညျး ထိရောကျစှာ တာဝနျယူပေးခွငျးမရှိကွောငျး ဒသေခံမြားပွောသညျ။ ကြေးရှာတှငျ မူးယဈဆေးဝါး ဖောငျးပှလာသောကွောငျ့ မိဘမြားက ကလေးမြားကို မွို့ပျေါမှာသာ ထားရှိကွောငျး ဒသေခံ ဒျေါရှယျတောငျ က ပွောသညျ။“ဒီလို နရောမှာ မူးယဈဆေးဝါး ဖောငျးပှနတောကို အစိုးရက ဘာလို့ ဘာမှတာဝနျမယူတာလဲ။ ဘယျလိုတာဝနျယူတယျ ကြှနျမတို့မသိဘူး။ ဒါပမေဲ့ သုံးစှဲတဲ့ သူတှေ၊ ရောငျးတဲ့သူတှရှေိနတေဲ့အတှကျ ကြှနျမတို့အနနေဲ့ ထိထိမိမိတာဝနျယူ လုပျဆောငျနတေယျလို့ မတှရေ့ဘူး။ ဒါ ကွောငျ့ မူးယဈတိုကျဖကျြရေးအဖှဲ့ (Pat Jasan) ဆိုရငျတော့ ကြှနျမတို့ယုံတယျ။ အရှယျ ရောကျလာတဲ့ ကလေးတှအေ တှကျစိုးရိမျတယျ။ ကြှနျမဆို ကြှနျမကလေးတှကေို မွို့မှာဘဲ ထားထားတယျ။ ကွောကျလို့မချေါလာရဲဘူး။”ဟု ပွောသညျ။
“မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့ပတျသကျလာလို့ရှိရငျတော့ အရငျကဒီရှာရောငျးတဲ့သူမရှိရငျတောငျမှ မွို့ထဲက လာရောငျးကွမှာဘဲ။ ရှူတဲ့သူရှိရငျတော့ ရောငျးတဲ့သူတှကေ သူ့အလိုလိုနညျးလမျးပေါငျးစုံနှငျ့ ရောကျလာမှာဘဲလေ။ အဲ့တော့ ဘယျမှာရောငျး နတေယျဆိုတာတော့ ကြှနျတျောမသိဘူး။ ဘယျသူသုံးစှဲနတေယျဆိုတာလညျး ကြှနျတျောတိတိကကြတြော့ မသိဘူး။ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့တော့ သတငျးတိကမြှု၊ ကိုယျ့သားသမီး သောကျသုံးတယျ။ ရောငျးဝယျဖောကျကားတယျဆိုရငျ မိဘ တှကေ အပျနှံရဲတဲ့ သတ်တိရှိရမှာ။ မရှိရငျတော့ ဒီမူးယဈဆေးဝါးက ပြောကျပကျြမှာမဟုတျဘူး။”ဟု ငှပြေျောစံပွကြေးရှာ အုပျခြူပျရေးမှူး ဦးသောငျးဆာကပွောသညျ။ ပလန ကခငျြလူထုမူးယဈတိုကျဖကျြရေးအဖှဲ့ (Pat Jasan) ကလညျး ငှပြေျော ကြေးရှာနှငျ့ လမျးခရီးဝေးသဖွငျ့ အခြိနျမှီ ခကျြခငျြးသှားရောကျ ဖမျးဆီးနိုငျခွငျး မရှိကွောငျးတာဝနျရှိသူမြားပွော သညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/02/%e1%80%84%e1%80 %bd%e 1%80% b1%e1%80%95%e1
ရခိုငျပွညျနယျ၊ မငျးပွားမွို့နယျ မလှေမျးကြေးရှာအနီး ယနေ့ နလေ့ညျပိုငျးက တိုကျပှဲဖွဈပှားလကျြရှိပွီး ကြေးရှာအတှငျး ကညျြကရြောကျမှုမြားရှိကာ လကျနကျကွီး ပဈခတျသံမြားကွားရကွောငျး မငျးပွားမွို့နယျ ရခိုငျပွညျနယျ လှတျတျောကိုယျ စားလှယျ ဦးလှသိနျးအောငျကပွောဆိုသညျ။“နာရီပိုငျးလောကျက မလှေမျးရှာနားမှာ တိုကျပှဲဖွဈတယျဆိုပွီး အဲဒီဖကျက ဒသေခံတဈယောကျက ဖုနျးနဲ့ပွောတာရှိတယျ။ တိုကျပှဲဖွဈနတေယျဆိုပွီးတော့ ဖုနျးနဲ့ဆကျတာတော့ရှိတယျ။ ထိခိုကျ ဒဏျရာရရှိမှုအခွအေနတေော့ မသိရသေးဘူး။ မေးလှမျးရှာကိုတော့ ကညျြတှဘောတှကေတြာတော့ ရှိတယျလို့ကွားတယျ” ဟု ၎င်းငျးကပွောဆိုသညျ။
ရခိုငျတိုငျးရငျးသားမြိုးနှယျမြား အစညျးအရုံး (REC) အတှငျးရေးမှူး ဖွဈသူ ကိုဇျောဇျောထှနျးကလညျး မလှေမျးကြေးရှာအနီး တိုကျပှဲဖွဈပှားနသေညျကို မငျးပွားရှိ REC အဖှဲ့ဝငျတဈဦးပွောဆိုခကျြအရ သိရသျောလညျး အသေးစိတျအခွအေနမြေားကို မသိရှိရသေးကွောငျး ပွောဆိုသညျ။
စကျတငျဘာလ ၃၀ ရကျနကေ့လညျး မငျးပွားမွို့နယျ အတှငျး မလှေမျးကြေးရှာနှငျ့ ဖားပွိုကြေးရှာကွား ဇောကျခြောငျးတှငျ တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့ကာ အောကျတိုဘာလ ၁ရကျနေ့ ယနေ့ နံနကျပိုငျး ရာမောငျတံတားအနီး ဆနှငျးတောငျတှငျလညျး တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး ဒသေခံမြားထံမှ သိရှိရသညျ။ https://www.khitthitnews.com/2020/10/%e1%80%99%e1 %80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80
၂၂။ COVID ကာလ Stay at Home အစီအစဉျကွောငျ့ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ဖားကနျ့ဒသေရှိ သိနျးနှငျ့ ခြီသော ရှေ့ ပွောငျးလုပျသားမြား မဲပေးခှငျ့ဆုံးရှုံးနိုငျဖှယျရှိနေ
COVID ကာလ Stay at Home အစီအစဉျကွောငျ့ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ဖားကနျ့ဒသေရှိ သိနျးနှငျ့ခြီသော ရှပွေ့ောငျးလုပျသားမြားအနဖွေငျ့ မဲပေးခှငျ့ဆုံးရှုံးနိုငျဖှယျရှိနကွေောငျး သတငျးရရှိသညျ။ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ တှငျ ဆန်ဒမဲပေးနိုငျမညျ့ အခွခေံမဲဆန်ဒရှငျစာရငျးကို ဇူလိုငျ ၂၅ ရကျမှ သွဂုတျ ၇ ရကျအထိ ရပျကှကျ၊ ကြေးရှာအုပျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲမြားတှငျ နှဈပတျတာ ကွညောခဲ့သညျ။
ထိုသို့ကွညောရာတှငျ မဲစာရငျးတှငျ အမညျစာရငျး မပါဝငျပါက ပုံစံ (၃) ဖွငျ့ မဲစာရငျးတှငျ အမညျထညျ့သှငျးပေးရနျ တောငျးဆိုနိုငျပွီး မဲစာရငျးတှငျ မပါဝငျသငျ့သူမြား ပါဝငျနလြှေငျ ပုံစံ (၄) ဖွငျ့ ကနျ့ကှကျရနျနှငျ့ မဲစာရငျးပါအခကျြအလကျမြား မှားယှငျးနလြှေငျ ပုံစံ (၄-ဂ) ဖွငျ့ ပွငျဆငျလှာ တငျသှငျးနိုငျကွောငျး ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ထုတျပွနျထား သညျ။
ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ၏ ပထမအကွိမျ မဲစာရငျးကွညောခကျြအရ ဖားကနျ့မွို့နယျတှငျ မဲဆန်ဒရှငျ ၁၆၃၀၀၀ ကြျောရှိ ကွောငျး ဖားကနျ့မွို့နယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျထံမှ သတငျးရရှိသညျ။“ ဖားကနျ့မွို့နယျမှာ အခုထိ မဲစာရငျးမှာ ကွငွော ထားတဲ့စာရငျးဟာ မဲပေးမယျ့သူ ၁၆၃၀၀၀ ကြျောရှိပါတယျ။ ပုံစံ (၃-က) နဲ့ လြှောကျထားမယျ့ အရအေတှကျ ကတော့ မြားနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကာယကံရှငျတှကေ လြှောကျထားမှသာ သိရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဖားကနျ့မွို့နယျမှာတော့ (၃-က) နဲ့ လြှောကျထားတဲ့ အရအေတှကျကတော့ အမြားဆုံးကတော့ ရမေဆေးကြောကျရှာသူတှေ အမြားဆုံးပဲ။ နောကျပွီးတော့ သူတို့နဲ့ ဆကျစပျနတေဲ့ ဈေးရောငျးတဲ့သူတှေ၊ ကုမ်ပဏီဝနျထမျးတှနေဲ့ တာဝနျလာထမျးဆောငျနတေဲ့ ဌာနဆိုငျရာက နိုငျငံတျောဝနျထမျးတှေ၊ နောကျပွီးတော့ စဈတပျ၊ ရဲ၊ တိုကျခိုကျရေး အထူးရဲတပျရငျးတှကေနေ ပွီးတော့ ရှေးကောကျပှဲမှာ မဲပေးမယျဆိုရငျ ပုံစံ (၃-က) နဲ့ လာရောကျလြှောကျထားရမှာ ဖွဈပါတယျ”ဟု မွို့နယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာသိနျးဟနျက ပွောကွားသညျ။
ကခငျြပွညျနယျ ပွညျသူ့ပါတီ (KSPP) အနဖွေငျ့ မွပွေငျဆငျး၍ ကူညီဖွရှေငျးပေးနိုငျရနျ စီစဉျဆောငျရှကျနခြေိနျတှငျ အစိုးရ က ဖားကနျ့မွို့နယျကို Stay at Home ကွညောလိုကျသညျ့အတှကျ လုပျဆောငျပေး၍ မရတော့ကွောငျး ကခငျြပွညျနယျ ပွညျသူ့ပါတီ (KSPP) ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဘရနျရှောငျက ပွောကွားသညျ။ ဖားကနျ့မွို့နယျတှငျ မွို့ပျေါ ခွောကျရပျကှကျ၊ ကြေးရှာ အုပျစုပေါငျး ၂၁ အုပျစုရှိပွီး ကြောကျစိမျးတူးဖျောခှငျ့သကျတမျးရှိ ကုမ်ပဏီ ၇၇ ခုရှိကာ မွနျမာနိုငျငံအရပျရပျမှ လာရောကျ၍ ရမေဆေးကြောကျရှာသူ သိနျးဂဏနျးအထိရှိသညျ့အပွငျ ကုမ်ပဏီဝနျထမျးအမြားအပွား ရှိနသေညျ။ https://news-eleve n.com/article/194369
မွနျမာနိုငျငံ၌ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ဒုတိယအမြားဆုံးဖွဈပှားနသေညျ့ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ စဈဘေးရှောငျစခနျးမြား၌ ဖြားနာသူ မြားပွားလာနသေဖွငျ့ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုပေးရနျလိုအပျနကွေောငျး စဈဘေးရှောငျမြားက ဆိုကွသညျ။
ဒုက်ခသညျဦးရေ ၃၃၂၁ ဦးရှိသညျ့ တိနျညိုစဈဘေးရှောငျစခနျးတှငျ ဖြားနာသူ ၃၀ နှငျ့ ၅၀ ကွားရှိလာကာ ၎င်းငျးတို့မှာ မညျသညျ့ကွောငျ့ ဖြားနာနခွေငျးအား မသိရှိဖွဈနကွေပွီး ဆေးကုသမှုခံယူမညျ့နရောမရှိသဖွငျ့ ဆေးဆိုငျတို့မှ ဆေးမြား ဝယျယူသောကျသုံးနရေကွောငျး စခနျးတာဝနျခံ ဦးဝလှေအောငျထံမှသိရသညျ။“အရငျတုနျးကဆိုရငျ တိနျညိုဆေးရုံကွီးကို သှားပွလိုကျလို့ရတယျ။ ဆေးလညျး အခမဲ့ကုသပေးတာပေါ့နျော၊ ဘာရောဂါဖွဈတယျဆိုတာလညျးသိရတယျ။ အခုက တိနျညိုမှာ ဆေးခနျးသှားပွစရာ ဆရာဝနျလညျးမရှိဘူး”ဟု ၎င်းငျးက ရှငျးပွသညျ။ အလားတူ ဒုက်ခသညျဦးရေ နှဈထောငျ ကြျော ရှိသညျ့ မွောကျဦးမွို့နယျ၊ ပီပငျရငျးစဈဘေးရှောငျစခနျးတှငျလညျး ဖြားနာသူ ၆ ဦးနှငျ့ ခရုရောဂါဖွဈနသေညျ့ အသကျ ၂ နှဈအရှယျကလေးအတှကျ ဆေးကုသရနျ အခကျအခဲ ဖွဈနကွေောငျး စခနျးတာဝနျခံ ဦးကြျောမွသိနျးက ပွောသညျ။
ထိုစခနျးတှငျ စကျတငျဘာလတတိယအပတျက အသကျ (၇၃)နှဈအရှယျရှိ အစာအိမျရောဂါအခံရှိသူ အဖှားတဈဦးမှာ တဈလခနျ့ဖြားနာပွီးနောကျ သဆေုံးသှားခဲ့သညျ။ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနမှ လကျထောကျညှနျကွား ရေးမှူး ဒေါကျတာစိုးဝငျးပိုငျက“တိုကျပှဲ ဖွဈနတေဲ့နရောတှဆေိုရငျတော့ သှားနိုငျမှာမဟုတျဘူး။ ပုံမှနျဆိုရငျတော့ အနညျးဆုံး တဈလမှာ နှဈကွိမျလောကျ ကနျြးမာရေးစောကျရှောကျမှုလုပျပေးတယျ။ ကနြျောတို့အနနေဲ့ကိုဗဈကာလ ဖြားနတေဲ့ သူတှေ ကို Swab ယူပေးထားပါတယျ”ဟု ဆိုသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-75895
တီးတိနျမွို့နယျ၊ ခိုငျကမျးမွို့မှာ သဈတောနယျမွမှော နထေိုငျသူတှကေို ကြူးကြျောအဖွဈသတျမှတျပွီး အိမျတှဖေယျရှား ပေးဖို့ သဈတောဌာနက အမိနျ့စာပို့ အကွောငျးကွားထားပါတယျ။ ခိုငျကမျးမွို့နယျ၊ အမှတျ ၄ ရကျကှကျ၊ ကှဲတံတားရဲ့ အောကျဘကျခွမျးမှာရှိတဲ့ နအေိမျ ၂၆ လုံးကို စကျတငျဘာလ ၂၅ ရကျနကေ့ နောကျဆုံးထား ဖယျရှားခိုငျးတာဖွဈပွီး ဒသေခံတှကေတော့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျပြံ့နှံ့မှု အန်တရာယျရှိနတေဲ့ ကာလဖွဈတာကွောငျ့ ပွောငျးရှဖေို့ အခကျအခဲရှိနေ တယျလို့ ပွောပါတယျ။ ဒသေခံတခြို့ကတော့ နအေိမျကို ပွောငျးရှဖေို့ အခကျအခဲတှရှေိတာကွောငျ့ အတညျတကနြနေိုငျဖို့ ဆန်ဒရှိနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။
စကျတငျဘာ ၁၅ ရကျနကေ့ ကြူးကြျောနအေိမျတှကေ မိသားစုဝငျတှကေို ကိုးမိုငျသဈတောစခနျးမှာ လာချေါခဲ့ပွီး စဈဆေး မေးမွနျးမှုတှေ ပွုလုပျခံခဲ့ရတယျလို့ ဦးထနျလမျမုနျ့က RFA ကို ပွောပါတယျ။“ကြှနျတျောတို့ကို သဈတောကနေ စဈဆေး မေးမွနျးဖို့ချေါပါတယျ။ကြှနျတျောတို့ စညျးစညျးလုံးလုံးနဲ့ ရပျကှကျမှာရှိတဲ့ ဒုက်ခသညျတှပေေါ့ဗြာ၊ အဖှဲ့အစညျးနဲ့ အစိုးရ ကိုးမိုငျသဈတောရုံးကို ရောကျရှိခဲ့တယျ။ သူတို့ စဈဆေးတဲ့အခါကတြော့ မိဘအမညျတို့၊ မှတျပုံတငျနံပါတျတို့၊ ခိုငျကမျးကို ဘယျနှဈခုနှဈက စရောကျသလဲ၊ ကြူးကြျောဘဝကို ဘယျနှခုနှဈကရောကျလဲ ဒါတှမေေးပါတယျ။ ပွီးတော့ နောကျဆုံး အခကျြကတော့ သဈတောကနပွေီးတော့ ဒီမှာကြူးကြျောမွကေို ဖယျရှားမယျ၊ ရှငျးလငျးမယျဆိုပွီးမှ နောကျတဈကွိမျ တတိယအကွိမျ စာပေးခံရရငျ မငျးတို့ ဘယျလိုခံစားခကျြရှိပါသလဲဆိုပွီး မေးမွနျးပါတယျ။ အဲဒါကတြော့ လူကွီးမငျးတို့ရယျ ကြှနျတျောတို့မှာ ခိုလှုံစရာလုံးဝမရှိတဲ့အခါကတြော့ ဖယျတော့ ဖယျရှားခငျြပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ နိုငျငံတျောကလညျး နရောခထြား ပေးတဲ့အထိ ခိုလှုံခှငျ့ပေးပါဆိုပွီးမှ ကြှနျတျောတို့ အသနားခံခဲ့ပါတယျ”ကှဲခြောငျးကူးတံတားရဲ့ အပျေါဘကျက အိမျတှကေ တော့ သဈတောမွကေိုကြူးတဲ့ ပုံစံဖွဈပမေယျ့ ဌာနဆိုငျရာ အသီးသီးက တိုငျပငျပွီး နရောခထြားပေးတာဖွဈတဲ့အတှကျ သူတို့ကို ဖယျရှားခိုငျးတာမြိုးမရှိဘူးလို့ ခငျြးလူမှုရေး တကျကွှလှုပျရှားသူ ကိုဇမျးထှမျးက ပွောပါတယျ။ အဲဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး ခိုငျကမျးမွို့ သဈတောဦးစီးဌာနကို RFA က ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပမေယျ့ လကျခံဖွကွေားခွငျး မရှိပါဘူး။ တီးတိနျမွို့နယျ၊ ခိုငျကမျးမွို့ အထှထှေေ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးလှမြိုးကတော့ နအေိမျတှေ ဖယျရှားဖို့ ကိစ်စကို သဈတောဌာနက ဆောငျရှကျနတောဖွဈပွီး ပွညျနယျအစိုးရက ညှနျကွားခကျြမရှိသးကွောငျး ပွောပါတယျ။ https://www.rfa.org/bur mese/news/chin-slum-house-09302020055838.html
ရခိုငျပွညျနယျ အမျးမွို့နယျတှငျ ပွီးခဲ့သညျ့ စကျတငျဘာလ ၂၇၊ ၂၈ ရကျနတှေ့ငျ လကျပွနျကွိုးခညျြထားသော အမညျမသိ ပိုငျရှငျမရှိသော အလောငျး ၂လောငျးတှရှေိ့ခဲ့ကွောငျး အမျးမွို့နယျ သဘာဝဓာတျငှေ့ ပိုကျလိုငျးရေးရာ စောငျ့ကွညျ့လှုပျရှား ရေးအဖှဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ကိုမြိုးလှငျပွောဆိုသညျ။ အဆိုပါ အလောငျး ၂ လောငျးကို အမျးမွို့နယျအအတှငျးရှိ အိုးပုံကြေးရှာ အနီး မွောကျဦးခြောငျးထဲတှငျ စကျတငျဘာ ၂၇ ရကျနကေ့ အလောငျး ၁လောငျးတှရှေိ့ပွီး စကျတငျဘာ ၂၈ရကျနတှေ့ငျ အမျးခြောငျးဝ ပသောမျောပေါကျတှငျ အလောငျး ၁ လောငျး တှရှေိ့ခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
“ ဒီလ ၂၇ရကျနမှေ့ာ တဈလောငျးတှတေ့ယျပေါ့။ အဲတာက အမျးမွို့နယျ အိုးပုံကြေးရှာ အနီး မွောကျဦးခြောငျးထဲမှာ ပထမဦးဆုံးတှတေဲ့အလောငျးပေါ့။ လကျကို နောကျပွနျတုတျထားတဲ့ တဈလောငျးတှတေ့ယျပေါ့။ ၂၈ ရကျနမှေ့ာပေါ့။ အမျး ခြောငျးဝပေါ့။ ပသောမျောပေါကျမှာ ဒုတိယတဈလောငျးတှတေ့ယျပေါ့။ အဲဒီအလောငျး ၂ လောငျးတှတေ့ာတော့ ရှိတယျ။ ၂၇ ရကျနကေ့ တှတေဲ့အလောငျးကတော့ အမျးရဲစခနျးကနပွေီးတော့ တာဝနျရှိတဲ့သူတှကေ အလောငျးကို သယျယူသှား တယျပေါ့။ ၂၈ ရကျနမှေ့ာ တှတေဲ့အလောငျးကတော့ ၂၉ ရကျနမှေ့ာ ဒသေခံတှကေ မွမွှေုတျလိုကျကတြယျပေါ့။ အဲဒီ အလောငျးက အမျးခြောငျးထဲမှာ မြောနတေဲ့ အခါမှာ အဲဒီခြောငျးကို မှီခိုနရေတဲ့ ရလေုပျသားတှရှေိတယျ။ အဲဒီရလေမျး ကွောငျးကို မှီခိုနရေတဲ့ ဒသေခံတှေ အဲဒီအလောငျးကို မွငျတှတေဲ့အခါ စိုးရိမျစိတျတှေ ထိတျလနျ့စမှေုတှေ မွငျ့တကျနတေဲ့ အနအေထားမှာရှိတဲ့အခါ အဲဒီအလောငျးကို ဒသေခံတှကေ မွမွှေုပျလိုကျတယျပေါ့။ အလောငျး ၂လောငျးလုံးက လကျကို နောကျပွနျကွိုးတုတျထားတယျ” ဟု ကိုမြိုးလှငျက ပွောဆိုသညျ။
“ အလောငျး ၂ လောငျးလုံးကို ခညျြထားတဲ့ ကွိုးကလညျး ပုံစံတူနတေယျပေါ့။ ကြှနျတျော သုံးသပျမိသလောကျဆိုရငျ ဒီ အလောငျး ၂ လောငျးက တဈနရောထဲမှာ ဖွဈတာလား။ ဒီအလောငျး ၂ လောငျးက ဆကျစပျမှုရှိနိုငျတယျလို့ သုံးသပျမိ တယျ။ ဒါပမေယျ့ အလောငျး ၂လောငျးတှတေဲ့ နရောတှကေတော့ တဈနရောနဲ့တဈနရောဝေးတယျ။ ၁ဝမိုငျလောကျတော့ ဝေးတယျပေါ့။ ဒါပမေယျ့ အလောငျး ၂လောငျးတှတေဲ့ ခြောငျးကတော့ တဆကျတညျးပဲ မွောကျဦးခြောငျးက ထှကျတာနဲ့ အမျးခြောငျးကိုရောကျတယျပေါ့။ ခြောငျးကတော့ တဆကျတညျးပေါ့”ဟု ကိုမြိုးလှငျကပွောဆိုသညျ။ အမျးမွို့နယျမှ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါထုမကေလညျး ယငျးဖွဈစဉျကို အငျတာနကျပျေါတှငျတှမွေ့ငျသညျ့အတှကျ သိရှိ ထားသျောလညျး အလောငျးပိုငျရှငျမညျသူဆိုသညျကို မသိရှိရသေးကွောငျး ဆကျလကျ စုံစမျးမေးမွနျးနကွေောငျး ပွောဆို သညျ။ https://www.khitthitnews.com/2020/10/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1
ခငျြးပွညျနယျတောငျပိုငျး ပလကျဝမွို့တှငျ စကျသုံးဆီ (ဒီဇယျ) ပွတျလပျမှုကွောငျ့ အောကျတိုဘာလ ၁ ရကျနညေ့ မှစ၍ လြှပျစဈဓာတျအားဖွနျ့ဖွူးပေးနိုငျတော့မညျမဟုတျကွောငျး ပလကျဝမွို့နယျအုပျခြူပျရေးမှူးထံမှသိရသညျ။
ပလကျဝမွို့လြှပျစဈဓာတျအားဖွနျ့ဖွူးရာတှငျ အသုံးပွုမညျ့ ဒီဇယျ ပီပါ (၁၂၀) လုံးသညျ ဆမီးမွို့တှငျသောငျတငျနပွေီး နယျမွတေညျငွိမျအေးခမျြးမှုမရှိခွငျးကွောငျ့ သယျယူရနျအခကျအခဲဖွဈနကွေသညျဟု ပလကျဝမွို့နယျအုပျခြူပျရေးမှူး ဦးအောငျလောဟာ ကပွောသညျ။“လကျရှိ ကနြျောတို့ဆီမှာ ရှိတဲ့ဟာက ကုနျသှားတယျ၊ ဆမီးမှာ ပီပါ အလုံး ၁၂၀ တော့ရှိ တယျ ဒါပမေယျ့ လမျးကွောငျး မကောငျးသေးလို့မသယျနိုငျသေးတာ၊ အဲဒီလမျးကွောငျးပျေါမှာက ဟိုဘကျအဖှဲ့အစညျး
တှရှေိတယျလေ လမျးကွောငျးရှငျးမှဘဲ တပျကခှငျ့ပွုတာကိုး တဈပတျလောကျရှိပွီစောငျ့နတောကတော့’’ဟု ဦးအောငျလော ဟာ ကပွောသညျ။ မဟာဓာတျအားလိုငျးမရောကျရှိနိုငျသေးသညျ့အတှကျ မွို့နယျလြှပျစဈ ဓာတျအားဖွနျ့ဖွူးရေးဦးစီးဌာနမှ ဒီဇယျဆီအသုံးသော မီးစကျဖွငျ့ ယခငျက တဈရကျလြှငျ (၄) နာရီ လြှပျစဈဓာတျအားဖွနျ့ဖွူးလရှေိ့သညျ။
ပလကျဝမွို့နယျသညျ မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA) တို့ စဈမကျဖွဈပှားရာဒသေဖွဈပွီး ရခိုငျပွညျနယျနှငျ့ ဆမီးမွို့တို့မှ ဆကျသှယျသော လမျးကွောငျးမြားပွတျတောကျသညျ့အတှကျ စကျသုံးဆီအပွငျ စားနပျရိက်ခာမြားလညျး ပွတျ တောကျနဆေဲဖွဈသညျ။ ပွီးခဲ့သညျ့ စကျတငျဘာလ ၁၁ ရကျနကေ့လညျး နယျမွတေညျငွိမျအေးခမျြးမှုမရှိသောကွောငျ့ စကျသုံးဆီမြား သယျယူရနျ အခကျအခဲဖွဈနသေညျ့ အတှကျ ပလကျဝမွို့နယျတှငျ ရကျအတျောကွာလြှပျစဈမီး ပွတျတောကျ ခဲ့ပွီးဖွဈသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-75896
လှိုငျကျောတက်ကသိုလျ စောငျ့ကွညျ့ကွပျမတျတဲ့နရောကနေ ထှကျပွေးဖို့ကွိုးစားခဲ့တဲ့သူကို အလုပျနှငျ့ထောငျဒဏျ (၁)နှဈနှငျ့ (၆)လ ခမြှတျခံရတယျလို့ စကျတငျဘာလ ၂၉ ရကျနကေ့ ကယားပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ရုံးက ထုတျပွနျထားပါတယျ။ စကျတငျဘာလ ၂၁ ရကျနမှေ့ာ ရှမျးပွညျနယျ လားရှိုးမွို့ကနေ လှိုငျကျောမွို့ကို ပွနျလာတာတဲ့ လှိုငျကျောမွို့ နှားလဝိုး ကြေးရှာအုပျစု၊ ထီးပလောခူကြေးရှာမှာ နထေိုငျသူ အမြိုးသား တဈဦးဖွဈပါတယျ။
ထှကျပွေးဖို့ ပွုလုပျနတေဲ့အတှကျ လုံခွုံရေးတာဝနျကြ ရဲတပျဖှဲ့နဲ့ ဝနျထမျးတှကေ တားမွဈပမေယျ့လညျး လုံခွုံရေးတာ ဝနျကြ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျကို ခိုကျရနျပွုပွီး ထှကျပွေးဖို့ ကွိုးစားခဲ့တဲ့အတှကျ သဘာဝဘေးအန်တရာယျဆိုငျရာ စီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒပေုဒျမ ၂၆/၂၉ အရ လှိုငျကောမွို့နယျတရားရုံးကို တရားစှဲဆိုတငျပို့ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ကယားပွညျနယျမှာ သဘာဝဘေးအန်တရာယျ ဆိုငျရာ စီမံခနျ့ခှဲရေးဥပဒဖွေငျ့ အမှုဖှငျ့ တရားစှဲဆိုခံရပွီး ထောငျဒဏျခမြှတျခံရတဲ့ဖွဈစဉျဟာ ပထမဆုံးအကွိမျဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
ကယားပွညျနယျ မွို့နယျအသီးသီး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျ(ဈ)ကွိုတငျကာကှယျရေး စောငျ့ကွညျ့ကွပျမတျတဲ့ Community Based Facility Quarantine ဆောငျရှကျထားရှိမှုမှာ စကျတငျဘာလ ၂၉ရကျနအေ့ထိ လူဦးရေ (၃၆၃)ဦးရှိပွီး ဆေးစဈခကျြအဖွေ စောငျ့ဆိုငျးဆဲလူနာ (၃၆) ဦးရှိတယျလို့ ကယားပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့လူမှုစာမကျြနှာမှာဖျောပွထားခကျြအရ သိရပါတယျ။ https://www.bnionline.net/m m/news-75882
ရခိုငျမွောကျပိုငျးမှာ ကပျဘေးကာလအတှငျး အစိုးရ ထောကျပံ့ငှကေို အပွညျ့အဝမရကွဘူးလို့ မှတျစလငျ ဒုက်ခသညျတှကေ ပွောပါတယျ။ စဈတှမွေို့ ခေါငျးဒုက်ကာ အမှတျ(၂)ဒုက်ခသညျစခနျးက အမညျမဖျောလိုတဲ့ ဒုက်ခသညျတဈဦးက မနကေ့ စခနျး စီမံခနျ့ခှဲရေး ကျောမတီကနတေဆငျ့ ဒုက်ခသညျတှကေို ထောကျပံ့ငှေ ပေးအပျတဲ့အခါ ငှလေေးသောငျးကပျြ ကိုငျဆောငျကာ ဓာတျပုံမှတျတမျးရိုကျကွပွီးနောကျ ငှသေုံးထောငျကိုဖွတျပွီး ကနျြတဲ့သုံးသောငျးခုနှဈထောငျကိုသာ ဒုက်ခသညျတှကေို ပေးခဲ့ ကွတယျလို့ဆိုပါတယျ။
သက်ကယျပွငျဒုက်ခသညျစခနျးနဲ့ အုနျးတောကွီးတောငျ စခနျးတှကေ ဒုက်ခသညျတှကေလညျး အလားတူ ဖွတျတောကျခံရ ပါတယျ။ အုနျးတောကွီးမွောကျ ဒုက်ခသညျစခနျးမှာတော့ အခနျးပေါငျး ၂၇၀၀ ကြျောအနကျ အိမျထောငျစု ၂၁၅ စုဟာ ထောကျပံ့ကွေး ပေးအပျမယျ့ စာရငျးထဲမှာ မပါတာကွောငျ့ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးထံ မနကေ့တငျပွလိုကျကွတယျလို့ စခနျး လူကွီးတဈဦးက ပွောပါတယျ။ အလားတူ တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ ဆငျသပွေငျကြေးရှာကနေ ထိပျထူး ပေါကျကြေးရှာကို ထှကျပွေးခိုလှုံနကွေရတဲ့ မှတျစလငျ အိမျထောငျစု ၇၁ စုအနကျ ၅၇ စုကို ထောကျပံ့ငှေ ပေးအပျရာ မှာလညျး တဈအိမျ ထောငျကို ခုနဈထောငျကပျြစီ ဖွတျတောကျခံရတယျလို့ ရှာသားတှကေ ပွောပါတယျ။
အခုလိုဖွတျတောကျခံရတဲ့ကိစ်စနဲ့ ပတျသကျလို့ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူးထံ ဒုက်ခသညျ ငါးဦးက မနကေ့ သှား ရောကျတိုငျကွားခဲ့ရာမှာ ပွလေညျအောငျဖွရှေငျးပမေယျလို့ အကွောငျးပွနျခဲ့ပမေယျ့ ကြေးရှာကို ပွနျရောကျလာခြိနျမှာ တော့ ကြေးရှာအာဏာပိုငျတှကေ ရှာကနေ နှငျထုတျတာကွောငျ့ ဒီနမေ့နကျမှာတော့ မူလနရေပျ ဆငျသပွေငျရှာကို ပွနျနေ ကွရတယျလို့ ရှာကနေ နှငျထုတျခံရတဲ့ ဦးမာမောကျချေါဘီက RFA ကို ပွောပါတယျ။ ဒုက်ခသညျတှအေတှကျ ထောကျပံ့ ကွေးငှတှေကေို ဘယျသူတှကေ ဖွတျတောကျတယျ ဆိုတာနဲ့ပတျသကျလို့ RFA က ဆကျလကျ စုံစမျးနဆေဲဖွဈပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/refugees-in-sittwe-10012020032254.html
သြှမျးပွညျကိုဗဈ-၁၉ ထိနျးခြုပျရေး နှငျ့ အရေးပျေါတုံ့ပွနျရေး ကျောမတီ မှ ကုနျတငျကား နှငျ့ ခရီးသညျတငျယာဉျမြား ထှကျခှာခှငျ့ (၁၄) ရကျ ပိတျလိုကျကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။ သြှမျးပွညျတှငျးသို့ ကုနျတငျကားနှငျ့ ခရီးသညျတငျယာဉျမြား ဝငျ/ထှကျ သှားလာခှငျ့ကို အောကျတိုဘာ ၁ မှ ၁၄ ရကျထိ ယာယီပိတျထားလိုကျကွောငျး သြှမျးပွညျအစိုးရအဖှဲ့က စကျတငျဘာ (၃၀) ရကျ တှငျ ပွုလုပျသညျ့ သြှမျးပွညျ ကိုဗဈ-၁၉ ထိနျးခြုပျရေး နှငျ့ အရေးပျေါတုံ့ပွနျရေး ကျောမတီ ၌ ဆုံးဖွတျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
“ထောကျခံစာရှိရငျလာလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ထောကျခံစားက ၂ပတျအတှငျး ရောဂါ ကငျးရှငျကွောငျးထောကျခံခကျြ ဖွဈရမယျ”ဟု မူဆယျသဈသီးပှဲရုံပိုငျရှငျ စိုငျးမွငျ့ဘို က သြှမျးသံတျောဆငျ့ကိုပွောသညျ။ မူဆယျမွို့သို့လာမညျ့ ကုနျတငျ ကား သမားမြားအနဖွေငျ့ ကနျြးမာရေး ထောကျခံစာပါရမညျဖွဈကွောငျး၊ ထောကျခံစာပါမှသာလြှငျ ဝငျခှငျ့ပေးမညျ ဖွဈ ကွောငျးသိရသညျ။ မူဆယျ(၁၀၅)မိုငျ ကုနျသှယျရေးဇုနျတှငျ ကားသမားတဦးထံ ကိုဗဈ-၁၉ တှရှေိ့ပွီးနောကျ ယခုကဲ့သို့ တငျးကွပျလိုကျခွငျးဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
သြှမျးပွညျ အတှငျးသို့ အခွားတိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျမြားမှ ကုနျတငျယာဉျမြား ဖွတျသနျးဝငျရောကျလာပါက ကုနျတငျ ယာဉျမောငျးနှငျသညျ့ ယာဉျမောငျး နှငျ့ ယာဉျနောကျလိုကျမြားတှငျ ကနျြးမာရေး နှငျ့ အားကစား ဝနျကွီးဌာနက (၂) ပတျ အတှငျး ထုတျပေးထားသညျ့ Covid-19 ရောဂါ ကငျးရှငျးကွောငျး (Negative) ထောကျခံခကျြ ပါရှိမှသာ ဝငျရောကျဖွတျ သနျးခှငျ့ပွု မညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ သြှမျးပွညျ အတှငျးမှ ကုနျတငျယာဉျမြား အခွားတိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျ မြားသို့ ထှကျခှာခှငျ့ကို ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ အောကျတိုဘာ ၁ ရကျနမှေ့ ၁၄ ရကျထိ ခတ်ေတရပျထားနားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https ://burmese.shannews.org/archives/18730
ကယားပွညျနယျအတှငျး ကိုဗဈ-၁၉ ကာကှယျ၊ ထိနျးခြုပျ၊ တားဆီးရေးဆိုငျရာ လုပျငနျးမြား အောငျမွငျစှာ ဖျောဆောငျ နိုငျရေးအတှကျ လူစုလူဝေး မဖွဈပျေါစရေနျ ပွညျနယျအတှငျးရှိ ခရီးသှားလာမှု၊ လညျပတျမှုမြားသညျ့ အထငျကရ နရော မြားအား ယာယီပိတျထားလိုကျပွီဖွဈကွောငျး ကယားပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့က စကျတငျဘာ ၂၉ ရကျတှငျ သတငျး ထုတျပွနျ သညျ။ ထုတျပွနျခကျြအရ လှိုငျကျော ထီးစဲခါးရတေံခှနျနှငျ့ ကွတျဂူ၊ ဒီးမော့ဆို ငှတေောငျဆညျ၊ ထီးပှငျ့ကနျ၊ ကနျခုနဈဆငျ့၊ ပနျ ပကျကြေးရှာ၊ တနီးလာလဲ၊ ကှိုငျငံနှငျ့ ရပွောအိုငျ(နနျးမယျခုံ)၊ ဖရူဆို ထီးပရူနူဂူနှငျ့ ဆငျဖွူတောငျမြားသို့ လာရောကျ လညျ ပတျခှငျ့အား အောကျတိုဘာ ၁ ရကျမှ အောကျတိုဘာ ၃၁ ရကျထိ ပိတျထားမညျ ဖွဈသညျဟု သိရသညျ။
အဆိုပါ အထငျကရ နရောမြားသညျ အထူးသဖွငျ့ ပွညျနယျပွငျပမှ လာရောကျကွသူတိုငျး သှားရောကျ လညျပတျလရှေိ့ သညျ့ နရောမြား ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ရုံး ညှနျကွားရေးမှူး ဦးကြျောသနျးလငျးက “ကနြျောတို့ ပွညျနယျအတှငျးမှာ ဒီနထေိ့ ရောဂါပိုး လုံးဝမတှရှေိ့သေးတာကွောငျ့ ဒါကိုဆကျထိနျးတဲ့ အနနေဲ့ရော၊ လုံးဝ ဖွဈပှားမှု မရှိအောငျ ကာကှယျတဲ့အနနေဲ့ပါ ခဏပိတျလိုကျ တာပါ” ဟု ဧရာဝတီသို့ အတညျပွု ပွောဆိုသညျ။
ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့၏ ထုတျပွနျခကျြတှငျ အောကျတိုဘာ ၁ လလုံး ကယားပွညျနယျရှိ ခရီးသညျ သယျယူပို့ဆောငျရေး အဝေးပွေးယာဉျလိုငျးမြား ပွေးဆှဲခွငျးကို ရပျဆိုငျးထားပွီး ပွညျနယျအတှငျး ပွေးဆှဲလကျြရှိသော ယဉျလိုငျးမြားကိုမူ ကနျြး မာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန၏ စညျးကမျးခကျြမြားနှငျ့အညီ ပွေးဆှဲခှငျ့ပွုသှားမညျ ဖွဈကွောငျး ဖျောပွထားသညျ။ ကယားပွညျနယျအတှငျးသို့ ပွညျပနိုငျငံမြားမှ ပွနျလညျရောကျရှိလာသူ အားလုံးနှငျ့ နိုငျငံတှငျး မညျသညျ့ ဒသေမှမဆို ဝငျ ရောကျလာသူအားလုံး Community Based Facility Quarantine (၁၄) ရကျ နထေိုငျစပွေီး ဓာတျခှဲနမူနာ (၁) ကွိမျ ရယူ စဈဆေးသှားမညျဖွဈကာ Home Quarantine (၇) ရကျ ထားရှိဆောငျရှကျမညျဟုလညျး သိရသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/30/230798.html
ကရငျပွညျနယျ၊ မွဝတီမွို့ အမှတျ(၅) ရပျကှကျ၊ မွို့ပတျလမျးနေ အသကျ (၃၇)နှဈရှယျ ကိုဗဈအတညျပွုလူနာ အမြိုးသား (၁)ဦး သညျ ကငျဆာရောဂါအခံဖွငျ့ စကျတငျဘာလ ၂၉ ရကျနကေ့ မွဝတီခရိုငျပွညျသူ့ဆေးရုံတှငျ သဆေုံးခဲ့ကွောငျး သိရှိရ သညျ။ Hospital Quarantine ထားရှိကာ စကျတငျဘာ ၂၈ရကျနတှေ့ငျ ၎င်းငျးအား ဓာတျခှဲနမူနာ အာခေါငျတို့ဖတျ(swab) ယူ၍ ပေးပို့စဈဆေးခဲ့ရာ စကျတငျဘာလ(၃၀) ညပိုငျး ထုတျပွနျ ခကျြတှငျ ပါဝငျလာခွငျးဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးမှာ Stay at home ကွညောထားသညျ့ ရနျကုနျမွို့မှ ပွနျလာသူဖွဈသညျ့အတှကျ ၎င်းငျးအား ကိုငျတှယျကုသခဲ့သညျ့ မွဝတီခရိုငျဆေးရုံ ဝနျထမျး အားလုံး Quarantine ဝငျကာ Swab ယူ၍ စဈဆေးသှားမညျဟုလညျး တာဝနျရှိသူမြားက ပွောသညျ။
ငျးအပွငျ ကှယျလှနျသူ၏ ဇနီးဖွဈသော လူနာစောငျ့အမြိုးသမီးမှာ စဈဆေးခကျြအရ Covid- 19 ပိုးမတှရှေိ့သလို Covid-19 ပိုးတှလေူ့နာ သဆေုံးသူနှငျ့ ဇနီးတို့သညျ ရနျကုနျမှဆေးရုံ ဆငျး ပွီး မွဝတီခရိုငျဆေးရုံးကွီးသို့ တိုကျရိုကျ Quarantine ဝငျရောကျခဲ့ခွငျးဖွဈပါသဖွငျ့ ယာဉျမောငျးမှလှဲ၍ အခွားမညျသညျ့ Contact Person မြှမရှိကွောငျး မွဝတီခရိုငျအုပျခြုပျရေး မှူး ဦးတဇောအောငျက ပွောသညျ။
မွဝတီမွို့ အမှတျ(၂)ရပျကှကျ ခှနျဆာဝငျးနေ ထိုငျးပွနျ အသကျ ၂ နှဈ က လေးငယျ (၁)ဦးမှာ ရောဂါပိုးကငျးစငျ၍ ဆေးရုံမှ ဆငျးခှငျ့ရခဲ့ပွီဖွဈသညျ။ ယခု နောကျဆုံး ပိုးတှေ့ အသကျ (၃၇)နှဈအရှယျ အမြိုးသား(၁)ဦးမှာ သဆေုံးခဲ့၍ လကျရှိတှငျ မွဝတီခရိုငျ ပွညျသူ့ဆေးရုံ၌ covid-19 ပိုးတှေ့ အတညျပွုလူနာ (၃)ဦးအား သီးသနျ့ဆောငျတှငျ ဆေးဝါကု သမှု ခံယူလကျြရှိကွောငျး သိရသညျ။ http://kicne ws.org/2020/10/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%9d%e1% 80%90%e1%80%ae%e1%8
ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး တညျဆောကျနတေဲ့ စဈတှဆေိပျကမျး ၂၀၂၁ ခုနှဈ ပထမ သုံးလပတျအတှငျး လုပျငနျး စတငျ လညျပတျနိုငျဖို့ မွနျမာနဲ့ အိန်ဒိယ ပူးတှဲ ကွိုးပမျးနတေယျလို့ အိန်ဒိယ နိုငျငံခွားရေး အတှငျးဝနျ Harsh Shringla က ပွောပါ တယျ။ ကွာပသတေးနကေ့ ပွုလုပျတဲ့ အိန်ဒိယ-မွနျမာ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာနတှေ အကွား ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးပှဲမှာ မွနျမာ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာန အမွဲတမျး အတှငျးဝနျ ဦးစိုးဟနျနဲ့ ဆှေးနှေးအပွီး အိန်ဒိယ ဘကျက အခုလို ပွောကွားလိုကျတာပါ။ အိန်ဒိယကနေ မွနျမာနိုငျငံကို ဖွတျ ကြျောပွီး ထိုငျးနိုငျငံအထိ ဆကျသှယျမယျ့ သုံးနိုငျငံ အဝေးပွေးလမျးတညျဆောကျရာမှာ ပါဝငျတဲ့ တံတား ၆၉ စငျးတညျဆောကျရေး တငျဒါ ချေါယူရေး လုပျငနျးတှကေိုတှလေညျး မကွာခငျ စတငျတော့မယျလို့ Shringla က ပွောပါတယျ။စဈတှဆေိပျကမျးတညျဆောကျရေးက ကုလားတနျမွဈ ဘကျစုံ စီမံကိနျးရဲ့ တစိတျတဒသေ ဖွဈပါတယျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ ကုနျးတှငျးပိတျ အရှမွေ့ောကျဘကျ ပွညျနယျတှေ မီဇိုရမျ ပွညျနယျကတဆငျ့ ပငျလယျထှကျပေါကျ ရရှိရေးအတှကျ အရေးပါတဲ့ စီမံကိနျး ဖွဈပါတယျ။ ပုဂ်ဂလိက ကုမ်ပဏီတှနေဲ့ ဆိပျကမျးလုပျငနျးတှေ စတငျနိုငျတဲ့အခါမှာ အိန်ဒိယ ကုနျပစ်စညျး တှကေို ကုလားတနျမွဈကတဆငျ့ စဈတှဆေိပျကမျးအရောကျပေးပို့နိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ လုံခွုံရေးဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျ ရှကျမှုတှေ တိုးမွှငျ့နိုငျတဲ့အကွောငျးနဲ့ နှဈနိုငျငံအကွား တရားခံလှဲပွောငျးပေးရေး သဘောတူညီခကျြ ရနိုငျဖို့ မွနျမာနိုငျငံ ဘကျက အရှိနျမွှငျ့ လုပျဆောငျပေးဖို့ကိုလညျး အိန်ဒိယ နိုငျငံခွားရေး အတှငျးဝနျက တောငျးဆို ထားပါတယျ။
ရခိုငျအရေးကိစ်စကိုလညျး ဆှေးနှေးခဲ့ရာမှာ အိန်ဒိယအနနေဲ့ မွနျမာနဲ့ ဂပြနျနိုငျငံနဲ့အတူ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး သုံးနိုငျငံ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရေးလုပျငနျးတှမှော ပါဝငျလာခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ ပွညျတှငျးက အိုးအိမျစှနျ့ခှာ ရှပွေ့ောငျးနထေိုငျရသူတှေ ဘေးရနျကငျးကငျးနဲ့ စောစီးစှာ နရေပျပွနျနိုငျရေးအတှကျ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျနတေယျလို့လညျး အိန်ဒိယ နိုငျငံခွားရေး အတှငျးဝနျ Shringla က ပွောပါ တယျ။ https://burmese.voanews. com/a/sittwe-india-myanmar-project-/5605 881.html
ပွညျတှငျး ကူးစကျမှုမွငျ့မားလကျြရှိသော ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးမှ မွဝတီမွို့သို့ ရောကျရှိလာသူ (၃)ဦးထံမှ Covid-19 ရောဂါပိုးတှရှေိ့၍ မွဝတီခရိုငျပွညျသူ့ဆေးရုံတှငျ ဆေးကုသမှု ပေးထားပွီး ၎င်းငျးတို့နှငျ့ ထိတှခေဲ့သူ (၇၀) ဦးခနျ့အား Quarantine ထားရှိကာ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုမြား ပွုလုပျသှားမညျဟု မွဝတီခရိုငျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးတဇောအောငျက ပွောသညျ။
ရနျကုနျမွို့မှ စကျတငျဘာ ၁၆ ရကျနကေ့ ပွနျလာပွီး ၂၃ ရကျနကေ့ မွဝတီခရိုငျဆေးရုံတှငျ ပဏာမ စဈဆေး စဉျ Covid-19 ရောဂါပိုးတှရှေိ့သူ မွဝတီမွို့ သင်ျဃနျးညီနောငျ မွို့သဈ ၇ လမျးမှ အသကျ ၄၇ နှဈအရှယျ အမြိုး သမီး (၁)ဦး၊ စကျတငျဘာ လ ၁၈ ရကျနကေ့ ရနျကုနျမွို့မှ မွဝတီမွို့သို့ရောကျရှိပွီး ၂၀ ရကျနတှေ့ငျ မွဝတီ အ ထက(၁) Quarantine Center တှငျ အသှားအလာကနျ့သတျထားသူ အသကျ(၂၁)အရှယျ အမြိုးသား(၁)ဦး နှငျ့ စကျတငျဘာလ ၁၆ ရကျနကေ့ ရနျကုနျမွို့မှ မွဝတီမွို့သို့ရောကျရှိပွီး ဟိုတယျတဈခုတှငျ တညျးခိုနထေိုငျပွီး စကျတငျဘာလ ၂၂ ရကျနတှေ့ငျ မွဝတီ အ.ထ.က(၁) Quarantine Center တှငျ အသှားအလာ ကနျ့သတျထားသူ အသကျ (၅၆)နှဈ အရှယျ အမြိုးသား(၁)ဦး စုစုပေါငျး ကိုဗဈ အတညျပွုလူနာ (၃)ဦးကို သီးသနျ့ထားရှိကာ ဆေးဝါးကုသမှုပွုလုပျနကွေောငျး ဦးတဇောအောငျက ပွောသညျ။ ယငျးတို့ ၃ ဦးနှငျ့ ထိတှခေဲ့သညျ့ contact persons စုစုပေါငျး (၇၀)ဦးခနျ့အား မွဝတီမွို့ တိုးခြဲ့ မဲကနယျ Quarantine Center တှငျ သီးသနျ့ထားရှိကာ လိုအပျသညျ့ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုမြား ပွုလုပျသှား မညျဟု မွဝတီခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူးက ဆကျပွော သညျ။
“ရနျကုနျတိုငျး ဒသေကွီးအပါအဝငျ stay at home သတျမှတျထားတဲ့ မွို့နယျတှကေ ပွနျလာသူတှကေို မွဝတီမွို့အဝငျ သင်ျဃနျးညီနောငျစဈဆေးရေးဂိတျမှာ စကျတငျဘာလ ၂၃ ရကျနမှေ့ စပွီး ပိုမိုတငျးကွပျကာ စဈဆေးမှုမြားပွုလုပျပွီး မွဝတီ အ.ထ.က(၁) ကြောငျးမှာ ဖှငျ့လှဈထားတဲ့ Quarantine စခနျးမှာ ထားရှိပွီး လိုအပျတဲ့ ကနျြးမာရေးစောငျ့ကွညျ့မှုတှေ ပွုလုပျလကျြရှိပါတယျ”ဟု ခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးတဇောအောငျက ပွောသညျ။ http://kicnews.org/2020/09/%e1% 80%bb%e1%80%99%e1%80%9d%e1%80% 90%e1%80% ae%e1%